Anyị Kwesịrị Ịkwaga On? — njem Lee - Official Site
Amaara m na e nwere ọtụtụ ndị eche ihe mere na nke a karịsịa nwerela weghaara uche nke ọtụtụ. Ndị ọzọ na-eche ihe mere na ụfọdụ nwa folks bụ otú ngwa ngwa imeebere Trayvon Martin, n'agbanyeghị eziokwu na o nwere nsogbu nke ya onwe ya. Ka emechara, onye ọ bụla nke anyị nọ n'ebe na anyị amaghị kpọmkwem ihe mere. Mgbe nke ahụ bụ eziokwu, M ahụ onwe m n'ụzọ mmetụta uche nyekwara ke ofụri gbakee. M ike na-ekwu okwu maka mmadụ nile, ma m nwere ike ịgwa gị ihe mere m chọpụtara na m na-egosi ọmịiko na Trayvon na Martin ezinụlọ.
Mgbe m na-anụ banyere a-eto eto nwa afọ iri na ụma-eje ije n'ụlọ si ụlọ ahịa, na nwoke ahu weere ya na ọ bụ onye omempụ tupu maara ihe ọ bụla banyere ya, M pụrụ. Nwere ike ị gaghị enwe ike. Ma eleghị anya, ị na mgbe e soro gburugburu na a ngalaba ụlọ ahịa site a nche maka dịghị ihe mere. Enwere m. Ma eleghị anya, ị na mgbe nwere a adaba ụlọ ahịa ukochukwu Chịa na ị na-ahapụ, o chere na ndị blackberry na gị hip dị a egbe na ị na-eme atụmatụ gbaa ya. Enwere m.
Ma eleghị anya, ị na mgbe mụmụrụ ọnụ ọchị ma kelee ndị mmadụ na ị na-agafe n'okporo ámá, naanị ka ha zere anya, ipigide ha nwere, na ngwa ngwa ahụ pụọ. Enwere m. Ma eleghị anya, ị na mgbe e kewapụrụ megide mgbidi, ẹkenịmde ke amụ, na handcuffed site uwe ojii (ndị na-azọrọ na e-echebe gị) n'ihi na i "anya dị ka a na-enyo enyo anyị na-achọ.” Enwere m (na m lere anya ihe ọ bụla dị ka nke ahụ na-enyo enyo). Ihe ndị a nile mere na-adị obere ma na ọ dịghị nke ha budata egwu ná ndụ m. kasị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe niile, nke m nwa enyi ndidi ụdị nsogbu ahụ. Na ọtụtụ ndị ọzọ otú diri ọtụtụ, ọtụtụ ihe ka njọ.
Ọ bụrụ na ị na mgbe nwere a ụdị ihe, i nwere ike ịghọta ihe mere nke a resonates n'ahụ nke ukwuu na anyị. Ma mgbe m na-anụ akụkọ ya, M na-anụ akụkọ m. Na nna m na akụkọ. Na nwa m nwoke akụkọ. M enweghị echiche ihe mere mgbe Mr. Zimmerman mere echiche banyere nke ahụ nwa okorobịa, ma tupu altercation, ọ dịghị ihe pụrụ iche banyere ihe ahụ merenụ. Ọ na-eme ọ bụla otu ụbọchị.
Àgwà dị adị, na ọ bụ mgbe agbụrụ. Ụfọdụ ndị na-eche na ha nwere onyinye nke chọpụtara agwa dị nnọọ site na-achọ na onye. Dị nnọọ ka a gbara ọchịchịrị-acha anụnụ anụnụ edo na baajị pụtara na ndị mmanye iwu, ọchịchịrị akpụkpọ a hoodie pụtara na-ada iwu. Ọ dịghị ụka mere, ma ihe e chepụtara echepụta RAP mpempe akwụkwọ na-mmasị. Eme ihe ike agwa na-ẹkekerede. Ha na-eche banyere officer image ha hụrụ na TV, ma ọ bụ ihe ize ndụ ndị mụrụ ha gwara ha banyere, ma ọ bụ ndị jọgburu onwe mpụ ha hụsịrị - na ha na-etinye niile na ibu na a mmadụ ha na-na na mgbe ọbụna zutere. Ọ dịghị mgbe anyị nwere ikike na-ise ezighị ezi banyere ihe a person- ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-atụgharị si na-echegbu.
Ndị a iche iche nke echiche rụrụ arụ ma ụgha. Chineke mere ka ihe niile mmadụ n'onyinyo Ya na ọnụahịa. Ma ihe niile na-eme mmehie na ghara igosipụta Chineke image dị ka anyị kwesịrị. Ọ bụla otu n'ime anyị nwere ike atụgharị ná mmehie anyị, ntụkwasị obi Christ, na-eme ka mmadụ nri site na Onye Okike anyị. Ma ịkpa ókè agbụrụ họpụta mmadụ na-ahọrọ nke ndị mmadụ eziokwu ndị a ga-na etinyere na-. Racism na-ekwu,, "M na bara uru na mma, na ndị nile na ndị dị njọ.”
Nke a nganga nke gụnyere enupụrụ Chineke isi ma na-emegide ya Gospel kwesịrị ịmasị ndị Chineke. Anyị ekwesịghị ileghara ya anya, na anyị ekwesịghị-atụ egwu ka i lebara ya. The Good News bụ na Jizọs nwụrụ maka ma akpa ókè agbụrụ na-abụghị akpa ókè agbụrụ mmehie. Ndị bụbu ndị iro nwere ike ịghọ ndị enyi na Ya, na-erite uru site kpọmkwem otu ihe ahụ amara. Ònye ga-kwụpụ elu, n'okwu a, na-akpọsa eziokwu? Ma ma ọ bụ na ị na-eche mba bụ ihe na nke a, ị ghara ghara na agbụrụ bụ ihe na-eme ná ndụ nke ọtụtụ n'ime anyị kwa ụbọchị.
Gịnị Ka Anyị Na-eme Ugbu a?
Ya mere, olee ihe anyị kwesịrị ime? Ma eleghị anya, anyị kwesịrị ịga na na n'otu uzo. Ma eleghị anya, anyị kwesịrị ịkwụsị ịrụ ụka banyere onye stof na anyị n'aka. Anyị amaghị ọ bụla otu nju nke na abalị; ma ọ bụghị na anyị ga na a na-akpọ ka ndị àmà. Na ma ma ọ bụ na anyị nwere mmasị mkpebi, ọ bụ nke anyị aka.
Ma eleghị anya, anyị kwesịrị ịkwụsị-arụ ụka, na-amalite na-ekpe ekpere. Kpee ekpere maka ezinụlọ. Ekpe ekpere na Chineke ga-emezu nkwa Ya si zite Ọkpara ya mee ka ikpe ziri ezi. The Onyenwe anyị ekwesịghị ọkàiwu na-arụ ụka ha ikpe, na Ọ dịghị ya mkpa àmà e nyere. Ọ dịghị mkpa maka jurors inye Ya ha n'ọnọdụ. Ọ na-ahụ ihe niile, maara niile, na ndị ikpe na ikpe ziri ezi.
Ma n'udi ozo, anyị kasị maa ghara ịdịrị. Anyị kwesịrị ịkwụsị ekwu okwu banyere ịkpa ókè agbụrụ bụ nke ka na-ezo n'ebe anyị na ụwa. Ọ bụrụ na ị nwetara ya, enyere ndị na-mebeghị ịghọta. Nwee ndidi na ndị enyi gị ka ha na clumsily achọ si aghọta ihe ị na-arahụ site na. Na biko, unu gosi ha aka nri site n'imezu-adịghị mma stereotypes. Trust Christ, na-ekpe ekpere Chineke ga-akpụzi gị agwa ka iyi nnọọ Ya.
Ọ bụrụ na ị na mgbe kemgbe ke ndibọbọ ọgwụgwụ nke ịkpa ókè agbụrụ, imeebere ndị nwere. Ịmụta banyere ahụmahụ ha. Ị nwere ike ghara hụrụ mmadụ n'anya ma ọ bụrụ na ị na-eleghara ma ọ bụ ledaa ya anya nchegbu ha. Biko dịghị mgbe ewere ya na ndị na-dị nnọọ mkpesa ma na-akpọ ndị "agbụrụ kaadị.” Na-achọ ịghọta ha, ma na-akwanyere eziokwu na ụfọdụ n'ime anyị na-ebi dị iche iche a na-aghaghị idi iche iche ọnwụnwa.
Ihe ọ bụla ị na-eme, dị nnọọ adịghị akwụsị ikwu okwu banyere ya.
jonathansampson • August 19, 2013 na 10:09 Abụ • zaghachi
T.L., O wutere m na ị na na na site na ụfọdụ ike ike stof, ma nke a kpọmkwem bụ a echiche nke ịkpa ókè agbụrụ na America. George bụ ọbụna n'aka nke Trayvon si mba ruo mgbe e mesịrị na 911 oku na-aga, mgbe Trayvon malite ije ije n'ebe ya direction. Trayvon anya dị ka enyo n'ihi na anyị na-eje ije n'etiti ihe n'azụ ụlọ, pụtara na-achọ n'ime windows. Cheta, a obodo nwere a eriri nke okpukpu-ins na burglaries. Ọ bụ ya mere Trayvon anya enyo. E ji na-eje ije si agafe n'akụkụ ụzọ na ìhè nke obodo n'okporo ámá-oriọna, George agaghị batted anya.
M na-eche egwu na a na-eto eto onye nwụrụ; ma m na-eche ihe ndị ọzọ egwu site niile na soro ka a N'ihi nke a na-gosiri dị ka ihe atụ nke ịkpa ókè agbụrụ. Ise nwa na-eto eto na Baltimore ẹkenịmde a Hispanic nwoke na amụ ụnyaahụ na-eti ya ihe “maka Trayvon.” LAPD e anabatakwa obere riots kemgbe mkpebi nke bụghị ikpe bịara na. Nke a adịgboroja ịkpa ókè agbụrụ bụ na-asọ oyi, na na ọ na-ewute ndị mmadụ, bụghị na-enyere ha.
Ihe na-ewute m na-bụ na a stof anaghị nnọọ eme ka nwa ndị mmadụ. M na-emeso nnọọ merụsịrị m nwa ọgbọ n'etiti ụlọ akwụkwọ. Tripped ala bleachers, ike emegbu, na emo. Dị nnọọ a ọnwa ole na ole gara aga, m gara ihe niile na-nwa-nwoke na mahadum campus ebe m na-ewepụta onwe maka Black Girls Code. Dị nnọọ na-agbalị na-eje ije na ụgbọala m m zutere na mkparị na egwu si mahadum ụmụ nwoke ndị na-eche m bụ na ha campus.
A nne a ọnwa ole na ole gara aga ebe a na Georgia bịakwutere a 17 afọ na 14 otu afọ (ọzọ, ma nwa) na 9am ndị gbara ya na ụkwụ, na ya 13 ọnwa agadi na nwa na ihu. Nke ahụ pụrụ ịbụ ihe mere ndị mmadụ freak si mgbe ụfọdụ. Ọ ga-abụ na uwe? Ọ pụrụ ịbụ na hip iwuli elu ọdịbendị na-freaks ndị mmadụ? O nwere ike ịbụ. (Mwute ma ọ bụrụ na ezi, ma kwere nghọta).
Ihe ọ bụla nke bụ, M na-atụ na-ekpe ekpere maka a ngwọta nke ga-enyere anyị zọpụta ndụ anyị na ụmụaka, n'agbanyeghị agbụrụ ha. M mwute ọzọ na ị na na na site na ụfọdụ ike ike ugboro, ma na-eme ka a Trayvon / Zimmerman ikpe banyere agbụrụ dịghị aka nghọta anyị, ya ígwé ojii ya.
YOURSTRULY • August 19, 2013 na 10:10 Abụ • zaghachi
Magburu onwe uche na ọma tinye. Racism ka transitioned na aghọwo a dum ọhụrụ ihe “àgwà” na-eme n'etiti ndị na-ewere onwe ha dị iche iche. The Ihọd na a uwe na girl na a thong ect… àgwà dị ebe niile na-esi ike kpafuo, Ọ dịghị aba bụ na ọ nanị agba nke ndị akpụkpọ. Ànyị na-anwa anwa kwuo okwu ndị ọzọ ihe na ajọ agbụrụ mpụ ime ihe ike. Gịnị mere onye a? Anyị nwere ike na-enwe olileanya na ịkpa ókè agbụrụ na-adịghị aka iso dị ka a scapegoat na ndị mmadụ nwere ike nwere ruo ihe ndị ọzọ obi erughị ala na onwe ha na-anabata onye ọ bụla ọzọ. Àgwà dị mwute, ma ọbụna Trayvon profiled “ọcha crackers”. Ya mere na-ahapụ-adịghị n'akụkụ, ma hụ ihe niile akụkụ. Beyond a ezi uche obi abụọ, bụghị ikpe.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 na 10:11 Abụ • zaghachi
Ihe na-ewute m bụ na anyị bụ ndị ji adị ngwa kwere ụgha George Zimmerman gwara banyere otú Trayvon Martin na-achọ n'ime windo ndị a n'ụlọ ke a obodo. ọzọ, ọ dịghị onye n'ime anyị bụ n'ebe ahụ, ma Chineke hụrụ na dum gbakee na ọ ga-gua n'iru Ya, Ya naanị. Gịnị irks m bụ eziokwu na anyị nwere na-aga azụ na-apụta na a dum ihe banyere nke a nwa onye na-eme mpụ a megide nke a na-acha ọcha onye ma ihe ọ bụla e mere. Nke ahụ abụghị na-arụpụta na niile. M na-anụ mkpu banyere ruuru oru na-etinye aka na-eme ka nke a banyere agbụrụ, anyị niile na-egwu a akụkụ. M erube gị na gị nke kwesịrị na mgbasa ozi na-adịghị ruuru oru ma ọ bụ ndị ọzọ ndị na-aghọta na mba na-egwuri a ibu ọrụ karịa ka a na-kwetara. Ị hụrụ, usoro mgbasa ozi na-eto nke ọma na-eke eneni dị ka ọ bụ ihe ọma n'ihi ha ratings. Ikpeazụ m enyocha, isi media outlets e ekesịpde amachaghị. Ọ bụ ịhụnanya nke ego na nke ahụ bụ mkpọrọgwụ nke ihe ọjọọ. Mgbe anyị na-dị ka a ndị mmadụ mkpa bụ na-eme ka a uru ka megide ihe ọjọọ anyị na-emenụ, otu, e nwere nnukwu nsogbu na na. M ụtọ na m na-ekwu na m a mụrụ ọzọ nwa Chineke. Na-adịghị na-ekwu na m atụfu ihe si na windo. Nke ahụ bụ na-ekwu na ndị bụ eziokwu bụ mgbe niile na-anabata n'agbanyeghị agbụrụ. The aghara aghara-abụghị eziokwu banyere gwara megide nwa okorobịa a na, n'agbanyeghị nke ya gara aga, na ikenenke characterizations nke ya onwe ya na ọbụna Rachel Jeantel, niile na-aga iji gosi na agbụrụ na-eme ihe. Ọ na-afụ ụfụ m obi m na nke a ikpe biri ụzọ ya mere n'ihi na Trayvon Martin yiri ka e gburu ugboro abụọ. The ezigbo mwute bụ eziokwu bụ, e nwere ụkọ nke ọmịiko n'ihi na a na nwa, n'agbanyeghị nke gị echiche banyere ya, tụfuru ndụ ya echiche na ọ na-adịghị mkpa bụ ihe ya agbụrụ bụ. Ọ dịghị ego nke-arụ ụka ga-eme ka Trayvon azụ na ọ dịghị ego nke mkpesa a na-aga ime ka a nkwenye ya na-egbu ọchụ. Ihe anyị chọrọ ime bụ n'ezie inwekwu ọmịiko n'ebe ọ bụla ọzọ na-ajụ onwe anyị, ihe ma ọ bụrụ na na-ama m na nwa ma ọ bụ ọzọ hụrụ n'anya. N'agbanyeghị onye na perpetrator bụ ma ọ bụ bụ, ị ga-ka na-eche otú ahụ? Dị nnọọ n'ihi na FL nwere a iwu apụtaghị na iwu trumps okwu Chineke. Gịnị mere na i gaghi-egbu? Chineke ikpe ziri ezi ga-enwe mmeri mgbe nile. ugbu a, M ga-anọdụ ala azụ na-echere ịhụ onye ga-anụ ma ọ bụ ghọta na obi nke a post ma na-agbalị akwụkwọ m na ihe mere ha ji na-eche ihe ndị Jeremaya ka na-na-fụọ si hà.
jonathansampson • August 19, 2013 na 10:11 Abụ • zaghachi
Ị na-ekweta na ọ dịghị nke anyị nọ n'ebe, ma na-ekwu na George dina banyere Trayvon achọ enyo. Ọ bụrụ na ị bụghị e, ihe mgbakwasị ị nwere maka akpọ George a ụgha?
Olee ebe ị ga-esi na echiche na mba na-egwuri a akụkụ a? George mentored black ụmụaka, were a black girl na prom, ma na enyi na-akwanyere ùgwù ndị ọzọ ojii na ya obi onye gbara akaebe na ọ bụ nwoke ọma agwa.
My beef bụ n'ezie na media, ndị bịara nri si n'ọnu-uzọ na mba-baiting site akpọ Zimmerman a “acha ọcha-Spain,” ka na-amalite a ọkụ n'agbata ojii na ndị ọcha. Ka emechara, ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla eneni, ha nwere ike adịghị ere ad ohere.
M n'aka na ọ bụrụ na George na Trayvon nwere ike na-aga azụ na-aga site na mgbede, ha ga-ma na-eme ihe dị iche iche. Nke a adịghị agbanwe eziokwu ahụ Trayvon (bụghị a okoro, ma a nwoke) nwụrụ mgbe gafere Zimmerman, slamming isi ya n'ime ihe ugboro ugboro. Nke a mụrụ nke na-egosi na-egosi na ahihia stains na Zimmerman si azụ, nakwa dị ka anya-àmà àmà na Zimmerman bụ na ala.
M wutere ọnwụ nke a na nwa, kama m na ihe na-ewute site ntụziaka na ndụ na nwa na a kpọlitere na na gburugburu. Ka Jeantel kwuru n'ụzọ doro anya, ọ na-abịa site na ebe na-acha ọcha ndị mmadụ ga-aghọta. A ebe-eto eto na routinely sịga ite, a ebe ndị ọcha na-akpọ “crackers”, na ndị ọzọ. Nke a hip-iwuli elu ndụ na-aga na-na-egbu si ụmụaka.
M na-akpa a na nwa agbọghọ mgbe m bi na Chattanooga afọ azụ onye nsogbu ya ọgbọ n'ihi na ọ bụ “eme ọcha” na-achụ akwụkwọ. Olee ebe echiche na-abịa site? N'ezie, ọ bụghị ndị kpatara nke ndị ọcha na-eto eto na nwa na ụmụ na-mkparị ndị ọzọ na-eto eto na nwa ụmụ agbalị Excel ndụ.
M na-agbalị ime m na-enyere. Dị ka a software engineer m wepụtara onwe na aka gbasaa a ịhụnanya maka technology na mmemme n'etiti-eto eto na nwa Atlanta dabeere ụmụ agbọghọ, na-arụ ọrụ ebube, atumatu dị ka Black Girls Code. Right now a niile ụmụaka nwere anya ruo bụ njakịrị dị ka Nikki Minaj, na wannabe-Nelly rapping banyere mmekọahụ, ego, na akpụkpọ ụkwụ.
Anyị na-emeghị-eto eto anyị black ụmụaka.
Gịnị mere ekwusa na ị dere a black girl mgbe ị dị na Chattanooga ozi? Ị nwere iji gwa ya na m ka m na-akwanyere gị chere. Nke ahụ bụ ihe na-bụ nanị pụta ụwa. The eziokwu na ị na-enyere nwa na nwa na-eto eto anaghị-emekwa ka unu iche n'ebe ihe ọ bụla ọzọ na-acha ọcha ụmụ amaala ma. Ana m ekwu na nke ahụ pụtara ma ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù ma ọ bụ awfully enyo enyo. The nwa agbọghọ na ị na-eji na-na ụbọchị bụ bụghị naanị nwa onye na-ata ahụhụ ọ bụla ụdị na-akwa emo ma ọ bụ site na a na-acha ọcha onye, a nwa onye, ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ. ugbu a, M asị na anyị anọghị n'ebe. Ma, ị ọkọ a ụgha, gị mgbe niile na-ahụ a ohi. Dị nnọọ n'ihi na George Zimmerman kwuru ihe ndị ahụ nile banyere inwe nwa enyi, na nlekota black ụmụaka, ọzọ, apụtaghị a ihe. Mgbe nụrụ okwu ihu abụọ? Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na mmiri na-ezo, m na-agbalị iji nweta home, M na-adịghị oge ka peeking na onye ọ bụla windo. Ma ọ bụrụ na m dị nnọọ gburu onye na m chere bụ enyo, M ga-eme m kasị mma na-akọwa na ndị suspicions. Ọ na-akpọ embellishing eziokwu. Ná ngwụsị nke ụbọchị, ọ bụghị na ihu m. ọ ga; Otú ọ dị, na-eche ihu Chineke, Ee ọ tọhapụrụ, na ezie na m edikpu na mkpebi, gị ma onye ọ bụla ọzọ nwere ike ziri ezi n'ebe eziokwu na mba na-ekere òkè nke a merenụ; na-ekpe ikpe, na media, na ọbụna ugbu a. Ọ bụrụ na mba adịghị egwu a akụkụ, onye ọ bụla nke ndị a na-ekwu ga-ekwu okwu banyere ya nke ukwuu. Ma ọ bụghị naanị site na nwa ndị mmadụ. Ọ bụ ihe ịtụnanya na m na ị na-ekwu banyere ndị RAP oyiyi na ụmụaka na-achọ ruo dị ka ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị nwa ụmụaka ndị na-amasị ha. White ụmụ bụ ukwuu na-akwado nke Nikki Minaj na Lil Wayne si karịa onye ọ bụla ọzọ. Mgbe i nwere a omenala na-acha ọcha na na na ike chepụtara a okwu, “wigger”, biko ịghọgbu onwe gị ikwere na ọ bụ nanị nwa ndị mmadụ. Nke ọ bụla, e nwere bụ nzuzu na abụọ na ịkpọasị na abụọ, ma biko egbughị m mgbe ị na-agbalị rehash ihe na ị chọrọ ka na-egosi ihe mere George Zimmerman tọhapụrụ.
jonathansampson • August 19, 2013 na 10:12 Abụ • zaghachi
Sir, M na-ekwu okwu si na m ahụmahụ. Ọ bụ ya mere m kwuru na m ex na Tennessee, na na bụ ya mere m referenced m itinye aka na atumatu kere na-eje ozi na-eto eto na nwa ụmụaka. Ọ dị mwute na m enye m na-agba akaebe, ma ka na-atụle ọzọ na-acha ọcha-pawn ndị ọzọ.
M maara m ex bụghị nanị nwa agbọghọ na-lelịa. Ihe m na-na-akọwa bụ na-eto eto na nwa na ụmụaka na-abịa na gburugburu na-adịghị akpali onye kacha mma. Nke a abụghị ikpe n'ihi na ha niile, ma m ahụmahụ ọ bụ uncomfortably nkịtị.
Ị na-akpọ George a ihu abụọ, ma ọzọ, dabeere na ihe? Ị maara George? Ndi na-abali n'ebe ahu? Ọ bụghị na George kwuru na ya nwere nwa enyi, ọ bụ onye na-agba akaebe nke ndị isi ojii na ya obi onye okwu ọjọọ toro ya. Ya mere, ihe ndabere anyị nwere ike na-akpọ àgwà ya n'ime ajụjụ mgbe niile na-egosi na-atụ aro na ọ bụ, na mgbe ọ bụla, akpa ókè agbụrụ?
Ọ bụrụ na mba na-egwuri a ọrụ, ebe ka ihe àmà na-egosi na? The naanị banyere agbụrụ anyị nwere na a dum ikpe bụ na okwu nke Jeantel, onye kwuru, sị Trayvon akpọ George a “creepy ass esi,” na mgbe e mesịrị a “nigger.” The akpa ókè agbụrụ nkọwa si Trayvon, bụghị George. Jeantel gbara akaebe na na ya ebe, nke ahụ bụ ihe ha na-akpọ ndị ọcha.
M na-apụtaghị agba ọcha na ụmụ dị ka ụfọdụ ụdị angel. M na-ekwu nke omenala mmetụta na nwa ụmụ naanị n'ihi na anyị na-ekwu okwu banyere Trayvon na nke ugbu a. M ọtụtụ ọrịa nke agboro echiche n'etiti-eto eto na-acha ọcha na ụmụ, dị ka nke ọma. My nwa, onye bụ bi-agbụrụ, ga-eto eto na ya ogologo ọkpa na ya na ikpere, oversized Chiefs, na àgwà na agwa enweghị mmasị na disinterest. Achọghị m ka m na-ahụ ya n'etiti ọcha ụmụaka, black ụmụaka, Spain ụmụaka, ma ọ bụ onye ọzọ. Kama, M chọrọ ịhụ nke a ọzọ ọgbọ eme mma maka onwe ya.
a hụrụ m gị n'anya, nwanne. Na m na-ekele gị ahuhu. M na-akasi obi site n'eziokwu ahụ bụ na anyị ma kpee ekpere maka ma na-elekọta banyere nke a ọzọ ọgbọ, na anyị chọrọ ịhụ ihe ịga nke ọma karịa mgbe ọ bụla. Chukwu gozie.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 na 10:12 Abụ • zaghachi
Jonathan, a na-aga ebe ọ bụla ngwa ngwa. i na-agụ gị dum post n'ihi na agaghị m na-agbalị nwere a ekwekọrịtaghị ị. Kwe ka m na-ekwu, Akpọghị m George Zimmerman a ihu abụọ. Nanị ihe m mere banyere okwu. Ị a mụrụ ọzọ nwa Chineke? Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị mere anyị bantering azụ na-apụta? Gịnị ka anyị na-agbalị igosi ihe. M ịma ihe Trayvon Martin si agbụrụ bụ, ọ tụfuru ndụ ya mgbe ọ na-enweghị oke. I kwuru na gị ọzọ post ọ bụ nwa okorobịa. No, ọ bụghị. Ka merụsịrị ka anyị chọrọ ya ga-ka George Zimmerman bụ n'ihu ezi na-ewere ya ndụ, ọ ka a na nwa. 17 afọ nhata a nwa. Ọ na-toro. Ọ bụ nnọọ mwute na polarization nke mere na ojii na ndị ọcha na ọdụ azụ dị ka nke a bụ ihe egwuregwu na bụla otu racks elu kasị ihe-enweta nkwanye. Nke ahụ bụ nnọọ larịị mwute. Ọ bụrụ na Trayvon Martin ama-acha ọcha na George Zimmerman ama black, M ga-ka na-eche otú ahụ na-adị m ugbu a. Ma mwute bụ eziokwu bụ, ama George Zimmerman kemgbe nwa na-Trayvon Martin a na-acha ọcha, a gaara a ukwuu dị iche iche pụta, na ọ ga-na-na na e jidere ụbọchị 1, guzo ya n'ala ma ọ bụ na mkpebi kasị maa gaara ihe dị iche iche. Na-eche free enyi m na ihe ọ bụla na-elekọta mmadụ media tinyekwa na ị chọrọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ inwe a obi na-adị maka onye m bụ n'ezie; Otú ọ dị, n'ebe a, M mere na-aga n'ihi na ọ bụ otú na-agaghị ebe ọ bụla. M na-ekele gị na-azaghachi ezie.
Nathanial Poling • August 19, 2013 na 10:13 Abụ • zaghachi
Marvin, mkpa ka ị na-agụ gị posts… ị nọwo na-agha site na mmalite mgbe ọ ka na-agbalị na-egwu “anọpụ” kaadị. Ị na-akpọ Zimmerman a ụgha na a na-egbu ọchụ na mgbe ọgụ gị na-acha ọcha nwanna nwoke na-enwe a obodo mkparịta ụka. n'ihi na otu onye, Zimmerman bụ a Hispanic.. M mgbe nụrụ na otu onye na-akpọ President Obama na-acha ọcha na nke a mgbe naanị na-egosi na gị echiche ọjọọ. My echiche onwe onye bụ na media adaha a n'ime a agbụrụ agha mgbe ezi nke bụ n'ezie n'ime obodo megide ala ịta ahịhịa. E nwere ụfọdụ agwa dị ka na-eje ije n'etiti ụlọ na-adịghị nkịtị na subdivisions ma ọ bụ gbara obodo. Ọ bụla nche n'ógbè onye gaara chọpụtara na nke a weird omume. Gịnị mere e mesịa ga-arụrịta ụka banyere ruo mgbe ebighị ebi dị ka ọ dịghị onye nọ n'ebe e wezụga otu onye Ihọd na juri-ele anya na ihe niile na-egosi na chịrị na akụkọ ya ẹkenịmde elu iji bụghị ima ya ikpe.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 na 10:13 Abụ •
Nathanial, M nsogbu onye ọ bụla. Nanị ihe m na-akọrọ m echiche. Ezie na ha nwere ike,, ha m. Ọ ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị n'ihi na ị na-ekwu
“M na-eche dị ka ị na-awakpo onye”. M mara otú m wee gafee na m na-na-awakpo Jonathan na niile. Echiche anyị dị iche na abughi nke anyị na-na-agbanwe agbanwe anyị echiche, ma anyị ka na-akparịta ụka. Ekwu okwu nke echiche ọjọọ, gị dịkwa nnọọ ka o di. Nso ke George Zimmerman si ịbụ ndị Spain nwere na-eme na-egosi na nke a abụghị banyere agbụrụ? Na-otu ihe mere na-adabereghị agbụrụ ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị ime n'etiti a so na nwa ọcha na mba? Gịnị ka President Obama nketa nwere na-eme na a na eri? M na mgbe kwetara ya agbụrụ etemeete n'ihi ihe ọ bụ. Ọ dị mwute, e nwere ndị ga-atụle ya nwa nanị n'ihi na nke agba akpụkpọ ahụ ya. Ee, M kwuru George Zimmerman bụ onye ụgha na ogbu ọchụ, ma ezi okwu. Dị nnọọ n'ihi na juri tọhapụwo ya adịghị eme ka ma otu ụgha. Ná ngwụsị nke ụbọchị, kpọmkwem ihe bụ isi na ị na-agbalị hama home? M mwute ma ọ bụrụ na ị na-eche na m na-awakpo onye ọ bụla. M na-adịghị ekwe ka na-ekwu okwu m na uche dị nnọọ ka onye ọ bụla ọzọ na a na eri nwere enweghị na-ata ụta maka ịbụ ihe na m maara na abụghị m?
pepjrp • August 19, 2013 na 10:15 Abụ • zaghachi
Chineke ga-emeri, ma unu na-eme akpa ókè agbụrụ. Ị na-eleghara ihe ndị dị na ikpe n'ihi Martin bụ nwa. Nke ahụ bụ nanị ihe mere. Martin wakpoo Zimmerman mgbe n'anya maka a nkeji ole na ole. Ọ dịghị igbu ọchụ mere, Ị na-nụrụ akụkọ ụgha dị ka bụ 10 na nke 1000 na-ahụ nke a thru agbụrụ acha iko.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 na 10:15 Abụ •
Ihe m chọpụtara na ọ kama hilarious enyi m bụ eziokwu na ị na-eme ihe ọtụtụ ndị chere banyere m amadịghị m. On ọzọ blog ebe a (Mgbe Trayvon, Ga-enwe Justice maka Florida si Other Guzosie Your Ground aja?) na Disqus, onye na-akpọ m a “nigger” nanị n'ihi na m na-ekwu dị iche n'ihe ha. Mere m na-eme? No. Gịnị mere? N'ihi na m maara onye m na ihe m na-anọchi anya. Ọ na-atọ ọchị m na ị na-ezo Chineke na-enwe mmeri dị ka ọ na-egosi na ị bụ onye Kraịst. Na mbụ, M na-ịgbachitere Trayvon Martin ebe ọ bụ na e gburu egbu na fateful abalị na a ka na-gburu. M ga-eche kpọmkwem otu ụzọ ma ọ bụrụ na ọ bụ ndị a obere na-acha ọcha na nwa ewu na-na George Zimmerman bu nwa. Ọ bụ oku valuing mmadu. Ị hụrụ, George Zimmerman bụ ogbu. Ọ devalued ọzọ mmadụ ndụ n'ihi otu altercation na ọ malitere. N'agbanyeghị ya na-tọhapụwo nke “nwoke” iwu, Iwu Chineke kwuru “i gaghi-egbu”. Gịnị ka o mere? O gburu mgbe ọnọdụ ahụ dum gaara egbochi. Ihe ị na-akpọ ịkpa ókè agbụrụ bụ ihe ọ bụla karịrị bụkwanụ dabeere na uru m idowe na Trayvon ndụ. M na ewere na George Zimmerman, ọbụghị ncha ncha, ọ ga-eche ihu ya Onyeikpe. M iwe iwe na Guzosie Your Ground Iwu, Ee abụ m. Ọ bụrụ na ọ na-echebe a black nwanyi, Marissa Alexander, onye chụọ n'ọrụ ịdọ aka ná ntị gbaa di ya, na ekemende rụpụtara a 20 afọ mkpọrọ n'ụlọ mkpọrọ n'ihi ya, ya ekwesịghị etinyere George Zimmerman ma. N'ihi na ị na-iche ihe ọ bụla banyere m na-eleghara ihe mere eme na naanị ịgbachitere Trayvon Martin n'ihi na ọ bụ nwa na-egosi m gị echiche ọjọọ na pụta ụwa ịkpa ókè agbụrụ metụtara gị mba dabeere mwere. Ọ bụ n'ihu o di gị nlelị nke “10'S nke 1000 na-ahụ nke a thru agbụrụ acha iko”. Daalụ maka na-eme ka m na-achị ọchị ezie.
pepjrp • August 19, 2013 na 10:16 Abụ •
Anyị niile na-dị ka ndị Kraịst na-ekwe na-a ndụ ma ọ bụrụ na anyị bụ ihe ize ndụ… na ọ na-egosi na Zimmerman si dị. Ọ na-egosi na ị na-enye Zimmerman abamuru nke na. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị mba dabeere, mgbe m mgbaghara, ma ị bụ otu n'ime ndị nnọọ ole na ole na ọ bụghị. Ma ị bụ a Christian nta na ndị ọzọ niile m kwuru na na online na-adịghị, otú m ga-enye gị na-akwanyere. Ma o doro anya na i kwere ụfọdụ abụghị eziokwu banyere banyere ikpe na-enweghị ebe ọ bụ na-ege ntị maka onwe gị. Ọ bụ ebe m nkpasu-iwe-abịa na. Enweghị m okwukwe otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ ruo mgbe m nọrọ oge iji nweta ọtụtụ eziokwu dị ka m nwere ike. Ọ na-e ijuanya ihe m chọpụtara. ugbu a, M na-ahụ na ọtụtụ ndị na-eji Marissa Alexander ikpe slam na Zimmerman mkpebi. Ugbu a, m na-amaghị ihe dị ukwuu banyere ya dị ka m na-eme nke a, ma m maara na Alexander na-awa a 3 afọ arịrịọ ndibiat na ọ zaghị. ma, Ọ dịghị mgbe m na-agụ na eziokwu na onye ọ bụla posts. E nwekwara ihe àmà na ọ pụrụ hapụrụ na ọbụna bịara azụ mgbe ọ na-arahụ, ma m na-amaghị na n'ihi na n'aka, ma ọ bụ akụkụ nke ikpe ikpe. Ma, e nwere ezigbo ihe mere kwere na Trayvon Martin ama nwekwara ekpe ma laghachi na. E nwere nkeji ebe Zimmerman kwuru na ekwentị 911 dispatcher na ọ maghị ebe Martin bụ. Ma ị na-amaghị na n'ihi na ị na-agbalị ịmata ya, mere ị? My comment of “10'S nke 1000 na-ahụ nke a thru agbụrụ acha iko” guzo dị ka bụ karịa ezi. E nwere ọtụtụ ndị ọcha bụ ndị kweere Zimmerman ikpe mara maka nile di iche iche nke onwe onye mere, ma e nwere ọ nweghị ojii na-eche Zimmerman nwere ike ọcha ahụ na-niile akpa ókè agbụrụ na-egosi gị mkpa.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 na 10:16 Abụ •
Biko mee m a ihu ọma na ịkwụsị ya. Dị ka a Kraịst, unu mara mma karịa na-agbalị na ihe nkuzi m banyere ikwere-abụghị eziokwu banyere. Ahụ na-egosi na i kwere na ihe niile na bịara si George Zimmerman n'ọnụ bụ eziokwu. M agaghị emetụ na n'ihi ọzọ, naanị Chineke bụ ya Onyeikpe. The ọzọ ị na-agbalị uda ele mmadụ anya n'ihu ma ò banyere nke a, na njọ ọ na-akawanye. na ọzọ, ịkwụsị anya isi na ị maara otú ihe nke a na m ntị onwe m. M na a nke ọma na-agụ, gụrụ akwụkwọ, onye nwere ike na-eche maka onwe m, iche site na mmetụta uche. Biko, gwa m na Bible ebe ọ na-ekwu ma ọ bụrụ na ndụ gị bụ ihe ize ndụ, ị pụrụ ọzọ. I gaghi-egbu n'aka kpọmkwem na. Ma biko egbughị m na agba ochie killings ndị juru ebe niile n'ihi na Chineke na amara na ama-abịa na idaha. The Marissa Alexander ikpe, adịghị mkpa, arịrịọ ndibiat ma ọ bụghị, ma ọ bụrụ na o chere na ndụ ya nọ n'ihe ize ndụ, o nwere ikike-akwụrụ. Ị na-akwado a iwu na kegide n'ime ọcha akpa ókè agbụrụ overtones ma na-agbalị iji chebe ya, ọzọ, bụghị a anya. Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ị na-eche na Bible na-egosi ma ọ bụrụ na ndụ gị bụ ihe ize ndụ ị pụrụ ọzọ, olee otú ị na-eche banyere ime ndị na-ọgwụ dị mkpa. Dị nnọọ ọchịchọ ịmata mara. ọzọ, na njedebe nke ụbọchị, gị echiche na-gị na-adịghị agbanwe agbanwe na, abughi bụ nke m. Naanị ihe dị iche bụ, m ịrụpụta a dị ọcha obi mmadu ele ihe anya, gị bụ nanị iwe iwe na-na obi nkoropụ na ị na-eche a ya bụ banyere agbụrụ. Lee ihe dị iche?
Nathanial Poling • August 19, 2013 na 10:16 Abụ •
otú agha na agha bụ ndị ikpe mara nke igbu ọchụ?
Ị dị nnọọ gosiri gị amaghị ma ọ bụ nanị n'ozuzu enweghị ihe ọmụma… Guzosie Your Ground dịghị mgbe ọbụna na-eji na Zimmerman ikpe site agbachitere, aka ya dị ọcha ọbụna enweghị iwu. Ọzọkwa na iwu etinyere 2 ka 1 na ihu ọma nke African America ịgbachitere onwe ha megide ndị ọzọ African America karịa ọcha na iji iwu.
Antoine Mason • August 19, 2013 na 10:17 Abụ •
Nke ahụ bụ a mara mma akpa ókè agbụrụ na nkwupụta.
Nathanial Poling • August 19, 2013 na 10:17 Abụ •
ihe akpa ókè agbụrụ? ọ dịghị ihe na-na na nkwupụta remotely akpa ókè agbụrụ
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 na 10:18 Abụ •
N'agbanyeghị otú ihe ị chọrọ na-achọ ndị na-SYG iwu, na deliberation na dapụtara asụsụ anya yiri SYG verbiage. Ya mere, na ozizi nanị n'ihi SYG adịghị akpọku, apụtaghị a abụghị ndabere nke mkpebi. Ọzọkwa, biko egbughị m gị ọnụ ọgụgụ ma ọ bụrụ na ị na-ike kwado ha na-egosi. Oge ọzọ, atụle asụsụ gị mgbe ị chọrọ iche na onye bụ amaghị n'ihi na ị na-na na na-amaghị atụmatụ ma ọ bụrụ na ị na-kweere n'ezie na SYG-achị achị na-egwuri na-abụghị akụkụ ikpeazụ pụta. Na dị nnọọ ka gị mebere stats, biko rụtụ aka na ma nke ndị na-esonụ…
Enwe gị ụbọchị.
Nathanial Poling • August 19, 2013 na 10:22 Abụ •
otú i n'ezie dị nnọọ biputere a di na nwunye nke random blọọgụ?
Ugbu a na-ahapụ ibugharịa na ụfọdụ ezigbo ọnụ ọgụgụ:
Ma dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke Florida "Guzosie Your Ground" na-ekwu na
egbu egbu mgbe e mere site na nwa na-azara ọnụ, na ha ejiriwo
agbachitere ọma 55 percent nke oge, n'otu ọnụego dị ka
bi na nnukwu na na a elu karịa ọcha na-azara ọnụ,
dị ka a Daily bere analysis of a database nọgidere na-enwe site na Tampa Bay Times. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị e gburu na Florida "Guzosie Your Ground" mgbe e ọcha.
African America na-eji "Guzosie Your Ground" chebe onwe na ihe fọrọ nke nta ugboro abụọ na ọnụego nke ọnụnọ ha na Florida bi, nke depụtara na 16.6 percent na 2012.
Ọzọkwa, M dị na-agụ nke a bụrụ na New York na 2009: http://rochester.ynn.com/content/top_stories/490926/jury-finds-roderick-scott-not-guilty/
Ụdị refutes dum agbụrụ kaadị esemokwu na President Obama na ndị ọzọ na-egwuri na a ikpe na a nwa okenye agaghị ike tọhapụwo ma ọ bụrụ na ha gburu a ọcha afọ iri na ụma.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 na 10:22 Abụ •
Na agaghị m iche ihe ọ bụla banyere gị maka oge ọzọ ka ị na-doro anya na-adịghị amasị na-ezighị ezi ị na-n'anya iji chebe a controversial iwu. Ma ị chọrọ ka ikwere ya ma ọ bụ na-ahụ stats na-akwado gị akụkọ, ka onye ọ bụla nwere ike, SYG iwu, ma kpọkuru na nke a ma ọ bụ na, nwere a wuru na-agbụrụ kara. M na-enweghị nnọọ n'uche nke aka iso okwu a na ị. Gịnị mere? I nwere ike ịjụ. Ọ na-na-emezu nnọọ ihe. Gị chere na-agaghị agbanwe na abughi bụ nke m. Ọ pụtara na m enweghị ike ma ọ bụ adịghị akwanyere gị ùgwù? Ọbụghị ncha ncha. Ọ pụtara na ike gwụrụ m nke na-eti a nwụrụ anwụ ịnyịnya gị. Civil okwu n'ezie kọrọ mba a na nke a bụ ihe àmà ọzọ na anyị nwere a ogologo ụzọ na-aga ka anyị na-otu mba n'okpuru Chineke. M ekpe ekpere ịhụnanya Ya na-emetụta obi gị dị ka nke ọma dị ka nke m na onye ọ bụla ọzọ bụ ndị nwere ike na-asụ ngọngọ n'elu a blog. Nwere a oké mgbede.
M na-ahụ gị skirted m omume. M ga-ekpe ekpere maka unu dị ka nke ọma na Chineke na-ewepu gị “agbụrụ” mepere na-emetụta gị arụmụka. M maara ịkpa ókè agbụrụ ga-adịgide si n'agbụrụ nile kwupụta ndị ọzọ ma e nwere ụfọdụ ndị si n'ebe na-akwaga n'ofè agbụrụ na ihe nile e ọ bụghị mgbe nile ka ọ na-agba nke na anụ. M gaara na-akwado ma ọ bụrụ na-egosi gosiri na Zimmerman ama a mpụ kama m ga na-arụ ụka na onye ọ bụla e kpamkpam mmetụta ihe fọrọ nke nta 100% ọcha media ụgha ebumnobi agba akụkọ a n'ime ihe ga-adọrọ ndị na-ekiri na-eme ka ha ego nakwa dị ka inupụ ha mgbochi egbe burukwa. Ha doctored video, audio etere na ọtụtụ ndị ọzọ akụkọ na rile elu African American obodo na m eche na ọ bụ a travesty. M na-atụ Zimmerman sues ha ogologo ọkpa apụ n'ihi na defamation na nkwutọ.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 na 10:23 Abụ •
Mgbe ị na-ekpe ekpere ka Chineke na-ewepu mbuba mepere si n'anya m mgbe anya isi na nke ahụ bụ ihe mere m jide echiche m jide, biko na-aghọta na ekpere eleghị anya ga-agaghị eme ka ọ gara aga gị n'uko. M skirted gị omume n'ihi na echeghị m na ọ dị mkpa-aza gị mgbe ị na-enweghị echiche ihe ị na-ekwu okwu banyere ebe m na-echegbu. Ị gaghị mix a ekpere nke ịhụnanya na ịkpọ niile n'otu oge. Your ọtụtụ ndị chere na naanị n'ihi na Trayvon Martin bụ nwa na-bụ ihe mere m na-eche na otú m na-eme bụ n'ụzọ doro anya na-ezighị ezi. Na agaghị m iji chebe na uche n'ihu gị ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ n'ihi na njedebe nke ụbọchị, ị na-aga ka na-eche otú ahụ ka ị na-eme ma na-ihu abụọ banyere ya. Ọ bụ mkparị dị ka a kwere ekwe n'ihi na ị na ọbụna na-agbalị na-abịa gafee ụzọ na ị bụ mgbe ị maara maka onwe gị na amamihe bụ a Chineke nyere isi nke e etinyere na mgbede na George Zimmerman si akụkụ, anyị na-agaghị na-enwe mkparịta ụka a. Ị na-ahụ enyi m, Setan na-abịa ka ha kee, na na ọ na-na-na-eme ọrụ ya na nke a nke. M jide m echiche n'ihi na a nwa okorobịa ndụ e weere–Point oghere, N'OGE! The eziokwu na i na na na otú ahụ abaghị uru banyere ya na anya isi na n'ihi na m nwa na-Trayvon Martin bụ nwa, M na-eche otú a, bụ n'ụzọ doro anya uche na-adịghị. N'ihi na ị na-ekwu okwu banyere mba mepere a na-ewepụ si n'anya m mgbe ị na-doro anya na yi na gị onwe gị bụ ntoochi m. Kama na-ekpe ekpere maka onye ọzọ, ị pụrụ iji na-arịọ Chineke na-amalite na obi gị mbụ. I nwere ike-tụrụ na ihe O na-ekpughe unu.
Nathanial Poling • August 19, 2013 na 10:23 Abụ •
ị malitere na-ekpe ekpere, n'ihi ya, anaghị kụziwere m banyere ihe na-ekpe ekpere banyere ihe. Echere m na ị mkpa iji chọpụta na gị onwe gị obi, ọ bụ doro anya na nke a bụ banyere agbụrụ n'ihi na m na-enwe obi abụọ a ga-mere ya n'oge gara aga obodo ozi ọma na n'ime ọtụtụ uche ndị mmadụ ma ọ bụrụ na nke a ama nwa na nwa ma ọ bụ nwa na-acha ọcha. Ọ bụrụ na ị na-achọghị na ihu na eziokwu, na bụ gị kpebiri na ma e nwere ọtụtụ mgbe na-akwado m na-ele gụnyere nwa nwoke New York ndị gbara a ọcha afọ iri na ụma yi hoody na kpamkpam hụrụ bụghị ikpe na niile ebubo. E nweghị mba media egosi, ọcha adịghị agbụrụ baiters akpọ maka ngagharị iwe. Nke a akụkọ ga-kpamkpam dị iche iche na-Martin bụghị wakpoo Zimmerman na m ga-akwado ọtụtụ nke gị echiche ma nke abụọ Martin kpebiri na ya na-aga iji merụọ Zimmerman na iti ya isi megide n'akụkụ ụzọ na Punch ya ihu, ọ we do onwe ya elu ka gbara. Oge.. njedebe nke akụkọ… ịchụpụ ndị agbụrụ na nke ahụ bụ larịị ma dị mfe eziokwu.
Chaị. Sịkwa e nwere ndị ka jọgburu onwe agbụrụ mmekọahụ a na mba. Ọ bụ ihe karịrị doro anya n'agbanyeghị ihe m na kwuru ma ọ bụ otú m na-na na-egosipụta onwe m, ị na-ọdịnaya generalize m mmeghachi omume na mmetụta m. Ebe ahụ kwuru na, enwe gị ekpere oge na-enwe oké ndụ. M na-atụ anya ịhụ gị na n'akụkụ nke ọzọ.
Nicole • August 19, 2013 na 10:24 Abụ • zaghachi
M na-ekweta na ọbọ nguzozi na akọwapụta niile na-elekọta mmadụ ikpe na-ezighị. Otú ọ dị, e audio na mmalite ebe o ji a agbụrụ slur na o nwere a akụkọ ihe mere eme nke na-akpọ na nwa okoro na obi. Race nwere ike ịbụ naanị na ihe na-akpata ma ọ bụ.
jonathansampson • August 19, 2013 na 10:24 Abụ • zaghachi
Nicole, George na-akpọ ya a “goon,” na a “f * cking Punk.” The naanị ihe àmà nke ọ bụla agbụrụ slurs bịara mgbe Jeantel were guzoro na akaebe na mgbe ọ bụ na ekwentị Trayvon, Trayvon akpọ George a “Creepy ass mgbape,” na mgbe e mesịrị a “nigga”.
George mentored (ihe abụọ) black ụmụaka, were a black girl na prom, na ọbụna nwere nkwado nke ndị isi ojii na ya obi ke ọrụ ya nke nche n'ógbè. E nweghị ihe àmà na Trayvon e agbụrụ profiled, ma ọ bụ na George bụ akpa ókè agbụrụ.
pepjrp • August 19, 2013 na 10:25 Abụ • zaghachi
Great ọrụ dị ka ị maara gị stof. Ewoo na e nwere nanị 1 nde ka nwa ndị si n'ebe ịkụziri na eziokwu nke okwu a dị ka i mere na agwa na Nicole. Ịtụnanya otú ọtụtụ chọrọ ikwere agbụrụ ịkpọasị na ike gbasaa ya ngwa ngwa.
Agwa • August 19, 2013 na 10:25 Abụ • zaghachi
Hmm.. M na-eche na ọ bụ “Coon” bụghị goon. Nke ahụ bụ a agbụrụ okwu.
Olee nke gbasara ugbu a na agbanyeghị? Na-anyị niile dị nnọọ na-alụ ọgụ naanị maka anyị si ele ihe anya ọzọ?? M nwere ma hụ onye ọ bụla na a forum mgbanwe ihe bara uru.
M ga-aghọta nke a.. anyị na-kwesịrị ịbụ ndị chọọchị.
jonathansampson • August 19, 2013 na 10:25 Abụ • zaghachi
The arụmụka bụ n'etiti Coon na goon - ihe dị iche nke c na a g. George enyi nke Olee ihe enyemaka a afọ iri (na nwa, ma ọ bụrụ na na mkpa) eche okwu e ji ama “goon,” N'ikwupụta ọ nụrụ onye ọ bụla tọrọ ha 40 ma ọ bụ 50 iji “Coon” dị ka a agbụrụ slur. Mụ onwe m nụrụ Coon eji dị ka a derogative; M na naanị mgbe nụrụ ọ na-eji dị ka a banyere raccoons.
Mgbe ị na-atụle onye a ambiguous audio clip na ìhè nke ihe ọ bụla ọzọ, ọ na-eme ihe uche nke na ọ sịrị “goon”. Ka emechara, Joe Oliver (George na nwa enyi) kwuru na a afọ iri na ọ dịghị mgbe hụrụ ihe ọ bụla na-atụ aro George bụ akpa ókè agbụrụ. George were a black girl na prom, na mentored-eto eto na nwa ụmụaka. E nweghị ihe gosiri na ọ na-ele onye ọ bụla ọzọ dị ka ndị na-erughị ya n'ihi na ha na ụcha akpụkpọ.
Nke a arụmụka dị mkpa n'ihi na chọọchị mee nke niile dị iche iche nke ndị mmadụ, nwa ọcha. Ndị dị otú ahụ a mwute akụkọ dị ka nke a nwere ike ime ka oké nkewa-ahụ anya anya, na dị ka ndị dị otú ahụ anyị kwesịrị niile inwe mmasị na-arụ ọrụ si eziokwu, dabere na ihe mere na-egosi, iji zere-enweghị isi mbipụta ke idem.
No, ọ sịrị na ọ bụ fu **** g oyi. google ya. Ege ntị ọdịyo. The FBI kwuru na ọ bụ ihe e kwuru. E nweghị ịkpa ókè agbụrụ slurs ma e wezụga site Martin.
Antoine Mason • August 19, 2013 na 10:25 Abụ • zaghachi
Ị nwere ihe audio ebe Trayvon kwuru ihe akpa ókè agbụrụ? Ga-amasị m na-anụ ya.
pepjrp • August 19, 2013 na 10:26 Abụ • zaghachi
Ya mere, ị na-akpọ Rachel Jeantel a ụgha? Ma ọ bụ ka ị na-atụ uche ya na-agba akaebe?
Agwa • August 19, 2013 na 10:26 Abụ • zaghachi
Ma eleghị anya, ọ na-asị a agbụrụ okwu mgbe. Amaghị m ihe dị ya n'obi, ma mụ onwe m na-echeghị na Zimmerman bụ a akpa ókè agbụrụ. O mere Otú ọ dị “agbụrụ profaịlụ” Trayvon. Na na dị mwute n'onwe ya n'ihi ọtụtụ ihe…
N'ihi ya, dị mkpa ka anyị tụlee ihe…1. Olee otú anyị obibi na dịtụ elu mpụ na nwa obodo? Ka ndị mmadụ na ọbụna na-eche ime ihe ọ bụla banyere nke a dị ka ọtụtụ na-ekwu ya a “black” nsogbu? 2. Olee otú anyị pụrụ ịkwụsị pigeonholing ndị mmadụ n'ime ụfọdụ stereotypes dabeere na agba? Ọ bụ media? Gịnị banyere ihe ndị a ọnụ ọgụgụ, Olee otú ihe ahụ pụtara? 3. Olee otú anyị pụrụ-adị n'otu? Lee onye ọ bụla ndị ọzọ echiche? Ma eleghị anya nwere ihe forums ebe ndị mmadụ kwurịta ahụmahụ ha?
M chọrọ nwere mkparịta ụka, ma ọgụ ọ bụla ọzọ na-agaghị enyere. Gịnị bụ isi nke-atụ mkparị? The eweta ihe 1960. The na-akọwa na nwa na nwa mpụ dị ka ụfọdụ ziri ezi.. Gịnị mere ndị mmadụ na-eme nke a? Dị nnọọ ka na-afụ ụfụ onye ọzọ?
dị ka Ndị Kraịst, olee otú anyị pụrụ ịbụ ihe atụ nke otú na-ezukọta na ọnọdụ ndị siri ike dị ka nke a? Olee otú anyị pụrụ iji ihe nlereanya Jizọs na-adịghị bulie speck nke anyị n'anya nwanna- ma-enyocha onwe anyị na-arịọ ma ọ bụrụ na anyị na-eme ihe niile anyị nwere ike ime ka ụwa a bụrụ ebe ka mma?
pepjrp • August 19, 2013 na 10:27 Abụ • zaghachi
Njọ Nicole… ihe ụgha na-adabaghị site mbuba hustlers na-emesapụ aka na media. Ọ ga-ewe ogologo oge na-enweghị isi niile ụgha na ọtụtụ ojii bụ karịa obi ụtọ kwere. Nicole, ị na-amaghị eziokwu. Biko ịmụta ha.
Nathanial Poling • August 19, 2013 na 10:27 Abụ • zaghachi
Nicole, ka i na-ege ntị na-ekpe ikpe? The naanị agbụrụ slurs nọ na-abịa nke si n'ọnụ Martin dị ka enyi ya bụ onye na-ekwu okwu ya na ekwentị.
lewrites • August 19, 2013 na 10:27 Abụ • zaghachi
Akpa oyi, M pụtara dịghị nkwanye ùgwù…M na-acha ọcha / nwa afọ American. Ma, m na naanị mgbe nụrụ “goon” ke banyere nwa ndị mmadụ. Na dị nnọọ ka ihe Jonathan Thompson na-ekwu…M nụrụ na a mara ndị na-abara nwa ụmụaka n'ihi na ha chọrọ “civilize” ha ma ọ bụ nanị n'ihi na ha chọrọ ime ha ezi ihe omume nke ụbọchị site n'inyere agbụrụ ọzọ.
Ana m ekwu Martin bụ ikike ikwu ihe o kwuru. Far si ya. M na-eche abụọ mere ihe ọjọọ na nke a na m na-adịghị kwere anyị ga-ama ihe bụ eziokwu. Ka emechara, ọtụtụ ndị enwewo ike pụọ na igbu ọchụ na-eme onye ọ bụla kwere ha akụkọ…enwere a bụrụ na m n'ụlọ ala na nke a Ihọd gburu a nwa agbọghọ na nwetara ndị mmadụ na-edina n'ihi na ya na-enye ya mkwado. Mesịa, ndị mmadụ na-apụta ma na-ekwu eziokwu, ma m dị si nanị n'ihi na ọ tọhapụrụ na ndị mmadụ kwuru ihe niile a stof banyere ya apụtaghị na ha na-anọghị na-asi. M na-adịghị ekwu na ya emeghị ihe n'eziokwu, ma.
Ọzọ ikpe na m n'ụlọ obodo aka a football player na-akụgbu abụọ ụmụ okorobịa si n'ụlọ akwụkwọ ọzọ na ogbako. N'agbanyeghị anya àmà akaụntụ, otu n'ime ndị ikom abụọ rịdata Scott free, onye nke ọzọ mere ka a arịrịọ ndibiat maka mmadụ. People àmà ndị a okorobịa abụọ ọkpọ Punch a Ihọd mgbe o ya azụ chigharịkwuuru ha, ha wee na-eti ya til ọ nọ n'ala, amaghị ihe ọ bụla, mgbe ahụ, ha kewaa mgbe ha nụrụ sirens. Na otu onye n'ime ha na-ejisie na-eje ije.
E nwere nnukwu oghere na ikpe ziri ezi usoro, maka na onye na-tọhapụwo apụtaghị na ha na-na na-emeghị ihe ọjọọ. N'akụkụ aka nke ọzọ, ọtụtụ ndị na-pụtara ikpe na ọbụna gbuo bụ ndị e mesịrị hụrụ na-emeghị ihe ọjọọ. Naanị mmadụ abụọ maara n'ezie ihe mere n'abalị ahụ
jonathansampson • August 19, 2013 na 10:28 Abụ • zaghachi
M mgbe nụrụ “goon” eji dị ka a agbụrụ slur maka oji ndị mmadụ. Dị nnọọ wee azụ elele Urban Dictionary na ya adịghị ka banyere agbụrụ ọ bụla n'ime ya n'elu nkọwa.
A “Goon” bụ a a ogbi, ma ọ bụ nnukwu. Mafia isi ike na ha “goons” si eme ha bidding. Dị nnọọ na-ọma m nyochara etymology, na ya oke dịghị depụta ọ bụla agbụrụ mkpakọrịta. Àgwà ya akwọ ụgbọ mmiri, muscular mmadụ, na mgbe e mesịrị na akụkọ ihe mere eme delinquents.
Ma ihe gị kwuru banyere nlekota-eto eto na nwa ụmụaka n'ihi na ị chọrọ “civilize ha,” anyị na-apụghị iche ndị mmadụ n'obi na anyị nwere mbụ nwee ikpe nke ha - na ọ bụ nnọọ mma. Ọ bụrụ na George mentored black ụmụaka, na m na ọ dịghị ihe ndabere maka anya isi ụfọdụ Onyinye izu ọjọọ na ya akụkụ, Na m ga-ewere ya na ọ bụ n'ihi na o chebaara ihe ha.
Bottom akara ke Zimmerman ikpe bụ na ndị na-egosi na-egosi George bụ na ala. Travyon si nkwonkwo mkpịsị egosi na ọ na-punching a. George isi e merụsịrị echifịa na amia. Ọ bụ ekwenye ọbụna tupu enwe a ọkàiwu, ọbụna na-ewere na ndị uwe ojii si eme ihe ngosi ihe mere. Nchọpụta were akụkọ ya n'elu na n'elu, ọtụtụ dị iche iche ugboro, -achọ ihe ịrịba ama nke aghụghọ na onye ọ bula. Site ọ bụla tụọ ya na-egosi na George egwu maka oké aru nsogbu, ma ọ bụ ọbụna ọnwụ. Anyị enweghị ihe ndabere maka aro ma.
M na-ekweta na ndị na-eme egwu ihe na pụọ ​​na ya, mgbe ndị ọzọ na-ezighị ezi, ahụhụ n'ihi mpụ-abụghị ha mere. Echeghị m na nke mbụ na-emetụta George; adabereghị na-egosi. Ma, m na-eme na-eche na nke ikpeazụ na-eme ka ọ na-now na-enwe na-ezo ezo ka chebe onwe ya na ezinụlọ ya mgbe ụwa na-akọwa ya dị ka a akpa ókè agbụrụ na - akpata ọcha na ojii nile ka chọrọ ya ọnwụ.
E nwere oghere na usoro; ga na-arụ ụka na. Ma anyị na-enweghị ihe ndabere maka edoghi any ekwu ọ bụla pụta dị ka n'ihi ndị oghere – na-enweghị ụdị ụfọdụ nke na-egosi, ma ọ bụ ihe siri ike echiche. Ihe niile na nke a, niile nke data anyị na nwere site ọnwa nke nnyocha, na-atụ aro George kemgbe ihe n'eziokwu banyere n'abalị. Anya-àmà-àmà na-akwado ya akụkọ. Ntị-àmà-àmà na-akwado ya akụkọ. The eziokwu adịghị misalign onwe ha na akụkọ ya. Anyị kwesịrị, nke nkwanye ùgwù maka ihe mere, doputa ọ bụla ọzọ na ntule na-ikpe n'ihi na Chineke.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ a doro anya banyere ọcha egbu, anya ọ gara n'ihu karịa John Spooner. Otu nwoke na ya 70 gbara a-eto eto na nwa nwa ugboro abụọ sara mbara ìhè afọ ikpeazụ. Ịmara “ọcha ùgwù” agaghị echebe ya, ọ emerụ elu-arịọ ara. Nke ahụ ga-abụ ebe dị mma anya n'ihi na ịkpa ókè agbụrụ – na Zimmerman ikpe bụghị. N'ịbụ ìhè-gbaa ya akpụkpọ anaghị ekwe ka unu pụọ na igbu ọchụ.
lewrites • August 19, 2013 na 10:28 Abụ • zaghachi
Ị nwetara ya, anyị na-apụghị iche ihe ọ bụla, M maa ekweta. Ihe m na-agbalị ime bụ play ekwensu ikwado. M maara ịbụ ìhè gbara akpụkpọ adịghị gị pụọ na igbu ọchụ (na ikpe nke na Ihọd na-egbu a girl, Ihọd na-acha ọcha, na ikpe nke na-football player, òtù ha nile nwa).
Ma ọ bụghị ihe kpamkpam na mpụga nke igbe na-eche…ọma…mpụga nke igbe. Urban Dictionary m na-adịghị n'ezie na-aga n'ihi na a ọtụtụ ihe ọmụma n'ihi na a ọtụtụ ihe m na-anụ gburugburu ebe m dị ndụ dị iche ihe na-enịm na na saịtị. Ikekwe m region nyere iche iche okwu dị iche iche pụtara. Dị nnọọ ka a ịmeela ụfọdụ ọha mmadụ bụ Ẹkot na n'etiti mkpịsị aka.
M na-metọrọ a-eto eto na nwa ewu site a onye na-enweghị onye ga-mgbe-enyo enyo ga-eme ihe dị otú ahụ. A ezi track ndekọ, ezi nne na nna, yiri ezigbo mmadụ. Onye ọ bụla chere dị ka ukwuu…nri? Ọ bụrụ na mmadụ bụ otú ahụ ihe ọma, olee otú ha na-eme ihe dị ka m?
Ịpụta ihe ọ na-ekwu, nke a na-eweta elu ezi okwu ihe, n'agbanyeghị ma ọ bụ na ịkpa ókè agbụrụ bụ akpali. Yeah, usoro mgbasa ozi na nri na ya, na ọ na-asọ oyi na ha mere otú. M bụ a media isi na mahadum, anyị na-akụziri na-ebinyeghị akụkụ ọ bụla, ma ụfọdụ ndị na-ere si ọrụ nke ụlọ ọrụ na-eme ka a mma akụkọ, ọ bụ ihe ọjọọ.
Nke a bụ ya mere m ekpe ekpere maka n'ezinụlọ abụọ, M na-ahapụ ya ka Chineke-abụ ndị ikpeazụ ikpe, n'ihi na ọgwụgwụ, Ọ bụ naanị otu onye nwere ebe na-eme otú. M mwute ma ọ bụrụ na m mere ihe ọ bụla ùgwù, M pụtara onye ọ bụla.
pepjrp • August 19, 2013 na 10:28 Abụ • zaghachi
Goon nweghị agbụrụ slur site ọ bụla echiche. All gị isi.
Antoine Mason • August 19, 2013 na 10:28 Abụ • zaghachi
Chaị unu bụ n'ezie akpa ókè agbụrụ.
pepjrp • August 19, 2013 na 10:30 Abụ • zaghachi
The media adịghị eche banyere gị akụkọ, n'ihi na ị na-adịghị Black. Ọcha na Hispanics nọ cross-ntutu maka akpa ókè agbụrụ isi dị ka Jackson na Sharptin.
Ị kpọmkwem ziri ezi dị ka a na-ede erroneously ada na mba mgbe o kwuru na Zimmerman profiled Martin na ị jiri akọ nye eziokwu na e ekpe. Ịkpọasị agbụrụ nwere ike azụlite mgbe ndị mmadụ na-akọ irresponsibly. Ọ na-ekpe ma ọ bụ na ọ maghị na Martin ejeghịkwa ije n'akụkụ ụzọ mgbe na-aga n'ụlọ, ọ bee site mita dị nnọọ ole na ole ụkwụ si ụlọ na ibo ụzọ na-eweta enyo onwe. Zimmerman kọrọ na ndụ na 911 ọrụ dị ka ọ na-aga na eyed Martin. Dị nnọọ ka ọ kọrọ ndụ na Martin ejewo na o furu efu ya. Gịnị mere Martin abịa n'azụ dị ka nkeji wee site na ihe mere nke a niile eziokwu dị mkpa omitted site na netwọk na ọha mmadụ? A eziokwu o kwuru ọtụtụ ugboro, ma mgbe nile na-ekpe site na nwa pụta na N'ezie, mbuba hustlers ka Jackson na Sharptin.
BQPhotography • August 19, 2013 na 10:30 Abụ • zaghachi
Nke a bụ eziokwu! M na-atụ na-ekpe ekpere anyị nwere ike webata a
gdoggydog05 • August 19, 2013 na 10:31 Abụ • zaghachi
ihe bụ nsogbu bụ, nwekwara, na ọ dịghị onye ga-ekweta na ọ bụ na-akpa ókè agbụrụ, ndị mmadụ ịhọrọ a dị ka ndị dị mkpa onye na onye ọ bụla na-na-ekiri na, na nwere otu echiche na, na ndabere nke mba. i na-ekele gị uche n'elu, dị ka nke a bụ otu n'ime obere amaghị posts na m na-agụ, ma m a na-acha ọcha 26 afọ nwoke si suborbs na m nwekwara e mwute site nke a. Ọ dịghị nnọọ ihe àgwà na-egosi ịkpa ókè agbụrụ bụ ka ndụ. The eziokwu na nke a bụrụ na a maara na ihe niile bụ ịkpa ókè agbụrụ na ya purest ụdị. Anyị na-ekwu okwu banyere nke a n'ihi na a na nwa okoro bụ nwụrụ anwụ. Anyị na e weere a black trajedy (ma eleghị anya, ọ na-eme mgbe mgbe, na nke ahụ bụ ihe mwute, ma ọ bụghị m mgbe ebe a) ka ihe dị mkpa karịa ndị ọzọ niile na ọtụtụ puku ihe ọdachi ọ bụla ụbọchị. E nwere ụdị nile nke trajedies nke nwa ndị mmadụ na-egbu ọcha folks na ọbụna agbụrụ kpaliri ndị, na-adịghị kọrọ na glazed n'elu, na nke a kwa, na-aghọ a nkịtị ihe. Mgbe Wisconsin ngosi, M kwere na ọ bụ, a afọ ole na ole gara aga a flash ìgwè mmadụ mejupụtara African American na-eto eto ransacked ngosi na achikota ọgụ megide ọcha-na-, na ụfọdụ ha chịngọm ná ntutu isi ndị agadi ndị na ihu, ije n'ime obodo obibi na azụmahịa na nọmba na zuru na ụjọ na ike, na ọ dịghị media mkpuchi. Ị nwere ike iche ma ọ bụrụ na otu ìgwè nke na-acha ọcha na-eto eto iche na ojii? The media-ahọrọ, na ọ bụrụ na ị họrọ, ma ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya na “naanị a black mmadụ nwere ike ịghọta” n'akụkụ nke a, na a black ọdachi bụ ihe kasị mkpa otu, ọbụna ugbu a, mgbe Spain, China, ọcha, na-gburu a yiri ejiji. A nwere ike ịbụ ihe atụ nke ụfọdụ ụdị nke nwa “mgba,” i na-aghọta na. Ma nke a abụghị ụzọ dozie ya. M maara a ihu na nke a dị nnọọ agbasapụ ọdịiche dị n'etiti anyị. I gwara m ka a na-acha ọcha nwoke na m na-adịghị aghọta otú ọ bụ ka a ga-profiled, ma n'ezie na m na-profiled niile ndị ahụ na ụzọ, dị ka a nwa okorobịa. ekwenyere m, ọ na-moreso na ọchịchịrị acha akpụkpọ, ma “-eto eto” nwere ihe na-eme na ya oke. Ị na-asị m ga-dịghị mgbe ịghọta, ma eleghị anya, ị ga-dịghị mgbe ịghọta ihe ọ na-eme ka m na-eche dị ka mgbe niile m na nwa ụmụnna-elekwasị anya na martin, na-adịghị ọbụna na-ekweta eziokwu na ọ bụ ihe ọjọọ na mbụ na-ahọrọ nke a trajedy dị ka ihe dị mkpa ndị ahụ ọtụtụ narị yiri trajedys na-erukwa na kwa. M na-kweere na ọ bụ mmehie. Nke ahụ bụ otu echiche. Na ụfọdụ ụdị nke na-eme mmehie mindset bụ n'azụ ya ọ bụla ka ihe atụ nke ị na-ahọrọ otu agbụrụ ọzọ. Na m kwere ” ị bụghị na m akpụkpọ ụkwụ” naanị agbasapụ na ọdịiche dị n'etiti agbụrụ na-bụ mmegbu na nkwupụta. Ị maara ihe ọ bụ dị ka m na-aga mahadum, n'ihi na m na-adịghị 8 akwa na-ebikwasị gburugburu, mgbe na-ekiri African America na otu akara ule na-m ntụpọ na a mfọn? Eleghị anya ị na-eme adịghị. My na-ekwu bụ, na mgbe ọ bụla ị na-ekwu “ị na-amaghị ihe ọ bụ ka m agba,” ị na-agaghị eme ihe ọ bụla na-arụpụta, n'ihi na m nwere ike mgbe gị na agba. M kwere na ojii ndị dị nnọọ ka onye kpuru ìsì na okwu ndị na-eme ka a miri emi ike n'etiti agbụrụ. African America na-ekiri a Travon Martin ihe na-eche echiche otu ihe, mgbe ọcha na-eche echiche ihe kpamkpam dị iche iche. “Ọ bụ naanị na nri maka a ga-họọrọ dị ka mkpa, na ama, na ibu karịa ndị ọzọ nile, na ndabere nke mba?” M nwere ma na-ahụ otu African American Christian banyere nke a. Na-eleghara na eziokwu bụ ghara ịma. E nwere ike ịbụ eziokwu na ndị isi ojii na-profiled, ma ị na-ahọrọ na-etinye a ikpe na a ngosi dabeere na mba na-ezighị ezi, na enweghị nkwanye ùgwù ka agbụrụ ọzọ na-gburu nnọọ ka travon bụ.
Deborah Bilbo-Coney • August 19, 2013 na 10:47 Abụ • zaghachi
Gdoggy, ihe nile i kwuru na-eme uche. M nwa na nne nke ụmụ ndị ikom abụọ bụ ndị m mere ka ịhụ ka ndị mmadụ maka ha agwa na obiọma na-agba ha akpụkpọ. Ụmụ m dere ọcha na ụmụ agbọghọ, Hawaiian ụmụ agbọghọ, etc. na mgbe m na-gwara ha enweghị m nsogbu na ya n'ihi na anyị na-niile kere otu Chineke bụ nnọọ na mma. Man kere ike ogologo oge gara aga na Tower nke Bebel. Nke a na-kwuru na, na na ikpe. Ee, Trayvon ikpe e aired na ọ bụ a mmasị nke a Nchikota persistent na ndị na-adọrọ uche na ikpe. Gịnị ụfọdụ nwa ndị mmadụ na-adịghị aghọta bụ na nwa mmadụ bụ akpa ókè agbụrụ kwa. Anyị ga-eme ka a mgbalị ata ụta niile na agbụrụ. Ọ bụghị banyere agbụrụ naanị, ọ bụ banyere George Zimmerman bụghị na-erube isi na ndị uwe ojii mgbe ha gwara ya “Na-ekwesịghị iso.” Ugbu a, ụfọdụ ndị na-ezighị ezi ná nkwubi a dọtara ya inupụrụ nnọọ iwu nke na ọgwụgwụ na-echebe ya na Guzosie Your Ground iwu. M na-eche oké ọmịiko maka Trayvon ezinụlọ, karịsịa nne ya bụghị n'ihi na ọ bụ a nwa okoro ma n'ihi na ọ bụ a nne na-nwa! Crime bụ ihe ọjọọ n'agbanyeghị ndị na-akwa ya, ma ọ na-n'ezie na-eme a mpụ site bụghị na-eje ije n'akụkụ ụzọ? Zimmerman bụ kwa eme ihe ngwa ngwa, o kwesịrị na-echere a obere ogologo ịhụ ihe Trayvon omume bu, ma ọ bụrụ na ọ na-aga ele anya na a window ma ọ bụ na-agbalị imebi na a ụzọ tupu eso ya. EZIOKWU BỤ George Zimmerman nupụụrụ iwu a kapịrị SITE mmanye iwu! Ime na ná mgbakọ na mwepụ.
gdoggydog05 • August 19, 2013 na 10:47 Abụ • zaghachi
ekele gị na-aghọta m kwuru. ịnụ si African America dị ka gị, na-enye m olileanya. ekwenyere m George Zimmerman e ime ihe nzuzu. o kwesịrị echere cops, n'agbanyeghị otú iwe ọ bụ na obi wee na-adịwanye waba….ee, ị bụ nri. ọ dịghị onye na-erughị, maka dara iwu naanị, i Na-eche na ọ ga na-aga n'ụlọ mkpọrọ n'ihi na ndụ ma ọ bụ-ebubo na igbu ọchụ. anyị ga na-ele onye mere. ọ bụchaghị ihe na-eme. ka m nye gị otu ihe atụ. ok ihe atụ abụọ na m na-eche na-ikpe ziri ezi n'uche. ke idaha kiet, a nwoke litters…. ọ maara ya na-ezighị ezi ma na a nke adịghị ike, mgbe ụgbọala ala n'okporo ụzọ, ọ na-achụpụ ya mịlkshek si mcdonalds si na windo….. mgbe e mesịrị na, onye na-ahụ milshake, na-eche na ya a ewi rabitt (ama m ihe atụ ndị a na-nzuzu, ibu na m) na swerves, emebi ụgbọala na-anwụ. ihe bụ nwoke ikpe? igbu ọchụ? …. dịghị o mere littering. mmehie niile na-eduga ná igbu. mmehie bụ ihe mere Kraịst nwere na-anwụ anwụ. Ma n'ụwa ebe a, -ekpe anyị ikpe dị ka mpụ, na-iji. Na na na, ebe a bụ ihe ọzọ yiri dịruru ná njọ ebe a nta edinam na-akpata a ibu mmeghachi omume. A umengwụ onye na-anaghị arụ ọrụ ike zuru ezu na-elekwasị anya n'oge mkpa ihe aga-eme dị ka na-achọ ya mgbe 2 afọ nwa…. nwere ọhụrụ ya n'ime ụgbọ ala na ụgbọ ala na-agba ọsọ na-arụzi ụgbọala ụzọ ala… echezọ ya ekwentị na ụlọ….. a oku na-aga na-abịa site, ọ na-etinye on hour na oku na-aga na-abịa si na ya na nwa ya bụ ihe nwụrụ anwụ. Gịnị bụ ọ ikpe mara nke? Dị nnọọ umengwụ na-anọghị na-itinye uche? Ọfọn, nwa ya ike ichebe onwe ya. Ọ bụ a nwa. Ọ maara na ọ bụ ọrụ dịịrị ya eleghara eme ka ọnwụ ya. Nke a bụ mmadụ. The nwa enweghị òkè it.Only ọ bụ onye ikpe. Ọ dị mma, Zimmerman kwesịrị ikpe mara nke mgbochi nke ikpe ziri ezi na eleghị anya, ụfọdụ ndị ọzọ ihe …. ma, ma ọ bụrụ na ya ezi na travon tụgharịa na ya na e ọkụkụ ya, na mgbe ọ na gbara ya. George Zimmerman ikpe mara nke isi ndị uwe ojii. Ma, e nwere ihe ọzọ free uche party aka. Ọ bụrụ na Travon nwere, asị, 3 nhọrọ….. na-agba ọsọ (ọ fọrọ nke nta maa ngwa ngwa….. gaa n'ime….. ma ọ bụ ikekwe na-ewe iwe ma na ebịne George dị ka ihe mere ọ na-hassling ya. amaghị ihe ọ mere. Nke ahụ bụ uche. Ọ bụrụ na ọ na-agbalị na-esi pụọ na e achụgharị site Zimmerman, ya igbu ọchụ. Ma ọ bụrụ na travon, na nganga, chọrọ ịbụ ike ike (i nwere ike ịghọta ihe a….n'oge gara aga, a gaara m )…. mgbe na mgbe ahụ, o mere a free uche mkpebi na-egwuri n'ime ikpeazụ n'ihi. Ihe bụ nsogbu bụ na anyị na Na mara onye ndị mere. Ọ bụrụ na anyị na-amalite odori ndị mmadụ dabeere na ripple mmetụta nke anyị ụgha, na nmehie-ayi nile….i chere na ị ga-achọpụta na anyị niile kwesịrị-akpọchi pụọ. George zzimmerman ikpe mara nke obstructing na ndị uwe ojii….na ike ikpe mara nke ọzọ, ma na-enweghị ịbụ e, m nnọọ ka m na-amaghị ihe.
Agwa • August 19, 2013 na 10:47 Abụ • zaghachi
Zimmerman agaghị na-ebubo bụ ihe m na-eche na iwe n'ezie banyere. M na nwa ma m nkwado na-adịghị dabere na agbụrụ niile. Ọ bụrụ na ndị agbụrụ na-tụgharịa M ga-eche 100% kpọmkwem otu ụzọ. A nwoke na a egbe vesos a nwa ewu.
M na-eche na mgbe ị na-Onye Okike nke ize ndụ ma ọ bụ nsogbu.. ị na-culpable irutu… M nnọọ ka FL nwere ụfọdụ iwu na ike-ata ya ahụhụ, n'ihi na Z wee si na-achọ maka nsogbu nke abalị.
M kwenyere n'ezie na ọ bụrụ na a cop bịakwutere Trayvon, Trayon ezie na-ewe iwe, ka ga-adị ndụ taa. Na m eche na ọ bụ ya mere m ezigbo iwe were ya. M nnọọ ịhụ ọnọdụ a dị ka nwa na-tụfuru ndụ ya na-e na otu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ndị ọzọ, ibu ọrụ dị ka a nwoke.
pepjrp • August 19, 2013 na 10:47 Abụ • zaghachi
Ị na-amaghị eziokwu ma agwa. Nweta eziokwu na ma eleghị anya, ị ga na-eche mma.
Rita • December 9, 2014 na 2:24 pm •
SB, Off niile youtubes na bụ ihe kasị ofniesfve m hụrụ. Ọ bụ dị ka akpa ókè agbụrụ dị ka Sharpton na Jackson. M mgbe e mere embarassed nke mba m kemgbe na nwa sob merie on a gbagọrọ agbagọ mba!Mgbe ọ wears ndị leggings anya AF1 m na-aga f'king mkpụrụ.
O nupụrụ! Chọpụta nke bụ eziokwu. Ị na-amaghị ha niile.
Nathanial Poling • August 19, 2013 na 10:48 Abụ • zaghachi
Ha kwuru na ị na-enweghị ka na-eso ya… nke na-adịghị ka ihe ga-a kpọmkwem iwu. Ọzọkwa, onye ọrụ na 9-1-1 adịghị nwere kacha ikike. Ọ bụ egwu na a nwata nwere ịnwụ, ma m na obi abụọ gị ọma zụlitere ụmụ okorobịa ahụ ga nwere mgbe nsogbu Mr. Zimmerman na iti ya isi megide n'akụkụ ụzọ, ma nyawaa ya imi. Ọ ga jụrụ ha ndị ha bụ, ha gaara zara olu ọma na ihe mere ha ji na-agba ọsọ dị n'etiti ụlọ na a gbara obodo na ndụ na-aga.
pepjrp • August 19, 2013 na 10:48 Abụ • zaghachi
Your a mma nwaanyị Deborah, ma ị na-na-ezighị ezi dị ka nwere ike ịbụ mgbe i kwuru na ọ bụ banyere ihe George Zimmerman bụghị na-erube isi na ndị uwe ojii mgbe ha gwara ya “Na-ekwesịghị iso.” O nupụrụ onye ọ bụla. -Ege ntị ọdịyo na Youtube! O kwuru OK na malitere ije ije azụ ya gwongworo. Ọ bụ nke ume mgbe ọ na-na-esonụ Martin, ma mgbe ọ sịrị OK, oké ume kwụsịrị dị ka ọ zara a di na nwunye nke ajụjụ ndị ọzọ banyere okwu maka na cops na mgbe ọ na-ekokwasị n'elu dị ka a ọnụ ọgụgụ nke nkeji gara site na o doro anya na-ekwu na ọ na-amaghị ebe Martin wee. Martin bụ naanị 50 mita site n'ụlọ ya, ma ọ bịara azụ idaha. Your comment nke ala akara bụ George Zimmerman nupụụrụ iwu a kapịrị ndị mmanye iwu na-ata nonfactual na ị na-adịghị ike iyi ka ụdị onye chọrọ agbasa ụgha. Ị na e ụgha dị ka nwere 1,000 na 1,000 na nke ndị ọzọ! Listen na nnyocha na ị ga-ahụ na m na-agwa unu eziokwu! na nyochawa, na 911 ọrụ si Zimmerman “Anyị na-adịghị mkpa ị na-eme na”. Zimmerman kwuru OK na i nwere ike ịnụ na ọ kwụsịrị na-agba ọsọ. Chọpụta nke bụ eziokwu na-adịghị kwere na akpa ókè agbụrụ ụgha.
Andrew Keeter • August 19, 2013 na 10:49 Abụ • zaghachi
Njem na m ga-
na-ekweta na gdoggydog05
n'ihi na ọ na-akọwa ya dịruru ná njọ nke ọma.
Nke a see okwu n'etiti ZIMMERMANN na Martin bụ ihe na
eme na a kwa ụbọchị a na mba na dị ka ukwuu nke a ọdachi dị ka ọ bụ na
ahụ a na-eto eto mmadụ gburu, ọ bụ ihe nke a ọdachi ịhụ media ka nke a ghọọ
a agbụrụ chụpụrụ ikpe na-enweghị o kwere omume ọma pụta ma ọ bụrụ na ZIMMERMANN hụrụ bụghị
ikpe. N'abalị Trayvon gbara
e nweghị agbụrụ àgwà site ZIMMERMANN na pụrụ pụtara. The media na Jesse Jackon, Al
Sharpton, president Obama, The New Black akukonta Party na ndị ọzọ na nnukwu oge
African American siri biliri inye echiche ha na ihe ha na-eche
mere mgbe ọ dịghị onye ma e wezụga Trayvon Martin na George ZIMMERMANN n'ezie maara ihe
mere. Ihe omume ndị a kere a oké ifufe
nke ime ihe ike agbụrụ okwu pụrụ-akwụsị. Echere m na anyị kwesịrị ikpe ekpere maka abụọ nke a
ikpe na-arịọ na Chineke kwụpụ na ịkasi ndị na-emejọ, iwe, na
mgbagwoju anya banyere nke a dum ọnọdụ.
Setan nwere akara nke media a na mba na ọ na-eme ihe ọ chọrọ
na ya. Ị na-anụ banyere akụkọ
nke ga-kasị anya otú ahụ ndị a na-abụchaghị eziokwu media ụgbọ nwere ike na-ere
ikuku oge maka ulo oru na-egosi mkpọsa ngwá ahịa.
M pụtara otú ọzọ ka ị na-eche na ha ebubo n'oge a
ikpe na Fox News, CNN, MSNBC na ndị ọzọ na ndị mmekọ ka ulo oru nwere ike inwe
ha mkpọsa ngwá ahịa na-ere ha na ngwaahịa ka ọha na eze. Ọ bụghị banyere akuko ozi ọma na
ọnwụ nke a nwa okorobịa ụzọ n'ihu ya oge na onye gbara ya…..ọ
banyere ego nke bụ mkpọrọgwụ nke ihe ọjọọ.
Usoro mgbasa ozi a ụgbọ e egosi a nzọ ụkwụ maka gara aga atọ
izu obon ọzọ na ndị ọzọ ego dị nnọọ n'anya ya. M nzọ ha chere na ha na-ekpe ikpe ga-aga ogologo
ya mere, ha nwere ike na-raking na uru.
Ọ na-arịa ọrịa otú anyị na-enye ọtụtụ nke ndụ anyị na TV na-erube isi dị ka ọ
bụ anyị nkụzi mgbe anyị ga-elekwasị anya Jesus. Ị ọbụna nwere a song na-ekwu okwu banyere
anya gị nke na ị na-etinye ha na Ya.
Anyị mkpa anyị anya TV na-elekwasị anya na anyị onwe anyị obodo na chọọchị dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị na-ebi California, Virginia, New York,
Montana, Texas, etc… anyị enweghị ike ịgbanwe ihe mere na Florida ebe Trayvon
gbagburu, ma anyị nwere ike ịgbanwe otú anyị obodo na-eme. Anyị na-akụziri ụmụ anyị banyere Chineke, Jesus, na
Mmụọ Nsọ. Anyị ahọpụta obodo
isi, ọchịchị, uwe ojii chiefs, mayors, etc na-eguzo n'ihi na anyị Christian
ụkpụrụ na agaghị azụ ala mgbe ha na-egwu site ndị ka nwere
ákwà kpuchie anya ha ka ha. Anyị nwere ike na-
n'ilekwasị anya na ihe na-eme awa mgbe anyị onwe anyị obodo na-adọga
si na otu mbipụta. M a na-acha ọcha 28
nwoke bụ onye na-eje ozi ná mba a na-alụ ọgụ na Iraq agha. M deployed a mba ebe ha nwere
ihe ọ bụla na hụrụ niile ọtụtụ ihe m ka na-akpọrọ ihe taa na a
ndị mmadụ ga-enye aka ma obu ukwu nwere.
O mere ka m na-aghọta na e nwere ọtụtụ ibu nsogbu n'ụwa a karịa
obere ise okwu anyị anọgide na-eme. Satan
chọrọ rile ndị mmadụ elu na-esi na ha niile na-ewe iwe ime ihe ike agbụrụ. Onye ọzọ si ya na ha na post, Ma Aga m
-asị ya oke. The naanị agba anyị mkpa ịdị na-
nchegbu na bụ agba red-anọchite anya ọbara Jizọs. M n'ezie na-eche ihe mgbu gị na-enwe agbụrụ
àgwà n'ihi na mgbe m dị obere na m nwere onwe m ma ka na taa m na-ahụ
ọ. Gdoggydog05 mere oké uche banyere
ọcha ụmụ na-enweghị ike ịga mahadum n'ihi na ha enweghị ọtụtụ puku
dollars dina gburugburu ịfụ, ma ụmụaka agbụrụ ọzọ na-enwe ike iji nweta ego
si ọchịchị iji nyere ha aka.
Otu ihe na-aga n'ihi ọrụ na nri ngwa ngwa ma ọ bụ ulo oru ka. M na agbụrụ profiled mgbe m dị obere
agbalị iji nweta a ọrụ na McDonalds na abụọ ụmụaka bụ ndị a dị iche iche agbụrụ mgbe m
nwetara ọrụ na adịghị m. Ọ bụ adịghị mma,
ma ndụ adịghị mma mgbe ụfọdụ na na na-dị nnọọ na-egosi na ị na na Setan bụ
na-na na ị na. Ọ bụrụ na Chineke nwere ike ịgbaghara niile
mmehie gị mere ga acha abụ nsogbu na Ya? Agbụrụ àgwà bụ nke ụwa a, Setan bụ
onye na-achị ụwa a ruo mgbe Jizọs bịara azụ ya azụ. Tupu mgbe ahụ anyị ga na-ebi n'ụwa a, ma anyị
na-adịghị na-ebi ndụ nke ụwa a. anyị
ndu ihe elu karịa ụwa a na-etinye onwe anyị n'elu mba. Anyị niile na-arahụ site na siiri. Ụfọdụ agawo na siiri ndị na-
mere site ụcha akpụkpọ ahụ ha. ụfọdụ
wee site siiri n'ihi ụzọ ahụ ha na-ese. Ụfọdụ gara site esịtidem siiri na
e mere si nwa. Ụfọdụ emewo
stof ha na-eche na ha nwere ike mgbe gafere na ihe mere ndị a nile
mgbe ha bịara mara Christ? ha niile
ama aka ike ha. ọ ga
ka anyị na-ada na Ọ ga-eduzi anyị site na siiri. Nke a Trayvon vs ZIMMERMANN ihe kwesịrị
kwụsị n'ihi na a mkpebi e ruru.
The ikpe ziri ezi usoro mere ya ọrụ na anyị mkpa ile anya
eziokwu. Ọ bụrụ na nke a bụ n'etiti abụọ
ndị mmadụ nke otu na agba anyị dị ka otu mba ga na-anụtụbeghị banyere ya na
otu mkpebi a gaara ruru enweghị onye ọ bụla maara. Anyị kwesịrị ịkwụsị ekwe ka media na
siri ịchịkwa anyị echiche. Ọ bụrụ na anyị na-
etinye okwukwe anyị na nwoke ahụ anyị ga ada.
Kwụsị na-elekwasị anya na ha ma na-etinye anya gị na Ya.
shope • August 19, 2013 na 10:50 Abụ • zaghachi
Ọcha nwere wakpoo ojii n'ihi na ọ dịghị nnọọ ihe kpatara. Cheta KKK?
Matty • August 19, 2013 na 10:51 Abụ • zaghachi
Ezie na m kpam kpam na-ekweta na ihe niile si ebe a, M na-eche na ọ dị mkpa na-eso eziokwu na ọ bụghị mmetụta uche anyị na nke a. Obodo uwe ojii na ndị FBI nwere kpebisiri ike na ịkpa ókè agbụrụ na-ekere òkè nke a. Ha hụrụ na-egosi na Zimmerman profiled Martin dabere na ya mba. Ha hụrụ na-egosi na Zimmerman profiled Martin dabeere na-enyo anyị enyo ọrụ. Zimmerman naanị zara mgbe a jụrụ ndị uwe ojii na ihe agbụrụ Martin bụ. Ọ bụghị na-akpọ elu ma na-ekwu ọ na-esonụ a na-eto eto na nwa nwoke. Ana m ekwu na ọ bụghị agbụrụ àgwà. Ma ndị na-egosi adịghị ekwe ka anyị na-eme na mkpebi siri ike. Na blindly ị na-ahọrọ na-kweere na ọ agbụrụ mgbe e nweghị ihe àmà banyere eziokwu ahụ na-eme ka ikpe agbụrụ mgbe ọ na-adịghị mkpa ka. Race abịaghị na-ekpe ikpe. Ọ bụrụ na ikpe kwere Zimmerman ime nke akpa ókè agbụrụ ebumnobi, adịghị ị na-eche na nke ahụ ga-abịa? The ikpe mkpa iji na-enweta jurors ha n'akụkụ…egosipụta Zimmerman dị ka a akpa ókè agbụrụ gaara ụzọ kasị mma ime na.
The nke ị na-ekwu banyere bụ incredibly n'ezie na incredibly jọrọ njọ. M na-dị nnọọ na-arụ ụka na nke a, egosipụta na ya dị ka a akpa ókè agbụrụ okwu mgbe ndị na-egosi anaghị akwado ọ dị ize ndụ na-adịghị mma.
Samuel Coleman • August 19, 2013 na 10:51 Abụ • zaghachi
Ekiri ihe a na Video….
Njem m n'anya ma na-akwanyere gị ùgwù, gị music na gị ozi ma m kpam kpam na-ekweta na Jonathan Sampson n'okpuru….
M na-ekweta na e nwere bụ maa ịkpa ókè agbụrụ taa ma nke a na-media ntị bụ a ụyọkọ unyi.
All nke ikpe na Glen Beck na-ekwu banyere ọkọdọ 000000000 Media ntị…. Gịnị mere ??/ bec anyị nwere a Liberal abụghị Christian Country onye na-eso Nna Ekwensu…. Ma na anyị nwere a President ndị na arụ orụ mbuba kaadị mgbe nkeji .. ya mere ? Iji nweta ihe ọ chọrọ …. abụghị maka Justice bụghị Eziokwu….
Dị ka a na-acha ọcha nwoke nwanne m nwoke na-enwe n'Ụlọ egbe onu bec ọ bụ na-acha ọcha.. dị ka a na-acha ọcha nwoke My nna ya na mahadum enyi na ndị si àmà na ọkọdọ gburugburu site a òtù ndị isi ojii bec ọcha ụmụ nwoke na-adịghị kwesịrị ịbụ na na ebe nke obodo ahụ.. ụmụnna m enyi nwetara egbe kpochapụrụ ka ha na-aga.. My papa kwuru okwu nke Mmụọ Nsọ, arịọ ndikom ” agụụ ọ na-agụ gị” na Chineke maara na ha erighị na a ụbọchị ole na ole zọpụta Nna m…….
Ọ dịghị m na a na nwa mmadụ ma m na-eche na jọgburu maka Trayvon na mgbe e REAL ịkpa ókè agbụrụ…
Anyị Country na-agbada igbapu.. Ndị Rom 1. Chineke nyere anyị ruo rụrụ arụ n'obi…. Gịnị ka anyị hụrụ bụ ihe ọ bụla tụnyere ihe na-aga na-abịa.. Kaa m àkụ ma ọ bụrụ na America na-aga n'ihu n'ụzọ ọ na-aga, ọ ga-Iwu na-akwadoghị na-a Christian na anyị ga na-gburu na n'okporo ámá..
Dave • August 19, 2013 na 10:51 Abụ • zaghachi
Ghọta na isiokwu, njem.
Otu ihe m na-eche na nke ahụ bụ mma ka anyị na dị ka Kraịst na-na-uche bụ na anyị kwesịrị asị ịkpa ókè agbụrụ / na-ezighị ezi oge, n'agbanyeghị ihe n'ụdị ma ọ bụ ejiji ya na-abịa na ọ bụ na agba na ọ na-eduzi kwupụta. The mwute banyere ihe dị ka nke a banyere Trayvon bụ ọdịiche mgbe na-wider & ya yiri ọzọ nzọụkwụ na-e azụ kama n'ihu, n'ihi na ọtụtụ ndabere na-ewere eke n'akụkụ (agba ka ihe atụ) kama ị na-ahọrọ n'akụkụ dabeere na ikpe ziri ezi / na-ezighị ezi. Alaeze Chineke ga-agbanwe otú ndị anya m na anyị na-yi-ahụ ụwa. Anyị ga-abụ banyere n'ime ihe ziri ezi n'elu-eme dị ka anyị si mba. Anyị ga-abụ banyere obiọma ebere n'elu a na-akpata naanị ọdịmma onwe iwe.
Nke a abụghị n'ikpeazụ a agbụrụ nke. Nke a bụ a na ụmụ mmadụ mmehie nke na-egosi na ya onwe ya na ọtụtụ iche iche iche iche, mgbe ụfọdụ site na-ewere n'akụkụ dabeere na mba. Ndị si n'agbụrụ echiche & profaịlụ eachother. Anyị ga-eme ka otu ụfọdụ agba (dị iche iche karịa anyị onwe anyị) dị ka onye iro. Ndị mmadụ n'otu n'otu na-eme mmehie obi echiche. Ọ bụghị agbụrụ na & nke onwe ha n'ikpeazụ na-eme na. Ọ bụrụ na anyị na-echefu na & ndụ n'okpuru akara nke na nke na-atụ anya nke ụmụ amaala Alaeze Chineke, anyị ga-ise edoghi dabeere na mba & dị nnọọ ejedebe na-agbakwụnye na mkpọtụ.
Ka anyị na-alụ ọgụ maka ikpe ziri ezi ebe ọ chọrọ ka a agha, bụghị nanị n'ihi na ndị anyị nwere ike ikwu na, ma ndị bụ ndị nọ na mkpa n'agbanyeghị. Satan & Sin bụ ndị iro. Na ha na e meriri site Jesus ke cross & na ili. Ka anyị buru ụzọ kọwaa site agba red ọ bụla ọzọ, agba nke ọbara Kraịst na saa anyị ọcha.
Nicole • August 19, 2013 na 10:55 Abụ • zaghachi
M maa ekweta na agbụrụ bụ n'ikpeazụ a mmehie nke, ọ na-adịghị na-agọ. Ma akọwapụta mmehie mbipụta na-enyere anyị mee ha nke ọma karị. Sex ahia mgbere na-akpata, a abịa nke ma tackling na dị iche iche karịa tackling a onye mmehie ahụ riri. The Bible nwere ọtụtụ ihe atụ nke ndị dị otú ahụ nkọwa dị ka nke ọma. Na niile activism ga-arụ ọrụ n'ebe na-atụ ndị mmadụ Christ, nanị ezi ihe ngwọta.
Agwa • August 19, 2013 na 10:55 Abụ • zaghachi
M Christian mbụ, black abụọ- ma ọ bụ atọ ma ọ bụ na-eme ihe n'eziokwu m na naanị a Christian. M akwado Trayvon na ezinụlọ ya bụghị n'ihi na ọ bụ nwa, kama n'ihi na ọ bụ nwa ewu. A mara ya ikpe ọnwụ maka a ntụmadị bụ kwa ike a ahiriokwu nke obi m ma ọ bụ akọ na uche m na-aka. Trayvon nwere ọtụtụ ihe na-amụta na ndụ… Ndi anyị akwụsị anya maka na anya, ezé lara ezé ikpe ziri ezi na Jesus? Ike Trayvon bụghị a gbara na ogwe aka ma ọ bụ ụkwụ? Gịnị mere obi ya? M na naanị mwute maka ọnwụ nke ndụ, na ọ ga-dịghị mkpa bụ ihe na agba ya bụ- A na nwa nwụrụ anwụ. M na-eche dị ka ndị okenye na, Zimmerman nwere ihe ibu ọrụ (n'anya m) na-na ọnọdụ udo. ugbu a, ka o mere na? Ikwurịta okwu na a enyi na enyi ụzọ na ọ bụ na-eche nche? Naanị Chineke maara. Na naanị Chineke ga-aza ezi ikpe ziri ezi.
“All m maara bụ na abụghị m n'ụlọ na nke a [ụwa] abụghị ebe m nwe.”
Nathanial Poling • August 19, 2013 na 10:56 Abụ • zaghachi
Ị na anya isi Zimmerman iji n'ihi na obi-? M n'aka Zimmerman ga họọrọ igbu afọ iri na ụma na-agbalị iti ya ụbụrụ si.
Agwa • August 19, 2013 na 10:56 Abụ • zaghachi
The bullet wee ogologo site obi, n'ihi ya, ọ ga-abụ ezigbo iche na bụ Zimmerman ahụ zubere.
Ihe ọ bụla ya mmasị bụ enweghị ike ịgbanwe ihe ọ n'ezie mere. M mara mma n'aka ma ọ bụrụ na m na-na-na-afụ ụfụ, na m nwere a egbe (nke bụ eleghi anya), M ga-gbaa ya afo, ogwe aka, ụkwụ- ebe ọzọ dị iche n'ebe obi ya.
o doro anya na ị na mgbe ke a ọgụ… ma ọ bụrụ na i nwere na oge dị ukwuu ịhụ na ị nwere ike gbara na ikuku na ka Ihọd ọsọ
Tylor • August 19, 2013 na 11:00 Abụ • zaghachi
ka-anọgide na-ekwu banyere nke nke ịkpa ókè agbụrụ, ee. ma kwụsị ụgha akpakọrịta ịkpa ókè agbụrụ na nke a. mgbe a afọ nke obon na-egosi dịghị onye dị mgbe ike ịhụ ihe ọ bụla berisie nke ihe àmà nke ịkpa ókè agbụrụ na Zimmerman n'oge gara aga ma ọ bụ n'abalị. ka kwụsị achụ ghosts na-elekwasị anya na ezigbo ịkpa ókè agbụrụ – dị ka ụdị ndị media gosipụtara n'oge a nwuo agbụrụ iro na-etisa anyị dị nnọọ ka dịkwuo ha ratings.
Tony Cline • August 19, 2013 na 11:00 Abụ • zaghachi
Ọ bụ na ọ akpa ókè agbụrụ iche na a nwa nwoke ọzọ bụ nke a ize ndụ karịa ndị ọzọ na agbụrụ mgbe African-Americans-eme ka elu 12.6% nke ndị bi ma ime 49.7% nke ikwa, nakwa dị ka a ukwuu disproportionate pasent nke rapes, ẹma ẹsịn, robberies, na ihe ọ bụla ọzọ mpụ ndị FBI tracks ma e wezụga n'ihi dui? Bụ na akpa ókè agbụrụ, ma ọ bụ bụ ya dị nnọọ ọgụgụ isi mkpebi dabere na mkpa eziokwu? M na-adịghị na-ekwu na ịkpa ókè agbụrụ adịghị adị; ọ na-eme, na n'akụkụ niile. Otú ọ dị, e nwere ihe ọzọ na-akparịta ụka karịa na-asị na onye ọ bụla nke na-ele nwedịrị ike ịta gburugburu ndị mmadụ na-statistically yikarịrị ka hà ga-eme ihe ike omempụ bụ a akpa ókè agbụrụ.
Washington DC ozioma • August 19, 2013 na 11:00 Abụ • zaghachi
“hụrụ n'anya, mgbe abọrọla onwe unu ọbọ, ma na-ahapụ ya ka ọnụma nke Chineke na, n'ihi na e dere, "Ịbọ ọbọ bụ nke m, M ga-akwụ, ka Jehova kwuru. "Kama nke ahụ, "Ọ bụrụ na onye iro gị agụụ na-agụ, ya nri; ma ọ bụrụ na ọ bụ ya bụ mmiri na-agụ, nye ya ihe ka na-aṅụ; n'ihi na site n'ime otú ahụ, ị ​​ga-ekpokwasị icheku ọkụ n'isi ya. "Ekwela ka e merie ihe ọjọọ, ma merie ihe ọjọ na ezi.” ~ Ndị Rom 12:19-21
C. • August 19, 2013 na 11:01 Abụ • zaghachi
Anaghị m n'ezie na-ekwekọrịtaghị na ihe ọ bụla i kwuru, karịsịa na otú jọrọ njọ ọ bụ mgbe ndị mmadụ na-adịghị nyere abamuru nke obi abụọ na ndị ụbọchị oge. Ma ọ na-enyi na ụfọdụ cops na m maara na, n'ihi na ụfọdụ n'ime ha, inye ihe nke na anyị obi, ga-nwetara ha gburu. Nke a ụwa ahụ gbajiri na mkpari mgbe ụfọdụ, na ikpe ọmụma na junk niile n'elu ebe. Naanị Jizọs nwere ike sere anyị si na ya.
M asị na unu nwere obibi na stof. M asị na na ụzọ ụfọdụ àgwà bụ ibu jọrọ njọ, jogburu mkpa (bụghị na Zimmerman ikpe). Ya ike oke, na media na omenala nke na-emetụta ụdị ihe oyiyi ahụ fọrọ nke nta ka na-ekwusa na-emeghe, ike ike, mpako mmebi iwu. Nakwa na e nwere ndị na-eme ego anya nke a na omenala nke ime ihe ike na asọpụrụghị Chineke. Na na ọtụtụ ndị na-adịghị aghọta ihe bụ na ọ bụ dị ka ndị ọzọ na Ihọd nwere ike na-eche na-erughị na ya amaghị ihe ọ pụtara ịbụ onye ndị ọzọ Ihọd.
M n'anya na ịhụnanya Chineke bụ nke ukwuu dị ike karịa ụwa. M nnọọ ka na ịhụnanya Chineke ga-ọzọ mgbe egosipụta na ụwa site na anyị, na bụghị n'agbanyeghị anyị.
Mkparịta ụka ga-hoo haa anọgide. :)
Oké stof Mr. Lee. Chukwu gozie!
apallo95 • August 19, 2013 na 11:01 Abụ • zaghachi
mgbe ịkpa ókè agbụrụ bụ a nnukwu ihe a ọtụtụ ndị na o yiri ka na-echefu na Zimmerman e Latino onwe ya. dị nnọọ etinye na si n'ebe dị ka a eziokwu na kwesịrị nọ n'uche mgbe a na-atụle
Lizzi • August 19, 2013 na 11:01 Abụ • zaghachi
M kwere a nnọọ irè ụzọ alụ ọgụ megide ịkpa ókè agbụrụ bụ nwere-atụ egwu Chineke, n'eziokwu nwa ikom na-ebi ndụ ndụ na imebi echiche ka anyị na-arụtụ aka na na-asị No, mmehie bụ nsogbu, bụghị agbụrụ. M nwere nnukwu uche nke fọrọ nke nta niile nke nwa nwoke na ndị nwaanyị m na ùgwù na-akpọ ndị enyi na mentors. M ọzọ yiri ka a ga na-abụchaghị eziokwu na ha amara karịa ihe ọ bụla ọzọ… Na-apụghị Iru Records bụ nnukwu ihe na-akpata nke a, maka a keisi ocha girl-eto eto na amara na a na-edified hugely ha music. Ihe ị na-eme bụ nnọọ aka.
Lynn • August 19, 2013 na 11:02 Abụ • zaghachi
Amen na Amen!! Anyị ga n'anya na ịhụnanya nke Kraịst na-ekpe ekpere maka n'ezinụlọ abụọ na na-aka. Racism bụ ezie na nke a na-agbawa obi m hụ. Daalụ maka na-ekere òkè nke a!
Michael • August 19, 2013 na 11:02 Abụ • zaghachi
M dere ihe a n'oge a mgbede tupu m na-agụ gị post, nke m kpam kpam na-n'agbanyeghị, na m chere na m ga-eso ya
Ya mere ọ bụrụ na ị na-ezo n'okpuru a oké nkume Zimmerman hụrụ bụghị ikpe ndị ọzọ ụbọchị. Ụfọdụ ga-ikele, ndị ọzọ ga-eti ndedehe. Nke a na-achị na-ekewa mba ahụ na na ụfọdụ ọbụna na chọọchị. M na-agụ a comment taa si a onye na media, na ha na-ekwu n'ezie ka ọbara m obụpde. Onwe m na e nyere a a otutu echiche, na m nwere m echiche, ma nke a na post bụ banyere ihe m na-ma ọ bụ adịghị na-eche banyere Zimmerman si aquital. Jizọs kwuru na Onye Ohi abịa izu ohi, -egbu ma na-ebibi….(John 10:10) Division bụ a nkịtị na-egbu. Ọ na-eto site na mkpụrụ nke obi ilu na-akụ na obi anyị mgbe anyị na-anya anyị anya Jizọs na ga-abịa ma ọ bụrụ na anyị akpacharaghị anya. Luke 6:45 -ekwu “Ezi mmadụ na-esi n'ezi akụ nke obi ya na-ewepụta ezi ihe; na ihe ọjọọ mmadụ na-esi ihe ọjọọ akụ eweta ihe ọjọọ; maka ya ọnụ na-ekwu si na ihe jupụtara n'ime obi ya. ”
Mgbe Jizọs malitere ozi ya na desciples hụrụ Jizọs ka politcal mmume. Ha na-atụ anya Jizọs swoop na na nri ọ bụla na-ezighị ezi na Rome ama rụtụrụla ndị Juu. Ikekwe ha bụ dịkwa mma na Jesus cracking ụfọdụ Roman isi ma ọ bụrụ na ọ pụtara idozi afọ nke na-arụ. Ma site n'ụbọchị otu Jizọs kwusara ịhụnanya na ohu hundu. Ụfọdụ ebe ndị na-eso ụzọ probablly achọpụtabeghị Jesus agaghị Bruce Lee onye ọ bụla. M na-eche ihe ha chere na nke na naanị? Ndị Juu na ndị mere mgbe arụ maka a nnọọ ogologo oge. N'ezie m kwere si n'akwụkwọ ikpeazụ nke Old Testament na oge nke Jesus bụ ihe dị ka 400 afọ. Mkpụrụ ndị iwe n'obi na obi ilu si na-arụ ya blossomed na ha dị njikere iji nweta ọbụna. The Messiah akpatre abịa na ọ bụ oge ka rally agha, n'aka si ji na oké ifufe na nnukwu ụlọ. Ma mgbe ha na-ọkụ n'ọwa Jizọs nkwusa agbata obi gị n'anya ma na-eme si ndị ọzọ dị ka ị na-achọ ka ha na-eme unu. Na-akwọ ụgbọala ha crazy. Iji tinye ịkparị mmerụ dị ka Jizọs eyịride si cross, Ọ rịọrọ ka Nna ga-agbaghara ha, n'ihi na ha n'ezie maara ihe ha na-eme. Ya mere, ihe na-eme nke a niile pụtara?
Jizọs bụ mmume nke ịhụnanya na dị ka ya na ụmụnna anyị na-rịọrọ, dịghị e nyere anyị iwu ime otu ihe ahụ. N'ihi na, na ngwụsị nke ụbọchị Ịhụnanya bụ nanị ihe na-ọ ga-anọkatakwa agbanwe ihe ọ bụla. Anyị nwere ike oké ifufe a nnukwu ụlọ, na mkpesa niile anyị chọrọ, ma a ga-enwe mgbe nile a zoro ezo burukwa ma ọ bụrụ na anyị amaghị nke ya mbụ. Ịhụnanya gwọọkwa merụọ obi na n'otu gbajiri mmekọrịta. n'anya, na-ewuli elu, na-agba ume, na ntụsara. Ịhụnanya adịghị akatọ, ma ọ bụ na-ajụ, ọ na-agbakụ. Anyị na-adị ngwa ichefu na mgbe anyị nọ na mmehie niile Kraịst nwụrụ ọbara ya e mere dị ka: The ọgaranya, ndị ogbenye, nwa, na-acha ọcha, (na ihe ọ bụla ndo ke n'etiti)na ogologo, nwoke nwere mmasị nwoke, nna, na olileanya na-adịghị, -enweghị ebe obibi, na-emegbu emegbu, ndị jụrụ, okpukpe, islam, na-eyi ọha egwu, nwa na-emetọ ụmụaka ndị ohi, akụ president, ọkàiwu, ndị na-agbanyụ ọkụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, dọkịta, na ihe ọ bụla ọzọ na ọ bụla na-adọrọ mmasị a ume n'ụwa a, Jizọs nwụrụ maka ha. Ọ bụrụ na e a mkpesa ka a mere mgbe ahụ ka ọ na-na ọnụ ụzọ ámá nke Hell site nwunye ọhụrụ nke Kraịst, na-ekwu na Anyị ga-n'anya, anyị ga-eje ozi, anyị ga-agbaghara dị ka Jizọs mere maka anyị.
Eric • August 19, 2013 na 11:02 Abụ • zaghachi
Gịnị mere ọ African American, M na-adịghị akpọku onwe m Irish American, M nnọọ American, A mụrụ m na ebe a na-na Ireland. Lee nke ahụ bụ ebe segregation amalite nkerisi elu n'ime iche iche, mgbe ahụ anyị na-na-na na gị mma, amalite. Na segregation udiri anumanu ịkpa ókè agbụrụ, ma ndị na-ezighị ezi, Trayvon, bụ maka slamming Georges’ isi n'ala, plus ma ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla na-ezighị ezi mere gaghị ọ dị nnọọ ime? George ga gere ntị dispatcher ka cops aka ya. Ma ọkụ nke American ọkọlọtọ, bụghị African American, Mexico American, Irish American, English American, ma ọ bụ Scottish American ọkọlọtọ, dị nnọọ American, bụ ihe ọjọọ. Nke ahụ bụ dị ka n'itinyekwu na obi ọ bụla American na nwụrụ na-echebe ihe niile ọ pụtara. The ọnwụ egwu Georges ezinụlọ na ọtụtụ n'aha Trayvon killings ahụ mere bụ ụzọ na-ezighị ezi. Jehova kwuru na-atụgharị unu ha ntì nke ọzọ, ọ bụ na anyị chefuo onye bụ na-elekọta ebe a. Trayvon nweghị senti, na George bụ ọ dịghị ogbu, Ha abụọ bụ ndị e ọnọdụ. Ọ dịghị onye kwesịrị nwetara tikasịkwara na ọ dịghị onye kwesịrị funahụrụ ha ndụ. Nke a bụ ihe niile a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị play maka ikike na oké nduhie ka nwetara ihe ọ chọrọ. Nọrọ na-esite na okwu gị abụghị media.
Agwa • August 19, 2013 na 11:06 Abụ • zaghachi
M ga-ahụ n'anya ga-atụle nnọọ ihe American. Ọ bụghị ihe African American. Ma otu Ewoo agaghị ekwe ka m na. M na dị nnọọ ka American dị ka ọ bụla onye ọzọ. Ma mgbasa ozi mere ka ukwuu nke a ike.. na ndị zụtara n'ime ya.
M na-echeta otu n'ime ndị mbụ ọrụ m nwere. A na-acha ọcha na nwaanyị nọdụ ọzọ m na gwara m.. “Ya mere ị maara na ị bụ onye mbụ African -American anyị goro?” Ọ mụmụrụ ọnụ ọchị ma anya mpako. Ka ọ dịgodị, M na ihere, dị ka ụfọdụ ntem enwe na rutere zoo njikere na-egosi ha otú ọma ha “mbụ” black-arụ ga-eme. N'ihi gịnị ka o nwere na-ezo na e si na-eme ka m na-eche otú… weird? M nnọọ chọrọ ịbụ a nkịtị na nwa ewu na ya nke abụọ ọrụ nke mahadum, ma kama m ghọrọ a paranoid ọgbaghara..
Ya mere, gịnị ka m na-ekwu African American? Ọfọn, ka m nwere a nhọrọ?
gabetaviano • August 19, 2013 na 11:06 Abụ • zaghachi
Awesome okwu, njem. Ndo ị na-na na na-aga site na ọnọdụ gị nwere. M na-enwe mmasị gị n'ihi okwu banyere nke a, na maka na-echetara ndị nke anyị na-adịghị. Press na!!!
David • August 19, 2013 na 11:07 Abụ • zaghachi
Nke a nwere ihe ọ bụla na-eme na ịkpa ókè agbụrụ. Oh, Echefuru m, ị bụ nwa ya mere na ị na-eche na i nwere omume ikike ebubo na onye ọ bụla nke ịkpa ókè agbụrụ. Ndị fọdụrụ n'ime anyị na-niile racists. Ndo, na mkpofu e-esi ísì ezuwo. Oge efu ahịhịa na ee, ọ bụ oge ịga na na.
geebee • August 19, 2013 na 11:08 Abụ • zaghachi
M mwute na ị chọpụtala na agbụrụ àgwà na ndụ gị. m, oke, e legidere na leghaara n'ihi na dị nnọọ si
“ụtụtụ ọma” ka ụlọ ahịa clerks ma ọ bụ folks m ga-agafe n'okporo ámá. M nakwa na e egwu na gwara m abụghị nke na a obi ma na-nwere mma ezumike, n'ihi na m na-acha ọcha. Nwa m nwaanyị na a napụrụ ya nri votu ugboro abụọ, ma anaghị m na-eche ọ bụ “disenfranchised”. Ma mgbe ahụ, m na-adịghị na-akpọ asị mongers ka Al Sharpton na theNAACP ekwu okwu m; naanị banyere m. Dị ka otu mba, na dị ka Isi nke Kraịst, Echere m na anyị kwesịrị ịna-eche Naa banyere agbụrụ na anyị dị iche iche na iche iche, Anyị kwesịrị na-azụ ịbụ “nnukwu American agbaze ite” dị ka a na mba, na-echetara onwe anyị na anyị bụ ndị niile hà na ụkwụ nke obe dị ka Church. The ọzọ agbụrụ na ịkpa ókè agbụrụ na-atụle, ndị ọzọ asị na m na-enwe, nke n'aka nke, dị ka a lanarị usoro, eme ka m enyo anyị enyo nke agbụrụ ọzọ na obere yiri ịgbatị Gospel ha. Ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ka e mesoo dị ka a ga-ekwe omume agboro, ma ọ bụ ihe amamihe dị na Ihọd, ma ọ bụ redneck, na-eji ejiji na-eme ihe dị ka otu.
Leslie Pollard Stivers • August 19, 2013 na 11:08 Abụ • zaghachi
M hụrụ n'anya nke a post. M nwere obi ụtọ ịnụ gị ahụmahụ na obi m izu icheta eziokwu ahụ bụ na àgwà na-eme kwa ụbọchị. M ike nyere aka, Otú ọ dị, ịjụ ihe gị na ndị ọzọ na-eche ihe a na-ekwu, nke reverse ịkpa ókè agbụrụ. O yiri ka m na nwa obodo ugbu a kpamkpam na-eleghara ihe ndị ikpe (ị na-ekiri dum ihe na YouTube) na N'ikwu kpọmkwem banyere na na àgwà ihe (ọ dịghị onye maara n'ezie ma ọ bụrụ na Zimmerman mere otú na uma na-egosi na ikpe na-egosi na GZ bụghị dị ka akpa ókè agbụrụ dị ka ndị mmadụ mere ya bụrụ). Gịnị ma ọ bụrụ na Trayvon bụ nnukwu (wii wii na ya usoro, dị na otopsii)? Gịnị ma ọ bụrụ na àgwà ya na-egosi na ọ pụrụ ịbụ na a agboro? Gịnị ma ọ bụrụ na o mere n'ezie achụso George na-atụfu mbụ igbu? Ihe ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ na-atụle na ogologo na-ekpe ikpe na ndị na-egosi na-egosi na ọ bụ ezie na Zimmerman nwere ike mere mara nhọrọ (bụghị nwetara ya gwongworo, ọmụmaatụ), o ime ihe ọ bụla megidere iwu. Anyị amaghị azịza nke ajụjụ nile nke ajụjụ ndị a, ma dị nnọọ n'ihi na a nwa okorobịa bụ nwa apụtaghị na ọ bụrụ na ọ na-ese na-eme ka a agboro gaghị profiled dị ka otu. O nweghị onye na-ekweta na nke a ime ihe ike na nwa ewu (na nna-ya na Sanford n'ihi na ọ na kwụsịtụrụ maka ọgụ, na-ezu ohi, ọgwụ ọjọọ, etc) mere ihe ọjọọ mkpebi kwa. M chọrọ ịhụ a post site na a nwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị nke na-etikwa mkpu, maka njedebe nke thuggery n'ime ha obodo. M chọrọ ka anyị na-amachaghị na-banyere azụmahịa nke na-akụziri anyị na-eto eto ndị ikom na ndị inyom na-ele anya ihe dị ka Kraịst. Ọ bụ ezie na m ụmụntakịrị nwoke abụọ ndị a bit Mkpa ọkụ-gbaa ya akpụkpọ m ka m na ghara nwere otu ahụmahụ na m mere, M ga-agwa ha ka ha na-amụmụ ọnụ ọchị na ndị na-ipigide ha na akpa na agaghị ahapụ ime ihe ọma. Adịghị m agọnahụ na-akpa ókè agbụrụ, ma o yiri ka m na ọ bụ ejiri ikwesi olu njọ site ojii ugbu a. The ọcha asị seethes na ihe ọjọọ na-amaghị. Ndị mmadụ na-eme ihe ha kpọrọ asị. Ọ dịghị udo, enweghị mgbaghara, n'ikpeazụ dịghị okwukwe na Chineke iji mezie ihe ọjọọ n'ụwa ma ọ bụ ka obi Ya na-agbara ya niile. Ndị mmadụ n'otu n'otu na-awụlikwa elu na ohere na-akpọ onye a akpa ókè agbụrụ. Kraịst wee chere eziokwu banyere ihe nile. Anyị nwere ike igwu egwu na-agba ọsọ egwuregwu, anyị na-na-agbanwe agbanwe na omenala–bụghị na-eme ka a mma “black” omenala ma ọ bụ “ọcha” omenala, ma na-ejide elu ma na-ebuli a Judeo-Christian omenala na-agba ume ka ihe dị ka ịhụnanya, udo, na mgbaghara. Kraịst ga-ahụ nke a na ìhè nke eziokwu, na òkè agha mkpu ma amoosu ichu nta na-eme ugbu a. Kpee ekpere maka n'ezinụlọ abụọ. Christ meere anyị ebere niile. More nke echiche m na-agba ọsọ & omenala ebe a: http://wp.me/p2C5Cy-VY M na-anabata ndị ọbịa na nzaghachi.
Scott Lee Sherwood • August 19, 2013 na 11:08 Abụ • zaghachi
Dị ka a ibe nwanna nwoke na-Christ, M ga-akpa na-ekwu na m maara na nke a bụ a mgbagwoju nke na chọọchị dị ka a dum na o yiri ka na-tọrọ mgbe niile na-enweghị ezi mkpebi, ọbụna ma ọ bụrụ na “ngwọta” (Jesus) bụ nri na-esote anyị. N'ihi ya, m na-chọrọ na-egosi ịhụnanya nke Chineke na m omume gị blog, n'agbanyeghị ihe m kpebisikwuo.
Na-agụ gị blog, gị mgbe o yiri ka na-egosi na GZ kwesịrị e ikpe nke 2nd ogo igbu ọchụ nanị n'ihi na ọ “agbụrụ profiled” TM. Nke a ọ bụghị otú ahụ ikpe usoro ọrụ. I nwere ike ịjụ a juri na-enye gị a “omume” merie na mete ikpe ziri ezi nanị n'ihi na ndị ọzọ Ihọd anaghị amasị agba nke gị akpụkpọ. The eziokwu bụ na GZ bụghị ọcha n'agbanyeghị ihe mgbasa ozi / NAACP / Celebrity Hollywood / na Rev Al ga-achọ ka i kwere. Ọ bụ nke a gwara agwa agbụrụ nke Hispanic / Latino ụmụ na toro a multicultural ezinụlọ. ọ “profiled” TM n'ihi burglaries na-adịbeghị anya mere na gbara obodo. Na a hoodie na na jeans, esonụ onye si n'azụ, i nwere ike na-agwa agbụrụ / agbụrụ ha. M nchịkwa football na-eyi Akwa mkpuchi isi mgbe niile ọdịda, na m nkịta ka barked m na-abịa n'ụlọ m mgbe m na nwere m hoodie na n'ihi na ọ na-aghọta m. I nwere ike na-eje ije n'ime ọtụtụ mmiri ma ọ bụ n'aka ịlụ yi a hoodie. Ha ga-akwụsị, na-arịọ gị na-ewepụ ya. Otu na-aga n'ihi na naaa na ugogbe anya maka anwụ na ọtụtụ ego oru. Ọ bụ na ha “agbụrụ àgwà”? Ọ bụghị n'ezie, ma ọ bụ “àgwà”, na nke a abụghị ihe ọjọọ. Anyị nile na-eme ya ka ọ bụla ọzọ niile na-oge. na ee, M na a na-agbaso site store nche tupu, na m na a kwụsịrị ndị uwe ojii na ajụjụ tupu, na na bụla mma ụlọ ahịa nso ọtụtụ ụlọ akwụkwọ, ha ga-ekwe ka ụmụ akwụkwọ na-na na backpacks na ha amachi ọnụ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ na ụlọ ahịa. M na-ebi California na obodo m bi bụ multicultural. Na ọtụtụ n'ime ndị na-echekwa dị ka m obodo Safeway na Walmart, nche ma ọ bụ ọnwụ mgbochi ìgwè nwere ọtụtụ na-amachaghị nke nwa, Asia, Hispanic ethnicities. Ọ bụrụ na ha na-enyo onye nke ikekwe ayak a mpụ, ma ọ bụ kwesịrị ekwesị a “profaịlụ”, ọ bụ ịkpa ókè agbụrụ ma ọ bụrụ na ha na-agbaso ha gburugburu ụlọ ahịa ma ọ bụ na-anya na ha, ma ọ bụ ọbụna igbochi ha ajụjụ ma ọ bụrụ na ha na-ma nwa ..? Ahụwo m ya eme, ya mere, ọ bụ a ziri ezi ajụjụ.
O yiri ka m na ọtụtụ n'ime ndị folks na iwe na-ewe ya na mkpebi na na-kasị olu banyere ya na-ranting na n'ụzọ ụfọdụ TM si ruuru na-emebi. Na taa na ụbọchị na afọ, na ime mpụ na ejighị ndụ mmadụ, ebe okwu dị ka nsọpụrụ na ike n'ezi na-efu na a oké osimiri nke “ihe bụ ihe na ya maka m” na a juru ebe nile ikike iche echiche, ọtụtụ n'ime ndị a folks ike inye gị kwesịrị ekwesị definition nke “ruuru”. Ha n'ahịrị n'azụ jackwagons ka Rev Al Sharpton, na NAACP na-erigbu mmadụ amaghị si ndị mmadụ dị ka Rachel Jeantel na-eme ka ya na posta nwa ha ịkpa ókè agbụrụ ikpe. n'ezie? Ndị a bụ ndị folks ẹmende ọgụ ihe “ruuru” ịkpa ókè agbụrụ agha maka oji obodo? Ndị a bụ onye ị chọrọ na-eguzo na? Biko. M na-eche Dr. Martin Luther King ga-akwa ákwá ma ọ bụrụ na ọ hụrụ ihe a ọgbọ egwuregwu folks dị ka ndị a emewo ndị ịkpa ókè agbụrụ na ruuru agha, n'ime. Nke bụ eziokwu bụ na ịkpa ókè agbụrụ abụghị isi iro ọzọ n'ihi nwa America. Ọbụna nso. Black na Black mpụ, birthed site nọgide mmebi nke ezinụlọ unit, na catalyzed site a usoro na-ekwu na ndị gov't gị ji ihe, na ga na-elekọta gị, bụ ebe dị mma na-amalite, ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka kụrụ nnukwu ibu nwa obodo ihu. Ka ọ dịgodị, e nwere ụfọdụ na-elekwasị anya na ihe ngwọta na-tackling ụfọdụ n'ime ndị a mindsets. The folks na National Center maka Public Policy Research na ha Project 21 Initiative bụ folks na m ga-mmezi onwe m na na na-akwado ogologo ụbọchị nile.
Mee elu mee ala, Ịhụnanya Kraịst ga-emeri. Ọ mgbe niile na-eme. Na ọ ga-eme otu obi na a oge.
Ka m kwụsị site na-ekwu na m maara na-akpa ókè agbụrụ na-eme kwa ụbọchị. Ma, anyị na-ibu karịa na. Agbụrụ nile ma ọ bụ agbụrụ na enwetela ọjọọ aru nke ịkpa ókè agbụrụ e kere site na Chineke iji merie na-ibu karịa na ịkpọasị. The oké ikom na ndị inyom nke nwa American akụkọ ihe mere eme bụ isi mere ha akara maka ọgbọ site ghara ikwe ka ịkpa ókè agbụrụ ha gwusia. Ha we bilie n'elu ọnọdụ na ike na agbanyeghị. Ha pụrụ ịkwụsị ma na-eji ịkpa ókè agbụrụ dị ka ihe ngọpụ, ma ọ bụghị ha. Na otu ifịk na ume site n'aka Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile bụ n'ebe ọ bụla n'ime anyị na-enweta n'ime n'agbanyeghị ihe ọ bụla nke anyị ihu.
Daalụ maka ịgụ ihe, na Chineke na-agọzi gị ..!!
alan_d • August 19, 2013 na 11:09 Abụ • zaghachi
njem, M na-ekele gụrụ akwụkwọ, nonpartisan, Christian echiche a post. Dị nnọọ ka ọ si n'ebe, M a 26yr ochie ọcha grad akwụkwọ si AL bi OK. Otú ọ dị, gụsịrị Auburn 4 afọ ndị gara aga, M gara biri na D.R. Congo maka 2 afọ. m na-ekweta, na-eto eto, tupu m bụ a Christian, M dị ka ukwuu nke a akpa ókè agbụrụ dị ka 85% nke suburban omenala gburugburu m bụ. Otú ọ dị, ndị ọhụrụ-obi nke Christ m nyere m agbanweela na.
Na-ekwu bụ, mgbe ndụ na Congo, n'ụzọ nkịtị ọ bụla gburugburu m na mgbe ọ bụla e nyere n'oge bụ nwa. M hụrụ n'anya ndị m bi gburugburu, na-arụ ọrụ na gburugburu, na ọ fọrọ nke nta onye ọ bụla m zutere. Otú ọ dị, na na omenala, e nwere ndị ka na ndị mmadụ na m profiled. Eto eto ndị ikom na-eje ije ahịa enweghị ihe ọ bụla na-ere, ma ọ bụ mmasị ọ bụla ihe ọ bụla, ọmụmaatụ. My akpa e wepụrụ ugboro abụọ, ezie na m ngwa ngwa iji na-jidere na ụmụ okorobịa ma na-m Nokia brick azụ. Ọzọkwa, ndị uwe ojii nọ * n'ozuzu * imebi. M profiled ha oge ọ bụla m hụrụ na onye ọ bụla na-edo. M nọ na-akwụsị, jidere, ma ọ bụ na-amaja ndị ọzọ ugboro karịa m nwere ike ịgụ site na ndị uwe ojii / agha, dị ka ha dị ọtụtụ, ndị obodo na m maara. Ọ na-eme ka ọ akpa ókè agbụrụ m profaịlụ ndị ụdị ndị n'ihi na ha nọ na-oji? N'otu ụzọ, olee otú o si akpa ókè agbụrụ mgbe m ike ịkpali nwunye m n'akụkụ nke ọzọ nke ahụ m mgbe na-eje ije gara aga a na-acha ọcha nwoke na m na-eche na anya-enyo anyị enyo? Ya otu echiche, na m edo na ọ bụghị ịkpa ókè agbụrụ. My-ekwu bụ na àgwà bụ a mmadụ mmuo na * nwere ike * akpa ókè agbụrụ, ma ọ bụghị mgbe nile.
Adolf • August 19, 2013 na 11:09 Abụ • zaghachi
Ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị chọrọ ịbụ a mpụ, ikekwe ha na-ekwesịghị iyi edo. taa, fọrọ nke nta 70 afọ mgbe agha ụwa 2. Gịnị ka ị ga-eche na nke onye yi a Nazi edo? Ọ bụ naanị dị n'egos'ike nri?
gdoggydog05 • August 19, 2013 na 11:10 Abụ • zaghachi
nwekwara. i na-eche na ọ bụ ịkpa ókè agbụrụ. ka award ma ọ bụ ịdọ aka ná ntị dabeere na mba. na na ọ bụ ịkpa ókè agbụrụ na ọ bụrụ na gị na a na-acha ọcha nta akụkọ, dị ka m….ị na-chụọ n'ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-ekwu ezighị ezi ihe banyere agbụrụ. ma ọ bụrụ na gị na a black nta akụkọ i nwere ike na-ekwu na ndị ọzọ na-acha ọcha na na ga-anwụ, ka America ịghọta ịkpa ókè agbụrụ (njikọ na ala). anya, nke a bụ m ebe. ana m naanị harping na ihe ndị a, n'ihi na i chọrọ ka ndị Kraịst na-aghọta na e ga-enwe mgbe nile agbụrụ mbipụta na abụọ. echeghị m na anyị ga-aga otu ụzọ dị ka ụwa na lash na ha. maka ọ bụla ka ihe atụ nke ịkpa ókè agbụrụ megide ndị isi ojii, i nwere ike ịhụ ụfọdụ megide agbụrụ ọzọ. ọ bụ ezie na m na-eme na-aghọta na-agba ohu a horrid ihe na m ancesters, n'ezie, ga-aghọta na-acha ọcha m nwa ụmụnna nna nna esiwo through.we ghara njinji ọ bụla mba na-agbalị “equalize” ihe. àmà na-ekwu bụ na otu ezi Chineke agaghị eme nke a!!! Chineke ọ ga-pụrụ ime ihe nile aka scholarships dabeere na mba??? DỊGHỊ dịghị mgbe. Ma eleghị anya, dabeere na ego. Ma Chineke ga-emeghi amara dabeere na mba. Israel a họọrọ, ọ bụghị n'ihi na ihe ọ bụla na ha, ma ọma Chineke na nzube naanị. My “enyi” iwe a, na ya na-amụba ha akpa ókè agbụrụ echiche. “handouts” na “abụọ ụkpụrụ” iwe ha. Na esemokwu na ụdị-nke na-ekwu, “i nnọọ cant ịghọta na mgba” bụ nke ukwuu ọjọọ m. ọ na-ekwu na i nwere ike na-aga dị na m nwa ụmụnna… Aga m n'ezie nwanne ha doo, ka M na-adịghị aghọta ihe ya amasị na-ha. Ọ na-ekwu na ahụmahụ nke nwa nwoke kee anyị, karịa Christ jikọrọ anyị. Nke ahụ bụ ihe m na-ahụ n'isiokwu a n'amaghị ama si. M n'ezie maara ihe ọ bụ dị ka na-profiled. M bụ nwa ewu ozugbo. Anyị niile na-aga site mgbe ihe siri ike. Ị nwere ike amaghị ihe ya na-amasị nwere a na mama na cancer, dị ka m. Ma ọ bụ i nwere ike na-amaghị ihe ọ dị ka ya na-ezitere n'ụlọ ọjọọ ụmụaka mgbe m bụ 12 afọ, leghaara anya site m na-acha ọcha, ọgaranya, suburban ezinụlọ na-ekpe-eche ihe mere na ha hụrụ m n'anya. Ka anyị na-amalite na-akara ebe a. Nke a kpam kpam bụ na ya amaghị na-ezighị ezi n'ọnọdụ-elekwasị anya na ndị pụrụ iche ahụmahụ. Ka anyị na-ezukọta na-aṅụrị ọṅụ na anyị na e nyere amara mgbe anyị kwesịrị ọnwụ.
Alex Ericsson • August 19, 2013 na 11:11 Abụ • zaghachi
M ukwuu obi abụọ na Njem na-achọ ichupu ụmụnna na ndabere nke mba. Ọ bụ a nwa nwoke a predominantly ọcha ụka maka nke ọ nwere mgbe na-enweghị kwusi owụt esịtekọm. Ma e nwere ndị ọcha nke ịbụ nwa na America na ndị pụrụ iche na juputara incongruent na ndị ọzọ na omenala ahụmahụ!
Ya mere, biko, M na-arịọ unu nile, ịghọta ihe dị iche n'etiti ezi mmetụta ọmịiko na ihe bara uru ebere. Dị ka anyị na-eje ije na anyị na ụmụnna anyị na Kraịst, anyị ga-enwe ole na ole ohere ndụmọdụ a ebe mmetụta ọmịiko agbawo nke na-akọrọ ahụmahụ ma anyị ga-na-akpọ onye ọrịa, n'anya ọrụ bara uru ebere. Ọ bụ ebe anyị na-ege ihe isi ike ndị nwetara, mgbe n'ibelata ndaba nke ya ma ọ bụ ya na-ata ahụhụ site na àjà counter-atụ opi ha ahụmahụ, na ugboro ugboro anya isi na ndụmọdụ anyị, ezie na ọ pụrụ ịbụ na onye ahụ, agaghị enwe ihe ozugbo panacea ka assuage ha mgbu, nkoropụ, ma ọ bụ ọbụna iwe iwe.
N'agbanyeghị nke ọ bụla ezughị echiche na nke a ma ọ bụ agbụrụ, ọtụtụ n'ime
anyị na chọọchị (karịsịa. via na-elekọta mmadụ media) wax ọkà na ihe nke ụwa ma ejedebe
etiri ihe dị ka Job si-enweghị mmetụta enyi. Ugbu a bụ oge ndị mmadụ na-mgbagwoju anya na nnọọ iwe. People of nile na agba na-njọ n'anya na ihe ga-esi nke a. Ọtụtụ n'ime ha mkpa inwe ndidi na ezi nkasi obi. Ọ bụghị a okwu ihu ọha na ndị usoro iwu ma ọ bụ “rụrụ arụ na media”, bụghị ụrà-and-mgba ọkụ ihe atụ, ma ọ bụ ịkpọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị punditry. Arụtụ ha Jesus dị ka gị na ịdị nwayọọ.
Dinah Robinson • August 19, 2013 na 11:11 Abụ • zaghachi
Mgbe m bụ nwa agbọghọ, banyere elementrị agadi, M na agbụrụ profiled na ihe ahụ Eckerd Drug Store (ugbu a CVS). Amaghị m na na afọ ihe na-eme ka m, ma m maara dị ka a na nwa ya, ọ bụghị nri. M na mama m na m akwụ $20. Echere m na m bara ọgaranya. M chọrọ ịzụta ụfọdụ swiiti na ihe ndị ọzọ n'ime ụlọ ahịa. Ma otu n'ime ndị ahịa clerks hụrụ m na-eje ije wara wara naanị na ọ chere na m na-aga na-ezu ohi ma ọ bụ na-eme ihe na-ezighị ezi m maa. Ọ soro m gburugburu ụlọ ahịa. Ọ na obi manụ nwere na nwaanyị a na-eso m. M mechara hụ mama m na otu n'ime aisles na ya gwara ya na m na-eche dị zụọ ahịa ọzọ. Agwara m ya mgbe anyị na-ekpe ụlọ ahịa ihe mere na ọ sịrị nwaanyị eleghị anya chere na m na-aga na-ezu ohi. O mere ka m mwute na o chere na a obere nwa anya dị ka onye ohi. Fast atụ ịbụ a toro nwaanyị na otu ihe na-eme m dị ka onye okenye na a mma ụlọ ahịa. M bụ ghọgbuo na-eche na ụdị ihe ekwesịghị ime ụbọchị ndị a. ma dị mwute ikwu, ịkpa ókè agbụrụ abụghị nwụrụ anwụ. Ma bụ ekweghị ibe nọrọ maka iche nke ndị ọzọ ma ndị mmadụ hà na-Americans ma ọ bụ kwabatara, nwoke nwere mmasị nwoke ma ọ bụ ogologo, abụba ma ọ bụ taa, gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ n'okpuru-gụrụ akwụkwọ, ọgaranya ma ọ bụ ogbenye. Kama aṅụrị anyị iche na anyị bụ ndị dị nnọọ “ndinyịme” onwe unu. Anyị niile na-agba ụfọdụ ajọ mbunobi na m maara onwe m kwesịrị ịrụ ọrụ na-ahụ n'anya onye agbata obi m ka m hụrụ n'anya onwe m. Ị gaghị enwe ike ịgbanwe onye bụ
ajọ mbunobi, ma i nwere ike ịgbanwe àgwà gị banyere otú i si emeso ndị na-
“tupu ikpe” na gị na otú i si eme omume ọ. M nwere nwa nwoke bụ nwa
na Dominican. M chọrọ ya na-eto eto elu-enwe nkwanye ùgwù maka ihe niile omenala ma ọ
ahọrọ ime ka a mata na ya bụ African American ma ọ bụ Hispanic ma ọ bụ ma. Ọ ga-akụziri
na-ekwu okwu English na Spanish. Ọ ga-akụziri ndị mere ma omenala.
Na ọtụtụ ihe ọ ga-akụziri Chineke n'anya na ịhụ ndị mmadụ n'anya. Ekweere m na ọ na-amalite n'ụlọ na ihe anyị na-ebi bụ ihe anyị na-amụta na ọ dị mwute na ihe a na-apụta ìhè n'èzí anyị ụwa.
Troy Frasier • August 19, 2013 na 11:12 Abụ • zaghachi
m nwere, Adị m ọcha, na m nwere otu ihe ma dị ka a na nwa na dị ka onye okenye…. Amaghị m ihe m na ndị na ufodu bu agbụrụ yiri. N'ezie, haha, ọtụtụ ugboro clerks soro m gburugburu dị ka nwa ewu, afọ iri na ụma, etc. Ọbụna ugbu a, m n'aka na ese foto na-eso m mgbe m na-eje ije n'ime a Wal-Mart, dị ka enyi m na-arụ ọrụ LP kwuru m ije dị ka onye ohi na o yiri…. agbanyeghị, . ọ na-eme! :)
Nathanial Poling • August 19, 2013 na 11:12 Abụ • zaghachi
M úkwù Charles Barkley na Bill Cosby na onye a… na media adaha a mwute akụkọ ahụ a mba rioting ọgbaghara. M na-atụ Zimmerman-akpali na-atụ na nkwutọ emetụtaghị okwu ikpe na NBC na ABC.
Antoine Mason • August 19, 2013 na 11:12 Abụ • zaghachi
Ị na-aghọta na Charles Barkley na Bill Cosby anaghị ekweta na okwu ndị gbara ya gburugburu ikpe ziri ezi?
ele anya dị ka yiri nnọọ echiche, na mkpebi ziri ezi
George Lewis • August 19, 2013 na 11:14 Abụ • zaghachi
niile nke ụka anyị mkpa nwere na iwu ahụ n'onwe ya ghara ịdịkwa irè. Biko akwado m mgbalị @ moveon.org . A aririọ The Trayvon iwu nwere ike n'ebe. Anyị Mkpa ma rịọ maka nkwado gị Biko banye , zipu igbasa , retweet na ịjụ niile nke ndị enyi gị , ezinụlọ na kọntaktị ime otu ihe ahụ. Enweghị mgbanwe nke a na ọjọọ iwu ọnọdụ a pụrụ ime ọzọ.
Nathanial Poling • August 19, 2013 na 11:14 Abụ • zaghachi
onwe-agbachitere? Guzosie gị ala na-adịghị ọbụna na-eji na-agbachitere
Tia • August 19, 2013 na 11:15 Abụ • zaghachi
“Ndị a iche iche nke echiche rụrụ arụ ma ụgha. Chineke mere ka ihe niile mmadụ n'onyinyo Ya na ọnụahịa. Ma ihe niile na-eme mmehie na ghara igosipụta Chineke image dị ka anyị kwesịrị. Ọ bụla otu n'ime anyị nwere ike atụgharị ná mmehie anyị, ntụkwasị obi Christ, na-eme ka mmadụ nri site na Onye Okike anyị. Ma ịkpa ókè agbụrụ họpụta mmadụ na-ahọrọ nke ndị mmadụ eziokwu ndị a ga-na etinyere na-. Racism na-ekwu,, "M na bara uru na mma, na ndị nile na ndị dị njọ.” – Okwu Up Nwanna Lee!
Mgbe Alaeze ewe mepere anya ka ọrụ nke systemic mmegbu American Christianity, karịsịa n'ụdị White elu, ikeketeorie na patriarchy, anyị ga-agbaji na nkpọrọ nke n'agbụ. Ndị a bụ ndị isi na mmụọ ajọ omume na elu ebe Okwu na-ekwu na.
Mr. 116 • August 19, 2013 na 11:15 Abụ • zaghachi
A na nwa nwaanyị gbara aka ná ntị gbaa na Florida n'ihi na ọ bụ na ụjọ na ya mkparị di ga na-awakpo ya. Ị ma ihe mere, ọ na ikpe mkpọrọ n'ihi 20 afọ.
George Zimmerman Ome a-eto eto na nwa ewu n'ime Florida, na a chọtara ya ọcha?!? n'ezie?? Racism, kasị maa, bụ okwu na nke a. Chee echiche banyere ya.
Nathanial Poling • August 19, 2013 na 11:16 Abụ • zaghachi
bụ ịkpa ókè agbụrụ a na-akpata a kwa?
lewrites • August 19, 2013 na 11:16 Abụ • zaghachi
M na-acha ọcha / nwa afọ American, na ezie na Native na m bụ a dị nnọọ nta, m na akpụkpọ ụda bụ oké ọchịchịrị gbara na m na-ukwuu dị ka a Native. M na a na-akpa ókè megide site ọcha, site ojii, na site na dị nnọọ banyere agbụrụ nile i nwere ike na-eche nke.
DC Talk si song Acha People chịkọta echiche m nke ọma karị:
Anyị na-acha ndị mmadụ na anyị na-ebi a merụrụ emerụ ebe
Anyị na-acha ndị mmadụ na ha na-akpọ anyị agbụrụ mmadụ
Anyị nwetara a akụkọ ihe mere eme jupụtara emehie
Na na anyị na-acha ndị adabere na a Holy amara.
The media dị nnọọ na-ata ụta. Ma anyị onwe anyị predispositions, anyị onwe anyị na-eme dịgide ihe mgbasa ozi na-azụ anyị. Ọ bụrụ na anyị ga-ele anya gara aga na agba, ma ọ bụrụ na anyị ga-ahụ na anyị onwe anyị ikpe anyị gafere na ndị ọzọ dabeere na anya ma ọ bụ omume, mgbe anyị na-adịghị ọbụna mara ha…ma eleghị anya, anyị nwere ike na-arụ ọrụ na-etida ndị a mgbochi na-enye mgbasa ozi ọ bụla ọzọ nri.
Joanette D. Clemons • August 19, 2013 na 11:17 Abụ • zaghachi
A na-abụghị nanị banyere SYG iwu na ọ bụ nakwa banyere onwe-agbachitere esemokwu. The nwa na kachasi mkpa hụrụ ikpe. A bụkwa banyere otú iwu si ele ibu ọrụ nke onye, GZ, na-etinye onwe ha Harms ụzọ. Ebe ke ọkpọkpọ ọrụ, nkịtị uche na onwe akara so na nke a ọnọdụ? Mgbe Rachel Jenteal (na na nke mkpoputa) e gbara ajụjụ ọnụ, o kwuru “Nne na nna gị na-akụziri gị na mgbe mmadụ enyo anyị enyo a na-na-eso gị, ị kwesịrị ị na-agba ọsọ. Ọ dịghị nne na nna na-akụziri nwa ha iguzo ha. Ọ bụrụ na ha mere, ha ga-enwe nweghị nwa.” TM bụ nwata. A kọwara ndị uwe ojii na site GZ dị ka onye na afọ iri na ụma. Nke a abụghị conjecture, na nke a bụ eziokwu. Trayvon e a nwa na-eto eto n'ime ịghọ okenye. Mgbe GZ akpọ uwe ojii, o mere ihe ziri ezi, mgbe o kpebiri aga megide uche nke ikike, ọ tụfuru akara na ọnọdụ tụgharịa si niile na-ezighị ezi. Ime Mmụọ ex.: Olee otú ọtụtụ ugboro nwere, anyị kpere ekpere ma jụọ Chineke nyere anyị aka aka a na ọnọdụ na-na anyị adabere na nghọta nke onwe anyị kama na-ege ntị ezi olu ikike ịhụ anyị site. Trayvon abụghị ebe a b / c GZ nādabere na ya nghọta. O weere ndị metụtara ya aka mgbe a nyere doro anya na nkenke ntụziaka banyere ihe na-agaghị eme. M chọrọ ịmata ihe GZ ọrụ dị ka onye ọrụ afọ ofufo nche n'ógbè ojii gụnyere. M hụrụ nke a akwụkwọ na http://www.usaonwatch.org/assets/publications/0_NW_Manual_1210.pdf Biko gụọ page 27 nke Chapter 6. Nwoke a emebiwokwa ya ókè efehe nri nke onye ọrụ n'ime nsogbu. O nupụụrụ kpọmkwem ntụziaka na ihu a ụjọ na nwa, onye bụ nwa okorobịa na ihe na-eme egwuregwu. Ọ ta anya karịa o nwere ike na-ata mgbe ọ imebi uche na ntụziaka nke ikike. E were TM ama ahụmahụ na-egbu onye were GZ égbè ma gbuo ya kama? Nke a dị mwute merenụ meghere ụzọ maka ọtụtụ nke isiokwu-atụle. tinyere, ma na ọnweghị oke, àgwà, onye ọrụ, The Guzosie Your Ground Iwu, ihe bụ ezigbo definition nke onwe-agbachitere, ma nke kacha nke na re-nwale otú agbụrụ kwesịrị anya nke uche nke onye ọ bụla. Ihe niile hụrụ na ọchịchịrị nke anyị onwe anyị n'obi na n'uche ga-emecha bịa ka ìhè. Nke a dị mwute na mkpari yinye njehie a pụtara ime ka a dị ukwuu nghọta, mkparịta ụka, na mmata. Nke a ikpe zitere ujo ebili mmiri n'ụwa. Ọ bụghị onye na American akụkọ ihe mere eme akụkọ, ọ bụghị Black akụkọ ihe mere eme akụkọ, ọ bụ a mmadụ na ruuru akụkọ. Ọ dịghị onye kwesiri ka anwụ dabeere na n'elu stereotypical echiche na a enweghị onwe akara.
BQPhotography • August 19, 2013 na 11:18 Abụ • zaghachi
Dude!! Ekele gị nke ukwuu maka ikenye a!! M gwa ihe yiri na m facebook mgbidi. M na-eche na anyị nwere ike ịga na na na ịkpa ókè agbụrụ ma ma anyị ka nwere ike ikwu banyere ya idozi nsogbu!! Na-arụ ụka na-anọgide na-profaịlụ ọ bụla mba. M a ike kwere ekwe na Chineke na mba a ga-atụgharị azụ Chineke. (2 Ihe E Mere 7:14) Anyị kwesịrị ọzọ nwa ndị dị ka m, onye nwere ike ịbanye na-ekwu okwu megide ịkpa ókè agbụrụ na-akụziri onye ọzọ. Anyị ga-eguzo megide ndị na-ebido ịkpa ókè agbụrụ elu!! Daalụ ọzọ. Mụ onwe m si mesoo agbụrụ comments na omume ndị ọzọ, ma anaghị m ekwe ka ihe nile nke ọ ga-esi m n'ihi na m mara onye m na Christ!! ekele!!
Mark • August 19, 2013 na 11:18 Abụ • zaghachi
enweghị ajụjụ, e nwere ndị na 'agbụrụ’ mkpali maka ihe ha na-eme – ebughi. Ụfọdụ iche kasị njọ naanị n'ihi na nke larịị nke melanin. Ma, m na-eche ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọzọ na-aga na na ọnọdụ dị otú a na-ekpughe ihe nke a na omenala ọdịiche karịa a agbụrụ onye. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na m na-ahụ a nwaanyị na-eje ije n'okporo ámá na nnọọ obere nịịka, ala ịkpụ tank-top na ara nghọta si, nza nke anam-elu, elu ọba ụkwụ (adịghị mma n'ihi na-eje ije), wdg, M ga-ewere ya na nke a bụ a nwaanyị nke bụ – iji ihe ochie okwu – rụrụ. Nke a na-enye m efu ikike ahụ ma ọ bụ okwu ọjọọ wakpo ya, na-agwa okwu, etc. Tule na nwaanyị ọzọ na na attire – obi umeala, ma mara mma ogologo ọkpa, uwe mwụda, uwe, etc. – nri nke Lands’ ọgwụgwụ (ma ọ bụ bulie gị style) katalọgụ. Ọ nwere ike na-dị nnọọ ka omume rụrụ dị ka nwaanyị #1, ma m chere na ọ bụ eleghi anya.
N'otu aka ahụ, ma ọ bụrụ na m na-ahụ a na-eto eto na nwa nwoke na-eje ije n'ebe m yi uwe dị ka a 'gangbanger’ – M ike ịkpali n'akụkụ wee nweta ụjọ. Ọ bụ omume ọ bụ a local ntorobịa pastọ na-eso ndị Gospel na m ngwa ngwa karịa na-ekwu a ọjọọ okwu. Ma ihe bụ na 'banger attire? ọzọ, a nwa nwoke na-eje ije n'okporo ámá na 1) Ala End attire 2) ọdịnala African ejiji 3) ọrụ jeans / akpụkpọ ụkwụ na-acha ọcha t-uwe elu… M na mberede nwere niile m na-atụ egwu mitigated.
My-ekwu bụ na attire bụ ụdị omenala okwu. Ma ọ bụghị omenala nile hà. Ọ bụrụ na ihe “ọcha” (ma ọ bụ ìhè aja aja, red, odo) America na-ahụ na music videos, mgbede ozi ọma, newsweeklies, etc. nke-eto eto na nwa nwoke na nsogbu bụ ihe na-eto eto na nwa bụ ndị upstanding òtù nke obodo wear… na ga na-ekwurịta okwu a na-emegiderịta ozi.
Kere m yi a t-uwe elu na a Confederate ọkọlọtọ na ya na-atụ anya na ndị isi ojii nnọọ ịghọta na m gaghị a akpa ókè agbụrụ. M nnọọ n'anya na Confederate South.
N'otu aka ahụ, eji ejiji ka a officer, adịghị anya mgbe ị na-mgbagwoju anya na otu.
Yi a 'hoodie’ naanị agaghị / ekwesịghị ime nke a n'ezie. Ma folks-eche na ha na-na na uwe / attire anaghị ekwurịta okwu ma ọ bụ (njọ) ga-ekweta na ọ na-eme, ma nsị ibu arọ na-ekiri ekiri ka anụ ahụ niile dị iche iche si bu onye-nzuzu.
eziokwu • August 19, 2013 na 11:18 Abụ • zaghachi
James Lee • August 19, 2013 na 11:19 Abụ • zaghachi
Elu profaịlụ ikpe dị ka nke a sensationalize na kpatara nsogbu n'etiti ihe anyị faultfully akpọ “agbụrụ.”
Dị ka a na-acha ọcha nwata ita-nri nke Detroit, M ga-eleghị anya ikwu otú ahụ ka Zimmerman eso m, n'agbanyeghị nke na-eme m bụ ruo.
Zimmermans ọnọdụ ime mmụọ metụtara echiche ya nke nwenụ iwu ka …”Iguzogide onye ọjọ.” kwesiri, Trayvon Martin si n'idebe iwu a na-kọrọ dị ka nke ọma. Dị ka-eso ụzọ Kraịst, anyị kwesịrị icheta na adịghị anya mgbe ụwa na-eme ka “ụwa.”
Kasị mma anyị ngwá agha megide na-elekọta mmadụ ikpe na-ezighị na nke agbụrụ na-ekewa bụ na-ekwenye na iwu nke Kraịst.
Thabiti Anyabwile nyere a na-adọ ozi 2008 banyere “Iburu Image”. Ọ bụ uru na a na-ege ntị – http://t4g.org/media/2010/04/bearing-the-image-identity-the-work-of-christ-and-the-church-session-ii/
Ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ nwere identities na ndụ na e dabere na ọtụtụ ndị chere banyere echiche bụ "agbụrụ." Anyị kwesịrị ịgbanwe n'ebe a ọzọ na Akwụkwọ Nsọ na nkà mmụta okpukpe nke agbụrụ. Na mbụ, ọ dị mkpa na-akọwa okwu na-eji ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị, karịsịa "agbụrụ" vesos "agbụrụ." The Christian kwesịrị ịghọta nwoke ịdị n'otu Adam, na Kraịst dị n'otu na ịdị n'otu nke chọọchị.
nyụrụ nkọ • August 19, 2013 na 11:19 Abụ • zaghachi
Anyị na-na niile e ke ndibọbọ ọgwụgwụ nke ịkpa ókè agbụrụ, eleghị anya. ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga. Otu onye ọzọ mba na-aga-eme ka a mkpebi banyere anyị, dabeere na otú anyị na-ele anya ma ọ bụ ụda.
Anyị na na na niile a na ikpe mara nke na-eme ya, oke, na ụfọdụ obere ogo. Mgbe ọ bụla ị hụrụ onye na-eme ka a ikpe–ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-na-esịtidem–dabeere na otú onye ahụ anya ma ọ bụ ụda… na nke ahụ bụ ekworo.
Antha REdNOTE • August 19, 2013 na 11:19 Abụ • zaghachi
The 911 ọrụ kwuru “Anyị na-adịghị mkpa ị na-na-eso ya” Nke ahụ bụ ezuru m. The ikpe ga na mgbe a chọrọ na Trayvon ga nwere ike na-na-ọzọ nsutu si ya na papa m (dị ka hụrụ na foto) ma ọ bụrụ na Zimmerman nọrọ ya “butt” n'ime ụgbọ ala na na ekwentị til’ na now bịara!!!
Louie • August 19, 2013 na 11:20 Abụ • zaghachi
N'eziokwu, M ihere na ụfọdụ n'ime ndị a nkọwa na-akpọ onwe ha ndị Kraịst, M fọrọ nke nta na-atụ anya na ụfọdụ n'ime ha adịghị. Daalụ nke ukwuu Njem maka etinye obi gị na nke a blog, iche nke onwe gị na ndụ gị ahụmahụ ndị anyị na-amaghị banyere ma ọ bụ ghara ịghọta. M a White, nwoke na 24 afọ na m nwere ọtụtụ nwa enyi, yiri nnọọ njem, bụ ndị e profiled boro na m anọwo na ọnụnọ nke a ọgụ megide ndị enyi m, na ujo, mmetụta na-enweghị enyemaka. M na-eche ụfọdụ nke nkọwa na-ukwuu na-aghọtahie Njem okwu ma ọ bụ site na iji ha ka a sounding osisi maka na ha onwe onye Atumatu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Njem adịghị ihe ọ bụla banyere Zimmerman ịbụ a akpa ókè agbụrụ. Zimmerman mere a na-ezighị ezi ikpe na-eri a nwa okorobịa ya ndụ, a eziokwu na agbanweela otu ezinụlọ ruo mgbe ebighị ebi, dịkarịa ala Zimmerman ndụ nke na-eku ume. Na ihe omume a na-triggered mkpu ákwá na-agha onye ọ bụla na-enyocha ha biases na-ele anya na iwu na ihe na-ewute anyị niile. Ọ na-eme m na-arịa ọrịa na ndị mmadụ nwere ike ọ bụghị nanị na-ahụ na ndị iwu kere ichebe ụfọdụ dị ka onwe m (na unearned ùgwù) anaghị emetụta ndị na-ele anya dị ka ndị “ọzọ”. Ụfọdụ kwuru na iwu na-asị Zimmerman bụ ziri ezi na-eso Trayvon ma ọ na-agu n'onye ezi omume n'anya Chineke na-eso onye n'ihi na o legidere anya enyo. Na njedebe m ekpe ekpere Zimmerman-abịa mara Kraịst dị ka ya onwe ya onye nzọpụta ma na-atụgharị ya jọgburu onwe oke n'ime ihe dị mma na Chineke nwere ike iji na-eme ka n'ihu na-agwọ ọrịa. Ọ dịghị ihe na-agaghị ekwe omume na Chineke.
Nathanial Poling • August 19, 2013 na 11:20 Abụ • zaghachi
Olee otú ị mara Zimmerman abụghị a Christian ama? Ndi na ị na-ekiri ndị ikpe ma ọ bụ na-ege ntị soundbites. Echere m na ị na-eme a otutu ịkatọ comments na a post banyere ndị mmadụ Christianity. M maara na-eto eto na-acha ọcha na-eto eto bụ ndị e profiled nakwa n'ihi na ha nwere tattoos. Kwụsịnụ ime echiche na nke a bụ a mba ikpe na echiche banyere ndị ọzọ obi. Zimmerman nwere ọjọọ n'obi ma ọ dịghị ihe mere e na-ekpe ikpe mgbe ndị mmadụ nụrụ zuru ekwentị oku, abụghị spliced ​​ndị na media na-egwuri na igba elu a agbụrụ nke. Zimmerman ihu a juri na tọhapụrụ n'okpuru onwe-agbachitere. Ma eleghị anya, ụfọdụ ndị mmadụ na-amalite na-ajụ ndị music na African America ntị na-akwalite ime ihe ike n'elu udo. Martin nwere ike wee laghachi n'ụlọ, kama ọ họọrọ na-agbalị iti elu Zimmerman.
ujọ • August 19, 2013 na 11:21 Abụ • zaghachi
hello niile. Mbụ na farmost m na Kraịst. Nke abuo Abụ m onye afirican-american nwaanyị. M na-agụ na-ekwu ebe a na ha na-adịghị iju m. M menye ihe ike a na mba (na nwa na nwa, ikpe kwupụta ojii,mpụ mmewere nke nta na-eto eto nke kwupụta ọha na eze, ọha na eze kwupụta minoriity na-eto eto). Iji agwa unu eziokwu na m ụjọ,na nke a bụ ya mere na……….mgbe anyị na-dị ka a otu gloss n'elu societal stains ịkpa ókè agbụrụ kpatara na anyị nọ n'ili ize ndụ nke na-alọta anyị na otu azụ ihe na-ọ bụ na 50. Ọzọkwa, mgbe anyị na-eche maka a nke abụọ, na America ruru ụfọdụ ala nke a agbụrụ free utopia anyị nọ n'ili ize ndụ nke ugboro otu ọrịa na ihe otiti mba 50 afọ ndị gara aga. M na-eche ndị mmadụ amasị ezochi ya n'ihi na ọ bụ mfe karịa n'ihu ya na ọ gbasịrị ya. Ya mere, n'ihi na ị na ya nwere ike ghara ịbụ a agbụrụ ihe, n'ihi na ị ga-mgbe nwere ịnụ gị okenye atụle otú nkọwa na-echetara ha dị n'oge ha na-eto eto,enwe ihe ndị ị na i nwere ike mgbe na nrọ nke
.N'ihi na ị na ya nwere ike ghara ịbụ a agbụrụ ihe n'ihi na ị ga-agba n'ime gị ahu a black nwa nwoke na ihe-ebube ka ọ ga-adị ndụ hụ 21. N'ihi na ị na ya nwere ike ghara ịbụ a agbụrụ ihe n'ihi na mere anya nke ị bụ na dịghị mgbe a ga-hụrụ dị ka a iyi egwu. Ọ bụrụ na i nwere ndị nhọrọ ọ ga-abụ agbụrụ ihe m ma. My meteere ndị niile na-anọwo na-emetụta nke mpụ ruru ka ime ihe ike. Ọ dịghị mgbe m ga na dịghị ihe-anabatakwa ihe ike. Otú ọ dị, ga-ịnabata a usoro na-anabata na-agbapụ a dabeere na anya,ma ọ bụ na o kwere omume mere ha na-apụ n'abalị,,. M ga-anabata a usoro ga-m ego a na-anabata,ma m ma ọ bụ nwa m nwoke anaghị. M ga-anabata na steeti ihe dị ka ha. America bụ dịghị utopia. M enwe mmetụta nke ịbụ a nta ke America kwa ụbọchị,na ọbụna na chọọchị.
bergyman • August 19, 2013 na 11:22 Abụ • zaghachi
M a Christian kwa. M na-ekweta na ịkpa ókè agbụrụ ka dị. Nke bụ eziokwu bụ, ọ ga-adị. Onye iro ga-eme ka nke na. ma nke a “ị ga-aghọta n'akụkụ m” posturing dịghị aka. Anyị nwere na-acha ọcha zipụ na dịgide ịkpa ókè agbụrụ. Na nke ahụ bụ ihe ha na-: nzuzu racists. Mgbe ahụ, e bụ nwa zipụ na dịgide na echiche na-akwalite àgwà. Na-elekwasị anya ga-abụ ihe niile nke ndị ọzọ nke anyị na-ebili n'elu ndị a zipụ na-abịa ọnụ na ịrụzi ike. Gbanwee akụkọ. Dị ka na-eto eto na nwa nwoke… Chaị. M enweghị echiche otú a obodo emekọ na, ma m maara na e nwere ndị na-aza, si n'ebe. M maara na Chineke nwere atumatu na a ngwọta… na ọ na-adịghị nkewa dabeere na otú onye anya. Ya ngwọta bụ banyere ịdị n'otu, ịhụnanya na nke mweghachi.
ujọ • August 19, 2013 na 11:22 Abụ • zaghachi
hi bergyman. M na-akwanyere na-ekweta na, gị echiche. Otu dee ezie- m na-ele abụghị “ị ga-aghọta n'akụkụ m” kama ya a nkwafu nke ìhè na ihe mere nke a banyere “n'akụkụ m” ma ọ bụ gị n'akụkụ. Nke a bụ ihe na-dị nnọọ nakawa etu mba a nwere ma rectify.This bụ ọtụtụ na America nyere amachaghị. okenye reliving egwu ahụmahụ Jim okwukwa. Children egwu ha ga na-ezubere iche site ụfọdụ gbagọrọ agbagọ ụdị nke usoro ikpe ikpe. Nwoke ndị òtù ezinụlọ na-amaja maka DWB '(na-akwọ ụgbọala mgbe nwa) M rụsiri ọrụ ike ruo ọtụtụ afọ-ejikọ folks na-eweta agbụrụ mmata ka chọọchị na un-churched myiri. Ana m ekwu ịghọta n'akụkụ m .I'm si akwanyere ya ùgwù. M ga-anọgide ọrụ m ka a ghọtakwuo isiokwu,n'ihi na nke ahụ bụ ihe Chineke bu n'obi m na-eme ma na chọọchị kwesịrị ya. Na na kwuru- mbịne a kpuru ìsì anya na nsogbu nke na-ezighị ezi ọ ga-abụ agbụrụ,na-elekọta mmadụ echekwa,banyere ite ime ma ọ bụ mmekọahụ trafficing,dịkwa nnọọ njọ. Ọ bụ na-ihe m nwere ike ime. On a ayama leta m hụrụ ,nkwupụta, na mgbaghara n'etiti agbụrụ na a oke ọnụ ọgụgụ na Kraịst ekpere ihe na ya mara mma oge nke nkwanye ùgwù, nkwupụta,mgbaghara (na abụọ) OHHH bụ na ihe ka le ọ dị ka pslms 133:1-3 na ozugbo. Ụkwụ ha na-asa,anya mmiri na-awụfu, na niile ọzọ(black,ọcha,Latino,na Asia) chegharịrị Tupu Chineke maka kwesịrị megide ndị ọzọ. M na-atụsi anya mgbe “nwanne ịhụnanya ga-ekekọta mmadụ na mmadụ” dị ka e kwuru na oké ukwe ode ka ọṅụ. M na-arụ ọrụ na-ekpe ekpere ka ọgwụgwụ na-ahụ ya eme.
bergyman • August 19, 2013 na 11:23 Abụ • zaghachi
Daalụ maka gị zaghachi. M apụtaghị na-enye echiche na ị na-eme “ị na-adịghị aghọta…” ihe, M nnọọ pụtara achọghị m na omume ịbụ na azịza. M na-anụ na a ukwuu mgbe m na-agbalị iso ná mkparịta ụka banyere ụfọdụ n'ime nsogbu ndị a na otú anyị a otu nwere ike imeri ha. Echere m na e nwere na-na nghọta na ihe ngwọta na mgbanwe na abụọ. Ekwenyere m na gị. Ọ na-eme. M nnọọ asị ogologo oge ọ na-ewere na ndị niile na imerụ / efu ndụ ma na efu nwere … na m kpọrọ asị nkewa. Daalụ maka na-alụ ọgụ ihe ọma na agha. M na-atụ ị maara na m na-adịghị eme ka hà ịghọta mmetụta uche, M na dị nnọọ anya na-echefu ụzọ ndị ọzọ nzọụkwụ… mgbake, na-agwọ ọrịa, ịdị n'otu.
ujọ • August 19, 2013 na 11:23 Abụ • zaghachi
ee. i ịghọta na anyị mkpa na ị na na na-agha . O wutere m na ụfọdụ otu onye devalued gị onyinye na-akparịta ụka na / ma ọ bụ ihe ngwọta nye nsogbu ndị a. na m na-arịọ mgbaghara na ha behalf.Would unu na-agbaghara anyị niile bụ ndị mesoro ndị chọrọ inyere ịchọta ụzọ ka mma dị ka ma ọ bụrụ na ha na-adịghị mkpa na mkparịta ụka a nanị n'ihi na ya ma ọ bụ ya akpụkpọ bụ nwa. M kwere na anyị na onye ọ bụla nwere ihe na-eme ka onye nke ọzọ ,ahụmahụ-nweela,hụrụ n'anya na-na-akọrọ,agbamume na mkpakọrịta na-ama (black,ọcha,odo,aja aja,acha anụnụ anụnụ etc). i kwenyesiri ike na. Chineke na-agọzi gị bergyman…..otu ụbọchị pslms 133:1-3 ga-emezu ma ọ bụrụ na ọ bụghị ebe a na ụwa ,maa na onye na-abịa.
Amen, Amen. Daalụ maka gị ụdị okwu. Jehova, ịnọgide na-agwọ na-ga n'ezie otu ụbọchị iwu a ngọzi.
Troy Frasier • August 19, 2013 na 11:25 Abụ • zaghachi
hey Njem, N'anya ya na ihe nile, ma n'eziokwu… ọ na-ada ka na nke agbụrụ, i nwere ụfọdụ ilu. M mwute na akpụkpọ gị agba mere ka ị ndị ndibọbọ ọgwụgwụ nke ụfọdụ ịkpa ókè. My akpụkpọ agba leaved m ke ndibọbọ ọgwụgwụ nke ụfọdụ ịkpa ókè si nwa obodo, (ọ bụ ezie na m mgbe a akpado ndị uwe ojii). Ya a akụkụ nke ndụ, nwoke. M nnọọ ka m na-akpa ókè maka cross, abụghị maka agba nke m na akpụkpọ na ndị ufodu. ọ na-eme, ọ bụghị mara mma, ma anyị nwere ịgbaghara ndị na-eme ya ma na-eto Chineke nna N'ihi ịhụnanya ya di iche iche. Ma ọ bụghị ilu, nwoke. Ka na-aga nke ndị gara aga ufodu. Dị nnọọ ka ị na-ekwesịghị isi na-emeso ndị ọzọ chere na, ị ga-agbaghara ma napụta onwe gị si ọnwụnwa nke victimization mgbe ị na-ekpe ikpe. Onye ọ bụla a na-ekpe ikpe. Ọ bụrụ na ọ bụghị site ụcha akpụkpọ, site ahụ udi, ebe, afọ, etc. M na a na-ekpe ikpe ọtụtụ ugboro n'ihi ịbụ si Florida na Midwest. Na n'ihi ịbụ-eto eto. wdg. Anyị ga-ekpe ikpe, ya mara? Anyị aghaghị ịgbaghara na-egosi ịhụnanya n'ebe ndị na-amaghị. :) Chineke na-agọzi ya, njem!
Nicole • August 19, 2013 na 11:26 Abụ • zaghachi
Site pụta ìhè na-akpa ókè agbụrụ megide ndị isi ojii na-adịghị ya ghara ịdị irè na nwa ndị mmadụ nwere ike ịkpa ókè kwa. Anyị bi a dara n'ụwa na ndị niile na omume na-ezighị ezi. Arụ ọrụ na-emeghe mkparịta apụtaghị na unforgiveness dị. (Nnọọ, Njem Lee nwunye abụghị nwa akpa ọchị) Otú ọ dị, Bible, udo adịghị hà n'ezinụlọ. E nwere ọtụtụ oku na Okwu Chineke na-arụsi ọrụ ike banyere ikpe na-ezighị na mmegbu na ụdị nile. Anyị kwesịrị ịdị na-arụsi ọrụ ike megide mmadụ ikpe ziri ezi, Ụdị nile na ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke na-egosi na ndị mara mma iche nke Jizọs Kraịst nke a dara n'ụwa.
gdoggydog05 • August 19, 2013 na 11:26 Abụ • zaghachi
Chaị. amamihe. ikpe m, oke.
bergyman • August 19, 2013 na 11:27 Abụ • zaghachi
Anyị na-arịọ ndị mmadụ ka ha karịrị mmadụ. Anyị niile na-eji ozi (ụfọdụ dabeere na anyị onwe anyị ọnọdụ, ụfọdụ ọzọ a pụrụ ịdabere na, na ụfọdụ ndị ọzọ na-apụghị ịdabere na) gwa anyị ihe anyị ga-eme na akụkụ ụfọdụ nke obodo, na gburugburu ndị mmadụ na-ele anya a ụfọdụ ụzọ. Anyị niile na-na profaịlụ. The keisi ocha girl Lizzi n'okpuru nwere ike ịbụ na ndị na-ele ya dị ka onye nzuzu ma ọ bụ mfe dabeere na otú ọ na anya. Fair? eleghị anya ọ bụghị. O nwere a nhọrọ, ọ nwere ike ma na-agbalị ka o doo ndị ọzọ niile na mr blue si n'ebe na-eme ihe smart, ibu smart ka bụghị dịgide na echiche OR ọ nwere ike na-agbalị nnọọ na-eme ike ya nile iji na-ike jikọrọ ya na “ụdị”. My maa (na m ga-anya) na-na ụlọ ahịa nwe ọtụtụ e shoplifted site ndị mmadụ na-ele anya / mee ka Dinah Robinson … ngosi? Ọbụghị ncha ncha. Ma, ọ bụ na ụlọ ahịa nwe onye na-eme irresponsibly? Ka m kwuo ya otú a… ma ọ bụrụ na onye #1 anya / Uwe / omume dị ka ndị na-mere mpụ na ha ahịa ma ọ bụ n'agbata obi ha. (M na-eme ka elu hypotheticals ebe a) The ebumnobi ọnụ ọgụgụ na-ekwu: 7 nke 10 mgbe a na-eme, a mpụ na-agba mbọ. Ị nwere ike ikwu, ha ka na-ekwesịghị profaịlụ. ma na ihe mgbe na ọnụ ọgụgụ na-eme ị na-ekwu, M ka na-aga na-eche ihe kasị mma nke onye a. 9 nke 10? otú banyere 99/100? Olee banyere 999/1000? Gịnị ma ọ bụrụ na i nwere ihe Arab ezinụlọ gị obi ma na ị na-ahụ ya ebutu ọtụtụ akpa nke fatịlaịza n'ime ya na-arụzi ụgbọala? Ma eleghị anya, ọ dị nnọọ mmasị ya ahihia n'ezie green. Na-anyị kwesŽrŽ mgbe niile iche nke kacha mma na ndị mmadụ?
My echiche na nke a bụ na anyị nwere a agbụrụ kewara na ndọrọ ndọrọ ọchịchị kewara na aku na uba nke kewara mba. Anyị nwere ike n'ezie ime ihe dị ukwuu banyere akụnụba… akụkọ ihe mere eme mgbe niile na-agwa anyị na anyị nwere ndị ọgaranya na ndị ogbenye. Ma na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na agbụrụ anyị nwere ike ikwu “No”. M na-enweghị nsogbu na-enwe-eri ego nke ndị mmadụ banding ọnụ America n'ihi ọdịmma ma ọ bụ n'ihi na ha na-abịa site otu mba na ha iso omenala nke mba. Ma, m na-eche na nke a bụ ihe na-eme mgbe anyị nwere a ụyọkọ nke ndị jikọrọ (eleghị anya n'ihi na nke na-abụghị na n'ime ihe) n'ihi otú ha na n'èzí, Echere m na anyị ga-anọgide na-enwe nsogbu ruo mgbe “black ndị mmadụ” adị n'akụkụ nile nke a obodo, votu abụọ nke wara wara na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na-arụ ọrụ niile dị iche iche ọrụ, anaghị achọ / pụrụ iche igo / ịtụ vootu iwu, ịga mahadum n'otu udu, na ịlụ di na nwunye ndị mmadụ na-adabereghị na ụcha akpụkpọ. The media chọrọ onye obi nke. The ọzọ chọrọ onye obi nke (na-akpali a ike Voter turnout). Ihe ịma aka bụ ime na anyị ekwe ka ha na-egwu anyị… nke a abụghị US vesos ha esemokwu. Nke a bụ a “mkpa ka anyị niile play ọnụ”. Nke a bụ a “anyị mkpa ikweta na e nwere zipụ si n'ebe na ya ga-ewere anyị ndị ha na-eche na anyị bụ, ma m na-aga na-eleghara ha n'ihi na m mara onye m.”
Anyị nwere nwa nkuchi ụmụaka (7 na 9 yrs ochie). The 7 yr nwa agbọghọ gwara anyị “Onye ọ bụla maara na ndị ọcha asị nwa ndị mmadụ na na nwa ndị mmadụ asị ndị ọcha.” Nke ahụ mere ka m mwute. Onye kụziiri ya na na okwu. na 7 yrs ochie, na-aghọ akụkụ nke ya etemeete. Anyị kwesịrị ka ọ kwụsị iso na-media / politic ihapu otutu okwu na-agbalị na-ewu àkwà mmiri na-adịghị ikwubi banyere ndị mmadụ na mgbe ndị mmadụ na-eme ka banyere ihe anyị, anyị kwesịrị ikwe ka ọ na-ada anya anyị azụ n'ihi na iburu ha iwe n'obi naanị enwekwu agbụrụ ike na anyị mkpa a na-enwe nkewa rụziri.
Rumplestiltskin • August 19, 2013 na 11:28 Abụ • zaghachi
A nnọọ ukwuu-ebubo ikpe, na bụghị w / o mere. Anyị dị ugbu emekọ, na “ihe ọ bụla” ga-emebi anyị adakọ gara aga. M nwere nne na nna, na apparenty bu “agba ìsì”, na n'ihi na nke a na m ekele. Mgbe m dị ihe atọ, ma na-akpọ m obi enyi otu ụbọchị na sandbox, nke a bụ ihe m hụrụ – otu otu, a nne na nna ga-abịa, na-ekwu ihe dị ka “abịa na Johnny, anyị nwere na-aga” ma ọ bụ, “Suzie, oge gị ụra”. Otu otu, ha niile ekpe, ma e wezụga otu. M na-eche ihe ọ bụla banyere ya na ụbọchị, ma ụfọdụ iri atọ ma ọ bụ iri afọ anọ ka e mesịrị, M ghọtara ihe mere: na ikpeazụ na obere nwa bụ nwa. Ana m agwa gị, mgbe m ghọtara kpọmkwem ihe mere n'ụbọchị ahụ, M ndịghe, na-ewe iwe – na nwa na-enweghị na ụmụaka ndị ọzọ na ịbụ “echebe” site bụ enyi m. Amaghị m ihe “black” bụ. ka ịtụnanya.
ugbu a, m 71, na nwere otu-na-otu mmekọrịta Jesus Christ, maka 37 afọ. EMI, karịa ihe ọ bụla banyere “agbụrụ” n'ezie meghere anya m, ka m kọwaara – n'akwụkwọ nke Ndị Efesọs, ọ na-ekwu na Chineke na-, mere ndị Juu, na kwa nke ndi mba ọzọ, Otu onye dị ọhụrụ. folks, na nke a pụtara na ị na, na m, ọ bụrụhaala na anyị nwere na mmekọrịta Christ. Mgbe anyị na-na-abanye KRAỊST, anyị “tinye na”, ma ọ bụ “abata” na otu onye dị ọhụrụ. Ya mere,. Mpụga nke Christ, anyị nwere ike na-etinye na ihe na-egosi, anyị nwere ike na-agbalị na-ezi, ime ihe ziri ezi, etc. Ma eke ike ga na-agba ọsọ, na anyị ga-ada ọzọ, oge obula anyị “mpụga nke Christ”, ma ọ bụ n'okpuru ya mmetụta. ka ihe ezi uche?
Mpụga nke Christ, E nweghị-adịgide Adịgide ỊDỊ – ma anyị ga-ama na, ogologo oge gara aga. Ya mere,, abata Christ, ebe m aba na-acha ọcha, M na nwanne gị, na m na-na na nwetara gị azụ.
Mollie • August 19, 2013 na 11:28 Abụ • zaghachi
M na-ekweta na ịkpa ókè agbụrụ bụ ihe nke. Ma na-ekwu na ọ bụ nanị megide African America bụ ihe ọjọọ. M na a profiled ọtụtụ ọtụtụ ugboro ná ndụ m. M a-eto eto na-acha ọcha girl.I nwere keisi ocha mgbakọ ntutu na-acha anụnụ anụnụ anya na a n'ebe ndịda ngwoolu. M na a cuffed site cops n'ihi na ha na-achọ a na-enyo enyo. M nwere a egbe ẹkenịmde ka isi m onye chọrọ igbu m. M na-arahụ kpamkpam na-enweghị. M nwere nwa enyi kwụsịnụ agwa m okwu n'ihi na m na-acha ọcha na “ike na o kwere omume ịghọta”. Anyị niile nwere otu siiri. Anyị niile na-eche ihu eziokwu na nnọọ ole na ole ndị mmadụ na-aga na-agbalị-esi mara anyị tupu ha ikpe ayi ikpe. Mụ na di m nwere ụmụ ise nke anyị na nso nso nakweere ya abụọ na ụmụ nwanne mama onye nọ black. M nwere ike n'eziokwu na-agwa gị na ihe dị ka anyị anọwo na-echere dị ka ezinụlọ ọ bụla na nwa ndị mmadụ mgbe ọbụna remotely ifọn anyị ma ọ bụ n'ezie kwetara anyị ruo mgbe anyị nakweere ndị a ụmụ nwoke abụọ. Dị ka ma ọ bụrụ na larịị nke pigmentation ha nwere na ha na anụ na-eme ka ha dị iche iche si anyị. Anyị bụ ndị niile hà bụ na anyị adịghị? Mgbe ahụ ihe mere nke a ka na-a na-acha ọcha vs black ihe? Gịnị mere na ọ nnọọ a obodo nke mmadụ niile na-abịa ọnụ na-ekweta na ọ bụ na ọ bụ isi a nsogbu obi na ọ bụghị a agbụrụ nsogbu? Mgbe ụmụ m na-eto eto ma na-amalite ịchọ di ha, m ga-adịghị eche ma ọ bụrụ na onye ahụ bụ nwa ma ọ bụ na-acha ọcha ma ọ bụ China. M ga na-ajụ ihe abụọ, ka ọ na-hụrụ Onyenwe anyị n'anya na obi ya nile, na o nwere Jesus n'obi ya. Ọ bụrụ na azịza ihe abụọ a na-ee mgbe ahụ, m ga-amarakwa na ọ ga-adị mma ka ụmụ m. Ha otu ga-aga n'ihi na ụmụ m mgbe ha na-anya n'ihi na a na nwunye. Iji mee ka ihe niile a agbụrụ nke dị ize ndụ n'agbanyeghị ihe akuku na-eme ya. Ka anyị dị nnọọ ebili n'elu na-akpọ ya ihe ọ bụ….a nsogbu obi.
LolaMitche2011 • August 19, 2013 na 11:28 Abụ • zaghachi
Inwe a multi-agbụrụ ezinụlọ m kpamkpam na-aghọta ọtụtụ dị iche iche echiche. M ga-asị na “ọcha” America ga-nnọọ nanị mgbe ịghọta “acha” n'ọnọdụ. Olee otú ha? Ndị mmadụ ga-egosi ọzọ ebere na ndị mmadụ na ha nwere ike ikwu na. Ojii nwere ike aha 100 dị iche iche ikpe nke ịkpa ókè agbụrụ na ndụ ha, mgbe ọcha ga-aha 100 dị iche iche ọnọdụ na justifications maka ihe mere ha ji kwere n'ihe ha kweere. Na ihe ọcha numerically nga karịa ihe ọ bụla mba, na ndị ọzọ ojii pasent maara ihe na nga mgbe ọcha, ọ bụ ihe doro anya na mpụ pụrụ mere site na onye ọ bụla. Anyị niile dị nnọọ na-ahụ ihe anyị chọrọ ịhụ. Na na-ekwu, M ga-ekwu na anyị niile kwesịrị nnọọ na-agbalịsi ike ime ihe kasị mma maka anyị obodo na sere ha elu. Black Americans ga maara ugbu a na ha nwere ike na-atụ anya a ọmịiko ntị ọcha, na ọcha mara na na dịghị mgbe ha ga-aghọta ahụmahụ ndị mmadụ nke na agba na-aga site. Na-eme ihe n'eziokwu na dị mma.
Dave • August 19, 2013 na 11:29 Abụ • zaghachi
Lola, M na-eche iji “ojii” & “ọcha” dị ka i nwere na nke a post na ndị dị otú ahụ sara mbara okwu bụ nke ukwuu overstated. African America bụghị onye iro nke ndị ọcha. Ọcha na-adịghị onye iro nke African America. Ndị mmadụ n'otu n'otu na mmehie ha n'obi na-ezighi ezi na-ekpe ikpe onye ọzọ. Ọ na-arụ na ya na n'etiti ihe niile dị iche iche iche iche nke mba n'ihi na nganga nke ndị mmadụ n'otu n'otu na-ahọrọ anụ na mpako site na akpụkpọ ahụ ha. M na-ahụ ya n'etiti agbata obi Asian mba ebe a na Thailand nakwa. Ọ na-n'ezie na-ejedebeghị na African America & ọcha. Biko, ekwela ka ụzọ ị na a na-afụ ụfụ tinye na enweghị ná mma n'okwu a. Mgbanwe nwere n'ezie.
Kraịst nwụrụ ịzọpụta ndị mmehie. Na nke ahụ bụ ebe mgbanwe amalite mgbe ọ na-abịa ihe ndị a ị na-e kwuru okwu. Ndị mmadụ n'otu n'otu na-ochie ha selves kpogidere & nyere ọhụrụ anya m na-ahụ ụwa. Ọ ga-eme site na onye onye dị ka ha na-esi na ha mpako, warara worldview jijiji site n'Alaeze Kraịst ụzọ.
Christ-agọzi gị, Lola.
KSStrong • August 19, 2013 na 11:29 Abụ • zaghachi
@ Gdoggydog05 dere sị "m niile black Kraịst
ụmụnna-elekwasị anya na martin, na-adịghị ọbụna na-ekweta eziokwu na ọ bụ ihe ọjọọ na mbụ na-ahọrọ nke a trajedy dị ka ihe dị mkpa ndị ahụ ọtụtụ narị yiri trajedys na-erukwa na kwa ụbọchị. "- Ị na-anya isi na AA Kraịst
ele ọdachi a n'elu ndị ọzọ nile. Nke bụ eziokwu bụ na nke a kemgbe na ozi ọma, ya mere, ọ ga-enwe a isiokwu nke mkparịta ụka karịa ihe ndị ọzọ na ndị mmadụ na-amaghị nke. Pọl onyeozi họọrọ, na otu oge, ka a mata na nmehie nke Herod (ịlụ nwunye nwanne ya) niile ndị ọzọ mmehie na-ewere ọnọdụ n'oge ahụ. O kwuru na-akpọ Herod si.
Ezie na anyị maara na Pọl na-ala azụ na-akpọ ndị mmadụ si na nmehie-ha ma ọ bụ omume ihu abụọ, anyị na-agụ naanị nke a ugboro ole na ole nke ya akpọ ụfọdụ aha. Bụ mmehie a? No, ọ na-akpọ Herod n'ihi ọnọdụ ya na ọnọdụ. Ọ na-akpọ Pita pụọ (site
aha) n'ihi na nke ya na-edu ndú na chọọchị n'oge. Ọ bụghị mmehie na-ezo ka a na-atụle ịkpa ókè agbụrụ. A nwere a na-achịkwa ọnọdụ na media, na ya mere ndị mmadụ na-ekwu banyere ya.
gdoggydog05 • August 19, 2013 na 11:30 Abụ • zaghachi
im ndo KS… i ga-abụrịrị ihe doro anya. i na-adịghị anya isi…. m na-ekwu okwu na niile na nwa Kraịst na m maara ma ọ bụ na-agụ, etc….. na i apụtaghị na ha na-prioritizing ya ọzọ…. ihe i bu n'obi bụ nke a: nke niile comments nwa Kraịst mere ka, i na-ahụbeghị ọ bụla na-akatọ ndị media maka etinye a ụfọdụ ikpe na a pedastool na ndabere nke mba…. ndo banyere na. Amaghị m ma ọ bụrụ na ha na-eme ma ọ bụ na. M na-eche media ikpe mara nke a na juru m anya na m nwa ụmụnna kwuru na n'akụkụ ndị ọzọ nke ikpe na ndị o yiri na-akwado mgbasa ozi dị na ha ngosi, kama dissent, ọbụna ma ọ bụrụ naanị na ha okwu.
Steve Burlew • August 19, 2013 na 11:30 Abụ • zaghachi
ekele, njem. kpọrọ. Kemgbe a ogologo oge ebe ọ bụ na anyị na-na na na ọnụ ma ọ bụ na-ekwurịta okwu. M na-atụ gị na gị na-eme nke ọma.
Grace na udo gị, nwanne.
Heather Mahnke Worrell • August 19, 2013 na 11:31 Abụ • zaghachi
M a 32 afọ-acha ọcha nwanyi. M dị akọwa Trayvon akụkọ m 12 afọ nwa. M kọwara otú m na-eche banyere ihe nile nke ọ. M na-agụ gị blog n'elu. M na-akwanyere gị, na m na-eche na nke a nke kwesịrị ka a na-atụle. M na-ele ya dị ka alụmdi na nwunye m, na a ụzọ… Ọ bụrụ na mụ na di m nwere a esemokwu, anyị na-arụ ọrụ ya ruo mgbe anyị nwere nghọta. Anyị bụ ndị abụọ dị iche iche ozu, ma site na alụmdi na nwunye anyị bụ otu (mụ na di m), dị nnọọ ka anyị niile na-etinye nkenụụdị, ma anyị na-amasị ya ma ọ bụ. M ịkụziri ụmụ m na agba adịghị mkpa, agwa bụ ihe ka mkpa, ma o sina dị m ọcha, ị na-na na na anyị na-enweghị ike ịgbanwe na. Ọ bụ eziokwu banyere onwe anyị, dị nnọọ ka nri ugbu a, m na yi a red uwe elu na ọ bụrụ na ma eleghị anya, mmadụ niile na-eyi red Chiefs kwa ụbọchị, na anyị nwere ike ina-agafe ihe a niile, -emeso hà site ọ bụla ọzọ, na niile na-akpọ “red uwe elu ndị mmadụ”, ma nke ahụ na-na-aga na-eme. Anyị niile kwesịrị abịa na nghọta banyere onye ọ bụla ọzọ dị ka n'alụmdi na nwunye m. Esemokwu mkpa ka a ofu, “Ekwela iwe n'obi lakpuo ụra”. Anyị agbụrụ anọwo na esemokwu maka ogologo. Anyị na-na mgbe n'ezie na-abịa na nghọta, ma ọ bụ mụtara na-akwanyere onye ọ bụla ọzọ n'ụzọ zuru ezu… ugbu a anyị karama mmetụta nwere kụrụ ha mgbali ókè na anyị na-etiwapụ na irrationality. Anyị agbụrụ mgbe n'ezie lụrụ di na nwunye ọ bụla ọzọ, ka na-ekwu okwu. Ọ bụ oge na-alụ… Ị kọwara gị blog mere na ị na-n'ụzọ mmetụta uche nyekwara ke Trayvon Martin Case. Nke a bụ akụkọ banyere gị, nna gị, nna nna gị, na ị nọ na agbụrụ profiled. Ka m gwa gị na, dị ka a na-acha ọcha nwaanyị, M si emeso bụla ọbìa na ịkpachara anya n'agbanyeghị na akpụkpọ ahụ ha. M igbachi m ọnụ ụzọ, clench obere akpa m, na ụmụ tighter n'agbanyeghị ndị m ije gara aga n'okporo ámá. E nwere ize ndụ na-acha ọcha ka ikpe mara, Oghere Usoro egbu, ịtọrọ, etc. mpụ na-eme n'ebe nile dị nnọọ ka e nwere na ihe ọ bụla ọzọ na ụcha akpụkpọ e… Achọrọ m inyere mgbanwe obi na uche. Dị nnọọ n'ihi na onye na-profiled, adịghị eme ka ọ akpa ókè agbụrụ. Ọ bụ n'ihi na e nwere ọrịa ọjọ ogologo anụ ọ bụla na agba na anyị ga-enwe akọ. Ya mere,, ma ọ bụrụ na anyị bi a mma obi ụtọ n'ụwa ebe onye ọ bụla bụ obiọma na ịhụnanya na, anyị ga na-enwe nsogbu m maa, ma nke a abụghị Eluigwe. Chukwu gozie gị, T.L. Ịhụnanya na Peace na na na.
Christopher Zavala • August 19, 2013 na 11:31 Abụ • zaghachi
M na-eche dum Zimmerman / Martin ihe gosiri m na ọ bụ ezigbo mfe m na-ekpe ikpe na dị nnọọ iche na ụfọdụ ndị na-dị nnọọ “egwu na-akpọ ndị mba kaadị.”
Ma, m na-akwanyere Njem. Na m na-achọ ime okwu ya n'obi ma na-agbalị ịghọta na echiche na ahụmahụ nke ndị ọzọ. M ekpe ekpere ka Chineke ga na-agbasa m na-ele na m ọmịiko. Na m ekpe ekpere na ike nke Gospel ga n'otu, dịrị n'otu Church na-enyere anyị nile aka chọta anyị identities na Kraịst ma na-agba ma ọ bụ na klas ma ọ bụ mba…
TJ • August 19, 2013 na 11:32 Abụ • zaghachi
Ị na-anya isi ya dabeere na agba. Ndi ị na-echefu na e nwere na-eto eto na nwa nwoke na-agbasa n'ime ụlọ ebe zimm biri? Nke a nwere ihe ọ bụla na-eme na agba dị nnọọ n'ihi na ọ.
Laura Merrone • August 19, 2013 na 11:32 Abụ • zaghachi
Ee, ahapụ ịga na na na-niile a n'azụ anyị. Ihe ọ bụla mere n'ụbọchị ahụ, nwere ike ị na-agbaghara na-echefu? Nwere ike anyị niile “n'anya onye iro anyị” dị ka a Christian onye ahụ nwere ike ịbụ? Anyị nwere ike ikwu n'eziokwu “ịbọ ọbọ Jehova” bụghị nke anyị,? M a na-acha ọcha nwaanyị ma e site na ụfọdụ ihe ọjọọ ndị mere onwe m ma m na enwetatụbeghị ya site na-agbaghara niile ọzọ aka. Mba anyị kwesịrị na-agwọ na-ọzọ anya mmiri. The ọzọ anyị na-agbaghara, na mma anyị ga-na ịkpa ókè agbụrụ na-enwe ga-agwụ. ugbu a, ma ọ bụrụ na naanị Al Sharpton na mgbasa ozi ga-akwụsị na-eweta elu niile a stof na-emeghe ọnyá, anyị ga-eme…
Sophia • August 19, 2013 na 11:32 Abụ • zaghachi
Chaị! Ọ bụ otú ume ọhụrụ ịnụ Alaeze n'ọnọdụ na a nke. Anyị ga-esi otú ekechi na-arụ ụka na onye ọ bụla ọzọ, na anyị na-echefu na-arịọ Chineke ihe Ọ na-eche. Anyị na-echefu na azịza ndị na-ama na okwu Ya. Anyị na-echefu na anyị kwesịrị ịtụkwasị onye ọ bụla na ihe ọ bụla ma Ya. N'ikpeazụ, anyị na-echefu na ndị na-achọ Ya, ga-enwe ndị chọta eziokwu.
Racism bụ n'ezie ihe nke a na mba. Ọ bụ ihe na anyị nwere ike na-agba ọsọ site na, ma na anyị ga-eche ihu na mgbanwe. Anyị kwesịrị ịma na anyị nwere ike ịgbanwe na-enweghị Jesus Christ. Racism bụ eziokwu nke na-apụta ìhè anyị ikpe ziri ezi usoro, na otú anyị na-eche banyere onye ọ bụla ọzọ, na na otú anyị si emeso onye ọ bụla ọzọ. Ruo mgbe ịkpọasị a na-ewepụ site n'obi anyị, ịkpa ókè agbụrụ ga-anọgide na creep n'ime mkpebi anyị. The gara aga ga-gara aga, mgbe ọ bụ agaghịkwa ugbu a na ọdịnihu anyị. Tupu mgbe ahụ, anyị ekwesịghị ịga na na.
Karla osisi willow • August 19, 2013 na 11:32 Abụ • zaghachi
Ndo, Akọwaara m ya na merụsịrị! Anyị enwekwaghị aka, ma ọ bụghị n'ihi mba!
Karla osisi willow • August 19, 2013 na 11:33 Abụ • zaghachi
Amen Njem. M ọkara Colombian, ọkara English, ọ bụ otú m mfe dị ka m na-acha ọcha, M nwere otu enyi maka mgbe onye a neo natzi si Ireland. Ọ maghị na m bụ ọkara Colombian ruo ogologo oge. Mgbe m ghọtara ihe o kweere, M gwara ya na m bụ ọkara Colombian, ọ jụrụ kwere m. A sị na m nwere darker akpụkpọ, ọ dịghị ihe ga-abụ enyi m na akpa ebe. Ọ nọgidere enyi m. M na-atụ Chineke ji mee nke a ịgbanwe echiche ya, anyị kemgbe furu efu aka site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị ndụ, ma ọ bụghị n'ihi na ụcha akpụkpọ. M ike were ya otú na-egbu mgbu na-ebibi ihe ọ bụ na-abụ nke ekpe ikpe site na agba nke gị akpụkpọ. Ọkpara m hụrụ n'anya n'anya 116. Ọ bụ naanị anọ na ọ dịghị ihe echiche nke ịkpa ókè agbụrụ ma. Daalụ si n'ala ala obi m maka ịbụ oké nlereanya ma ụmụ m. Dị ka m anọ afọ na-echegbu, ụmụ okorobịa ndị na-ele anya dị rappers n'anya Jesus na dị mma :)
Kay • August 19, 2013 na 9:02 pm • zaghachi
Ndị ọzọ m na-agụ ma na-anụ banyere Trayvon Martin ikpe. Ndị ọzọ m na-aghọta na ọtụtụ ike lee ya na a ezi uche / eziokwu ele ihe anya. Anyị na-ele anya na okwu ikpe ndị a site a skewed oghere na-eburu ibu site nke gara aga. M na-ekwu dị ka a nwanyị bụ onye nna nna nna bụ ihe iwu na-akwadoghị kwagara si Mexico, ma e aka site Christ makụọ Eziokwu, abụghị eziokwu ka “m” ahụ ya. Christ jụrụ na anyị ewepụta anyị amata na gụnyere anyị agbụrụ, mmekọahụ, denominational affiliation, etc (Ndị Galeshia 3:28), iji hụ ụwa anyị site na oghere nke Christ…nke dunyere niile eziokwu.
Trayvon Martin, dị ka enyi ya Rachel Jeantel agbụrụ profiled George Zimmerman-akpọ ya a “Creepy a ** cracke,.” na-ahụ wee hoo wakpo GZ. ịghọta, M ọ dịghị ụzọ ịgbachitere Zimmerman n'ihi na O were iwu ya aka, nke biri na ọnwụ nke Martin. My nsogbu na nke a, kemgbe ngafe na a na-nyere na-amachaghị maka akpa ókè agbụrụ ihe na agwa. The eziokwu na nke a bụ ka ndị ikom abụọ ndị si akara na ha omume n'ebe ibe unu, ma TM ọkọkpọhi a ngafe n'ihi na ọ bụ a nwoke nke na agba. Wutere m ma Chineke adịghị asọpụrụ na echiche, n'ihi na ọ bụ onye na bụ kpara akpa na Ẹyụrọde.
Ma ndị ikom ma ndị dokwara ihe ọjọọ, na otú ha si meghachi omume ọ bụla ọzọ, ma anyị na-eche banyere ihe nile bụ eziokwu. Anyị dị nnọọ na-eche banyere eziokwu na kasị mma na-akwado ụzọ anyị chọrọ na-eche.
M na-achọta ịkpa ókè agbụrụ bụ ezigbo nsogbu anyị omenala, ma nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị naanị a ọcha nsogbu, ọ dị nnọọ ka juru ebe niile ndị mmadụ nke na agba dị ka nke ọma. Racism, ga-akwụsị ka ogologo dị ka anyị na-na-naanị banyere anyị “nke” ndị mmadụ. M kwenyere n'ezie na nke a bụ ozi Martin Luther King Obere. kwusara, tupu a emebiela site amasị nke Al Sharpton & Jesse Jackson. Ịdị n'otu na n'otu nwere ike na-eme mgbe ndị ikom na ndị inyom na n'ezie ịhụ site na oghere nke Christ, n'ihi na dị ka Ndị Galeshia 3:28 na-ekwu na anyị niile bụ otu onye “IN” Christ. M na ya onwe kwere n'oge ọ bụla anyị họọrọ-ele onwe anyị na mpụga nke na kpuchie, karịa anyị ma ụma ma ọ bụ n'amaghị ama kwem mgbochi na dividers. Bottom akara Kraịst, ịkpa ókè agbụrụ nwere ike ịkwụsị gị, dị ka ogologo oge ka unu nabata Kraịst n'ọnọdụ. Ma ọ bụghị ya, ị na-ekpe na ziri ezi a ụgha eziokwu na-aga n'ihu na kwem mgbochi n'etiti gị na ndị ọzọ.
Anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị eme chọrọ Eziokwu, ma ọ bụ ka anyị na mmasị ịhụ site na anyị agbagọ oghere, ebe eziokwu bụ ikwu, na na-na-anabata ma ọ bụrụ na ọ na-adaba n'ime anyị kpuchie?
Laron • August 20, 2013 na 4:35 Abụ • zaghachi
Gịnị ewute m karịa ihe ọ bụla bụ otú ịgụ “ụfọdụ” nke kwuru ikenye na a magburu onwe website, Esiri m ike ịhụ ihe dị iche n'etiti ebe a, YouTube ma ọ bụ ọ bụla ọzọ na saịtị ebe folks dị nnọọ amasị na-arụ ụka ha ihe na-eleghara amara na udo. ka, mma comments karịa na mbụ. Gịnị Njem nọ na-agbalị igosi na o yiri ka enwetatụbeghị furu ọtụtụ ndị kwuru.
Dị ka a na-egbu Trayvon, naanị ịhụ otú ya fọrọ nke nta mgbe a onye nke na agba, karịsịa nwa, nke na-abịa na-agbachitere Zimmerman. ugbu a, ihe niile na-adịghị ga-eme na mba, ma ihe na-eme ka a ghara n'ụzọ dị nnọọ mfe elelịkwa. Na nwa ahụmahụ America na otú downplayed. Gịnị mere? Ga ojii nanị gafere eziokwu na ndị nna nna ha ndị onwunwe nke ndị ikom na ndị inyom a na mba? Ga eziokwu na ọchịchị na-agbasa echiche n'ụzọ nkịtị a na-akpọ maka ikpa oke nke ha echefu echefu? Ka ha kwesịrị ichefu na oruru n'ụzọ nkịtị kwuru na ha bụ 3/5 nke a nwoke? Of hà dị mkpa, ga ndị na-abụghị mmadụ nke na agba n'ezie na-eme ka ọ maghị ndị a otu eziokwu nke American akụkọ ihe mere eme dị ka ma ọ bụrụ na e nwere ka usoro nke mmegbu (bụghị naanị àgwà) na ozugbo mmadụ na nwa obodo ndị ọzọ nta dị iche iche? Ọ dị nnọọ mfe ịgwa ndị mmadụ ka ha gafere ya ma ọ bụ tụọ Black ịga nke ọma ná mgbalị mebie agbụrụ mmekọahụ na nke a mere eme akpa ókè agbụrụ obodo. Ma mgbe ị bụ onye enyemaka nke ịkpa ókè agbụrụ (ọbụna ma ọ bụrụ na ọ maghị na) na ị na-emetụta site na ya na-ezighị ezi, ị apụghị izere ezere na-ele ihe anya dị iche iche mgbe ụfọdụ ọbụna na-azọwa onwe mgbe ọ na-abịa ọsọ. Daalụ Jehova na Christ unifies ALL ndị mmadụ. ma, ka, ụka ịnọgide kasị segregated ebe ke America. Ekele unu niile na-agụ na niile na-agọzi.
thefollower • August 20, 2013 na 9:51 Abụ • zaghachi
M na-agụ site na a dum ihe na ihe, arụmụka, ọmịiko okwu. Ọ niile juru m ọgụgụ isi gị na ahụmahụ ihe a niile. Dị ka na mmalite Njem kwuru adịghị akwụsị ekwu okwu banyere ya, Otú ọ dị, M nnọọ n'aka na ya apụtaghị na-arụ ụka.
Abụ m onye 18 afọ-acha ọcha girl, enyi m kasị mma bụ ihe 18 afọ nwa girl, i na-enweghị nwa ikwu, chọọchị m bụ kpam kpam na-acha ọcha, i nwere ọtụtụ nwa enyi, na i na-arụ ọrụ a mara ụlọikwuu ruo underprivileged ụmụaka ebe ihe karịrị ọkara campers bụ nwa….Ahụwo m ụzọ gị niile na-etinye elu ụfọdụ banyere ndụ gị na-eme ka ndị mmadụ na-aghọta na ị na mma ka ndị na-a ole na ole banyere ndụ m…Amụtawo m banyere agbụrụ nke na ọ enye m nsogbu n'obi ya ọbụna mere m ara iji agbaji m aka punching ihe mgbe na-anụ banyere ndị siiri ụfọdụ ndị na-arahụ site na. ya na na na na-na ewere n'elu ihe dị ka igbu ọchụ, ịkpa ókè agbụrụ, ụgha, na omume ihu abụọ, ma ọ bụ maa na na na-emeso onye ọ bụla ọzọ na nkwanye ùgwù na 'i mara mma’ àgwà m hụrụ na ebe a. M nwere ike na-amaghị a dum ọtụtụ banyere ụwa na ihe niile nke ya siiri ma ama m ihe ole na ole. M maara na nke mbụ niile Chineke kere ihe niile nwoke hà na dị ka enyi nke ndị emeso ya na ịkpa ókè agbụrụ anyị pụrụ ma ga-arapara ruo ha. M na-maara na Chineke bụ onyeikpe ezi omume na ọtụtụ n'ime unu onye rụrụ ụka na ebe a sị na ị nọ Kraịst…ihere megbuo gị… nke a mere ka ndị dị otú ahụ a nkewa na bụghị bụghị nnọọ n'etiti ọcha / nwa / Spain ndị mmadụ n'agbata bụla onye na-eche na ọ / ọ maara ihe karịa onye ọ bụla onye na-adịghị ekweta na ha. Anyị bụ ụmụ Chineke, naanị onye maara nnọọ ihe mere n'abalị Treyvon e gburu, ya mere, ònye ka anyị ga-arụ ụka onye bụ onye nri ma ọ bụ na-ezighị ezi?
John 8:7 Ya mere, mgbe ha nọ na-arịọ ya, o weliri onwe ya, si ha, “Ọ na-enweghị mmehie n'etiti unu, ka ya mbụ igba a ya nkume.”
M na-adịghị na-anụ na-agwa gị uche m na ikpe na m na ọ bụghị na-anụ na-ekpe ikpe gị. M chere emetụkwa-echetara gị na nri ma ọ bụ na-ezighị ezi anyị na-akpọ ka ịhụ ndị mmadụ n'anya ma na-ahapụ nanị onwe nganga n'elu-emeri esemokwu na-adịghị anyị na-emeri. John 8:7 bịara cheta n'ime akpa iri ihe na nọrọ n'ebe ahụ ruo ọgwụgwụ. Ọ bụrụ na ị na-aga na-arụ ụka na-eme ya n'ụzọ ịhụnanya ma ọ bụ, ebe a bụ a na-akpa ọchị echiche, ma ọ bụrụ na ị maara na ị nwere ike na-arụ ụka na a n'ụzọ na-ka na-akwanyere ya ùgwù ADỊGHỊ ARỤ ỤKA! Ọ bụghị ka anyị ka anyị ikpe ma ọ bụ ka free onye ọ bụla na hoo haa ya keiberibe-eme dị ka ọ bụ. Daalụ maka ewere a guzoro na-ekere òkè gị echiche! Dị ka m kwuru m n'aka na unu niile bụ ọgụgụ isi na-atọ ụtọ ndị mmadụ ma ọ bụrụ na anyị anaghị egosi ịhụnanya Chineke na ọbụna site na echiche anyị mere na ụwa ga-ndị na-eche Kraịst bụ bara uru mgbe anyị na-adịghị eme dị iche iche site na ike nke ụwa?
ọ • August 20, 2013 na 11:31 Abụ • zaghachi
Anyị bụ ndị kwere ekwe, Wee nke oyiyi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ndị na-na-aghọta na anyị na mmadụ niile bụ ndị ajọ omume, mmehie, gbapụtara naanị site na amara nke Chineke site na okwukwe na Jizọs Kraịst bụ onye na-iwe nke Nna, n'ihi na mmehie anyị, n'elu obe n'ihi anyị. Gịnị ka anyị nwere enweghị eziokwu? The eziokwu kwesịrị ịbụ ihe na-achịkwa mkparịta ụka a, bụghị uche. Anyị akụkọ ihe mere eme na-agwa akụkọ na-enye azịza ma ọ bụrụ na anyị dị njikere-eme ihe n'eziokwu.
M ga-adịghị ọbụna na-enye m agbụrụ njirimara. N'ihi na ọ bụ na-adịghị mkpa ka mkparịta ụka a. M n'anya nke Jehova, na onye na-amụ iwu, ikpe ziri ezi, sociology, na ndị mmanye iwu na.
Lee anya na eziokwu na stats. The American Justice usoro dị anya n'ebe colorblind. Ọ merụsịrị reeks mmehie nke mmegbu, anya n'ihu, na ajọ omume. Classism bụ nnọọ dị ka ihe a na-akpata ya dị ka ịkpa ókè agbụrụ bụ. Ma na-ekwu ịkpa ókè agbụrụ adịghị adị, ma ọ bụ na-egwu a akụkụ na ihe ga-esi nke a, bụ a ndudue. Ọ bụ ihe na-eche na ihe na-ahọrọ kpamkpam eleghara ihe ndị mere anyị ikpe ziri ezi usoro na ihu ọma nke ihe ọ ga-achọ na-ezi.
Racism adị. Ọ bụ ndụ ma na-ọma na-arụsi ọrụ ike.
ekele, anyị na-ejere Chineke maara ihe nile. Ònye dị ike ịgwọ ndị ga-Ya. Ònye bụ ikwesị ntụkwasị obi na-agwọ ilu na iwe. Na bụ onye nyere anyị ike site n'ekpere na ihe.
-Eso gị na ụmụ gị na eziokwu. Nke bụ eziokwu bụ na agbụrụ ha ga-abụ akụkụ nke ihe ha bụ, (na-ekpebi otú ụfọdụ ndị ga na-ele ha) ogologo oge ka ha na-ebi.
Otuto diri Chineke na-achọ ọ bụghị mgbe ihe mmadụ na-eme.
PastorNorm • August 24, 2013 na 10:35 pm • zaghachi
The ihe m kweere na Chineke chọrọ ka anyị na-eme na ihe a merenụ na ndị niile ọzọ bụ ndị anyị anọgide na-anụ banyere bụ ihe Njem si. Kpee ekpere maka niile ọzọ aka ma zọpụta nke ihe mere ma ọ bụ na-nri ma ọ bụrụ na ha bụ Ndị Kraịst. Ihe onye ọ bụla Agbaghara bụ na Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile na-akpọ Trayvon nọmba maka ihe ọ bụla mere O nwere. O NWEGHỊ onye na-aga ịgbanwe na na abalị. Chineke we si, “Trayvon, ọ bụ maka gị” dị nnọọ ka o meere Tupac na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ BỤRỤ na Trayvon e zọpụta, Chineke otuto, ọ bụ ugbu a Jizọs. ọ bụrụ na ọ bụghị, n'ụzọ dị mwute na ọ na-ere ọkụ n'ime Hell. Cheta, Eccl. 12:13 ” Ka ayi nuru nkwubi okwu nke okwu ahụ n'ozuzu: egwu Chineke, na na-na o nyere n'iwu: n'ihi na nke a bụ kpukpru owo.
muchneededmoderator • September 24, 2013 na 5:04 pm • zaghachi
M banyere nke a website, agụ dị iche iche blọọgụ posted na a gbara ume site iche iche posts ruo mgbe m bịara onye nke a. The comment eri na-enwe n'okpuru bụ ma na-enye nsogbu na obi wrenching. Kama na-agụ jụụ, ndidi, amamihe na Chineke hiwere comments, M na mberede hụrụ onwe m erikpuo na a oké ụzụ nke ịkpa ókè agbụrụ na ịkpọasị. Na ihe niile a site kwesŽrŽ Kraịst bụ ndị o yiri ka na-eche na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na-agwa onye ọ bụla ọzọ bụ onye ma ọ bụ bụghị a Kraịst na ma ma ọ bụ ekpere ha ga-eru ntị nke Chineke ma ọ bụ dị ka Marvin etinye ya: “…ekpere gị eleghị anya ga-agaghị eme ka ọ gara aga gị n'uko.” Ọtụtụ n'ime unu na-ekwu ugboro ugboro na ị na-adịghị na agha na-adịghị na-achọ iji kpasuo ya iwe onye ọ bụla, na ị nanị nwere onwe gị echiche na na ee, ha nwere ike,. Fine, na anyị nile nwere echiche anyị na anyị niile na-eche ike na ihe n'okwu ụfọdụ ma ma ọ bụ anyị na-ahụ ndị ọzọ na-ekweta. Nke ahụ bụ a ziri ezi na a nnwere onwe anyị nwere dị ka ndị America na-enwe ma na m anya na ọ dịghị ihe e si anyị. Ma mgbe niile kụọ ọzọ nwanne na Kraịst na-ekwusa ozi ọma na onye ọ bụla ọzọ dị ka ma ọ bụrụ na unu onwe unu maara ihe kasị mma dị ọcha ihu abụọ. Anyị dị ka ndị Kraịst kwesịrị ịma mma karịa onye ọ bụla na anyị bụ ndị na ụmụ mmadụ, anyị na-emehie ihe, anyị na-eme na mpako na nganga, anyị na-kpuo ìsì ihe n'okwu ụfọdụ nanị site anyị onwe anyị mmehie na n'agbanyeghị otú ike anyị na-agbalị, ndị mepere ga-enwe mgbe nile na e nwere n'ihi na anyị na-adawo, mmehie, ụmụ mmadụ. Ọ bụ n'ihi na ihe mere na Chineke bụ anyị ikpe. Ọ dịghị anyị eche banyere, ma Chineke na-ahụ na ihe Chineke naanị. Iji mee ihe n'ebe ọ bụla ọzọ otú hatefully ma na-akpọ onwe unu “ụmụnna” bụ pathetic na kacha mma.
Marvin, -eme ihe n'eziokwu na m nwere iji kwụsị na-agụ banyere ọkara n'ụzọ ala ndị posts nanị n'ihi na m na-apụghị afo otú i wee na-emeso gị “na ụmụnna” niile mgbe n'ịnọgide gị egbe, adịwanye nanị ire ọkụ na mgbe na-azọrọ na ị bụ bụghị iwe. Gụọ gị onwe gị na posts, sir. Ma m na-ekweta na ị ma ọ bụ na-adịghị mkpa, ihe dị mkpa bụ otú i si emeso nwanna gị. Gụọ site na posts, na ị bụ nnọọ (dịkarịa ala ruo mgbe m kwụsịrị ịgụ banyere ruo ọkara ala) kasị obodo onye na a na eri. Ị na-agwa ndị ọzọ ha na-enweghị ikike agwa gị otú e si ekpe ekpere, mgbe ahụ ị na-atụ aro na Chineke adịghị ọbụna anụ ekpere ha. Ònye ka ị na-atụ aro ihe dị otú ahụ? Ị bụghị Chineke. Rịdata ocheeze gị na mgbe ahụ na-ekwu okwu ụmụnna gị na ịhụnanya kama ndidi na iwe.
Racism bụ jọrọ njọ na m na-ahụ ya n'ebe nile na mgbe nile. M ya asị n'ihi na otú ọtụtụ dị iche iche ihe na ọtụtụ ọkwa dị iche iche. Ma a ga-enweghị ọgwụgwọ ọrịa a ruo mgbe nile n'akụkụ na-aghọta na e nwere ịkpa ókè agbụrụ n'agbanyeghị ihe na agba akpụkpọ gị bụ NA nke ahụ ọ bụghị ihe niile ndị mmadụ asị ndị ọzọ nanị n'ihi na ha na anụ ma ọ bụ na ọdịbendị ha dị iche na nke ha onwe ha. Dị ka a Christian m nnọọ mwute ịhụ otú ịkpa ókè agbụrụ nke ọma ụmụnna m. M mwute na anyị nwere ịhụ a “akpa ókè agbụrụ” gburugburu n'akụkụ ọ bụla na dị nnọọ iche na ndị mmadụ na-akpa ókè agbụrụ n'ihi ha akpụkpọ bụ ọcha. Anyị kwesịrị ịhụ ndị Kraịst ndị ọzọ na ọtụtụ na agba na omenala. kwụsị iti mkpu “akpa ókè agbụrụ” na onye ọ bụla ọzọ na nanị asị “nwanne”. M na-ahụ ndị ọzọ ịkpa ókè agbụrụ na-aghọ a nsogbu kwa ụbọchị nanị n'ihi na otu ma ọ bụ ndị mkpu “akpa ókè agbụrụ” amadịghị onye ha na-agwa okwu. Ọ bụrụ na ị na-ahụ a na nwanne na-eme a akpa ókè agbụrụ ụzọ mgbe niile n'aka lebara ya na-ekwu okwu ka onye, naanị. Ma kwusi ibe akwa wolf mgbe e nweghị wolf.
Hụrụ ibe ha n'anya dị ka Kraịst hụrụ n'anya ụka. Nke ahụ bụ niile anyị kwesịrị icheta mgbe ọ na-abịa na-emeso ibe.
aha: Ọ bụghị site Sight, Ọ bụghị site Nkasi Obi: Agbamume Ndị tụnyere Churches : The Front Owuwu Ụzọ Mbata